3001s သင်းအုပ်ဆရာ Rick Warren နှင့်အတူ &quot;အခက်အခဲများကိုကိုင်တွယ်သောယုံကြည်ခြင်း&quot; images and subtitles
- ဟိုင်းလူတိုင်းငါ Rick Warren ပါ၊ Saddleback ဘုရားကျောင်းနှင့်စာရေးဆရာမှာသင်းအုပ်ဆရာ "The Purpose Driven Life" ၏ဟောပြောသူနှင့်ဟောပြောသူ "Daily Hope" အစီအစဉ်တွင်။ ဒီထုတ်လွှင့်မှုသို့ညှိခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီအပတ်ကကယ်လီဖိုးနီးယား၊ Orange County မှာ၊ အစိုးရကသူတို့တားမြစ်ထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် မည်သည့်အရွယ်အစားမဆိုမျိုးအားလုံးအစည်းအဝေးများ လ၏အဆုံးတိုင်အောင်။ အိမ်၌ရှိသော Saddleback ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကြိုဆိုပါသည်။ မင်းဒီမှာရောက်နေလို့ဝမ်းသာပါတယ် ထိုအခါငါဗီဒီယိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆုံးမbeဝါဒပေးလိမ့်မယ် ယခုနှင့်ဤ COVID-19 အကြပ်အတည်းအဆုံးသတ်သည့်အခါ။ အိမ်၌ရှိသော Saddleback ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကြိုဆိုပါသည်။ ထိုအခါငါအပတ်တိုင်းငါ့နောက်သို့လိုက်ရန်သင့်အားဖိတ်ကြားချင်တယ်, \_ t အတူတူဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုန်ဆောင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါ။ ငါတို့မှာတေးဂီတနဲ့ဝတ်ပြုမှုအတူတူရှိလိမ့်မယ်၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမှောက်လှန်သဖြင့်၊ ငါထင်သည်အတိုင်းငါသိ၏ စကားမစပ်, ပထမ ဦး ဆုံးငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြရန်လိုအပ်သည်။ ငါသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုအစည်းအဝေးဖျက်သိမ်းရန်မယ်လို့နေသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာငါမှာ Saddleback စတူဒီယိုရှိတယ် ငါ့ကားဂိုဒေါင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် တကယ်တော့ဒါကိုကျွန်ုပ်၏ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာ taping လုပ်တယ်။ ငါ့အရိုးနည်းပညာအမှုထမ်း။ ယောက်ျားများလာပါ၊ လူတိုင်းကိုမင်္ဂလာပါ။ (ရယ်သံများ) သူတို့ကဒီမှာကကျော်ရွှေ့ကူညီရန်နှင့်ကအားလုံးကို set up ဒါကြောင့်မင်းတို့အပတ်တိုင်းစကားပြောနိုင်အောင် ယခုတွင်ငါသည်ငါတို့ဖုံးလွှမ်းသင့်တယ်အဘယ်အရာကိုစဉ်းစားအဖြစ် ဒီ COVID-19 အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း၊ ငါယာကုပ်၏စာအုပ်ချက်ချင်းစဉ်းစားမိတယ်။ ယာကုပ်ကျမ်းသည်အလွန်သေးငယ်သောစာအုပ်ဖြစ်သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းအဆုံး၌ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါအရမ်းအသုံးဝင်ပြီးအရမ်းအသုံးဝင်တယ်၊ ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုဘဝမတည်မြဲတဲ့အချိန်မှာသက်ရောက်စေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုလို့ငါခေါ်လိုက်တယ်။ ထိုအခါငါတစ်ခုခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါထင်, ဘဝမတည်မြဲသည့်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သောယုံကြည်ခြင်းရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအခုသိပ်မကောင်းဘူး။ ဒီတော့ဒီနေ့ဒီရက်သတ္တပတ်ငါတို့စတော့မယ် အတူတူခရီးတစ်ခုကသင့်ကိုအားပေးပါတယ် ဒီအကျပ်အတည်းကတဆင့်။ ဒီမက်ဆေ့ခ်ျတွေထဲကတခုခုကိုမင်းမလွတ်စေချင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျိမ်းစ်စာအုပ်ကအဓိကစာအုပ် ၁၄ လုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားလို့ပဲ ဘ ၀ ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များ၊ ဘဝ၏အဓိကပြissuesနာ ၁၄ ခု၊ သင်တို့တွင်ရှိသမျှသောတစ်ခုတည်းသောဒေသများ 14 မင်းဘ ၀ မှာမင်းနဲ့ဆက်ဆံရမယ် ပြီးတော့မင်းကအနာဂတ်မှာမင်းနဲ့ဆက်ဆံရတော့မယ်။ ဥပမာ၊ ယာကုပ်အခန်းကြီး ၁ တွင် ငါ့ကိုဒီစာအုပ်ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ပါရစေ။ ၎င်းသည်အခန်းလေးခန်းသာရှိသည်။ အခန်းတစ်, ကပထမ ဦး ဆုံးအခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်။ ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ငါတို့သည်ယနေ့အကြောင်းပြောမယ်။ သင်၏ပြforနာများအတွက်ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်ကားအဘယ်နည်း။ ထို့နောက်ရွေးချယ်မှုအကြောင်းပြောသွားသည်။ မင်းဘယ်လိုတွေးနေလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာမင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ သင်မည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်ကိုသင်မည်သို့သိသနည်း။ ပြီးတော့သွေးဆောင်မှုအကြောင်းပြောထားတယ်။ ငါတို့ဘုံသွေးဆောင်မှုကိုသင်ဘယ်လိုအောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင် မင်းကိုရှုံးနိမ့်စေတဲ့ပုံပေါ်နေတဲ့ဘဝမှာ။ ပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်အကြောင်းပြောတယ်။ ထို့ပြင်သမ္မာကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သို့ကောင်းချီးပေးနိုင်သည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းကိုဖတ်ရုံသာမကကောင်းချီးခံစားရပါလိမ့်မည်။ ဒါကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပါ။ ငါတို့သည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းသူတို့အားကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အခန်း (၂) တွင်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်။ လူတွေကိုမင်းဘယ်လိုပြုမူဆက်ဆံတယ်ဆိုတာငါတို့ကြည့်ရှုမယ်။ ပြီးတော့လူတွေအိမ်မှာပဲနေရမယ်၊ မိသားစုအတူတကွ၊ ကလေးများ၊ အမေများနှင့်အဖေများ၊ ပြီးတော့လူတွေဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အာရုံစူးစိုက်နေကြတယ်။ ဒါကဆက်ဆံရေးအပေါ်အရေးကြီးသောသတင်းစကားဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပြောထားသည်။ အဲဒီလိုမခံစားရဘူးဆိုရင်သင်ဘယ်လိုဘုရားသခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်ကိုးစားပါသလဲ နှင့်အမှုအရာမှားလမ်းကိုသွားနေကြသည်? ဒါကအခန်း ၂ မှာပါတယ်။ အခန်းသုံး၊ စကားပြောဆိုမှု၏စွမ်းအား။ ဤရွေ့ကား, ဒီအရေးအပါဆုံးကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည် သင်၏နှုတ်ကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲသည်ကိုသမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအကျပ်အတည်းကြုံနေရသည်ဖြစ်စေမအရေးကြီးသည်။ ပြီးတော့ချစ်ကြည်ရေးအကြောင်းပြောသွားတယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းလက်တွေ့ကျတဲ့အချက်အလက်တွေပေးတယ် ဘယ်လိုပညာရှိခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်သလဲ နှင့်ပညာမဲ့သောမိတ်ဆွေများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒါကအခန်း ၃ ပါ။ အခန်းလေးသည်ပconflictိပက္ခဖြစ်သည်။ အခန်းလေးမှာပြောရမယ် ဘယ်လိုငြင်းခုံမှုကိုသင်ရှောင်နိုင်သလဲ ဒါကတကယ့်ကိုအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်။ တင်းမာမှုများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ လူတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှအငြင်းပွားမှုတွေကိုသင်ဘယ်လိုရှောင်နိုင်မလဲ။ ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုစီရင်ခြင်းအကြောင်းပြောတယ်။ ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုကစားမလဲ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်ငြိမ်းချမ်းမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည် ငါတို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်။ ပြီးတော့အနာဂတ်အကြောင်းပြောတယ်။ အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲ။ ဒါကအခန်းလေးမှာအားလုံးပါပဲ။ ယခုငါနောက်ဆုံးအခန်း၊ အခန်း ၅ တွင်ငါပြောခဲ့သည် အမှန်တကယ်တွင်အခန်းလေးခန်းရှိသည် ဂျိမ်းငါးအခန်းကြီး။ ငါတို့ငွေအကြောင်းပြောမယ် ပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ဘယ်လိုပညာရှိနိုင်မလဲဆိုတာပါ။ ပြီးတော့ငါတို့သည်းခံခြင်းကိုကြည့်မယ်။ သင်ဘုရားသခင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ဘာလုပ်သနည်း။ ထိုင်ရန်အခက်ခဲဆုံးအခန်း သင်မြန်မြန်ရောက်နေချိန်တွင်ဘုရားသည်ဘုရားမဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ငါတို့ဆုတောင်းခြင်းကိုကြည့်မယ်၊ ဒါကနောက်ဆုံးကြည့်ရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ဆုတောင်းသနည်း။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အဖြေရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်ဟုသမ္မာကျမ်းစာကဆိုသည်။ ဆုတောင်းခြင်းမပြုသောနည်းရှိသည်။ ငါတို့သည်ကြည့်ရှုမယ်။ အခုဒီနေ့ပထမအခန်းငယ် ၆ ကိုကြည့်ရအောင် ယာကုပ်၏စာအုပ်။ သင့်မှာသမ္မာကျမ်းစာမရှိဘူးဆိုရင်မင်းကို download လုပ်ပါ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အပြင်အဆင်၊ သင်ကြားရေးမှတ်စုများ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကြည့်ရမယ့်ကျမ်းချက်တွေအားလုံးပေါ့ သင့်ရဲ့အကြမ်းဖျင်းအပေါ်ရှိပါတယ်။ ယာကုပ်အခန်းကြီး ၁၊ ပြီးတော့သမ္မာကျမ်းစာကဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါပြောထားတယ် သင့်ရဲ့ပြproblemsနာများကိုကိုင်တွယ်ရန်ရှိခြင်း။ ပထမ၊ ယာ ၁ ​​း ၁ မှာဒီလိုပြောထားတယ်။ ဘုရားသခင်နှင့်အရှင်ယေရှုခရစ်၏ကျွန်ငါယာကုပ်သည်၊ လူမျိုးတို့တွင်အရပ်ရပ်ကွဲပြားသော ၁၂ မျိုးစေ့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့။ အခုငါ့ကိုဒီမှာတစ်မိနစ်ခေတ္တနားပြီးပြောခွင့်ပြုပါ ဒီအရှိဆုံးနားလည်နိဒါန်းဖြစ်ပါတယ် သမ္မာကျမ်းစာထဲကမည်သည့်စာအုပ်၏။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဂျိမ်းစ်ဆိုတာမင်းသိလို့လား။ သူသည်ယေရှု၏မိတူဖကွဲညီဖြစ်သည်။ မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်မာရိနှင့်ယောသပ်၏သားဖြစ်သည်။ ယေရှုသည်မာရိ၏သားဖြစ်သည်။ သူသည်ယောသပ်၏သားမဟုတ်ခဲ့ပါ။ အကြောင်းမှာဘုရားသခင်သည်ယေရှု၏ဖခင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကမာရိနဲ့ယောသပ်တို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ် နောက်ပိုင်းတွင်ကလေးများစွာမွေးဖွားခဲ့ပြီးသူတို့၏အမည်များကိုပင်ပေးခဲ့သည်။ ဂျိမ်းစ်သည်ခရစ်ယာန်မဟုတ်ပါ။ သူသည်ခရစ်တော်နောက်လိုက်မဟုတ်ပါ။ သူကသူ့မိတူဖကွဲကိုမေရှိယလို့မယုံဘူး ယေရှု၏ဓမ္မအမှုတစ်ခုလုံးအတွင်း။ သူကသံသယရှိတယ်။ ညီအစ်ကိုကမယုံဘူး အစ်ကိုကြီးအတွက်တော့ဒါကရှင်းရှင်းလေးပါ။ အဘယ်အရာကယာကုပ်အားယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်စေသနည်း။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း။ ယေရှုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာသောအခါ ရက်ပေါင်း ၄၀ ကြာအောင်ယာကုပ်သည်သူ့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ သူသည်ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည် ယေရုရှလင်ဘုရားကျောင်းမှာ။ ဒီတော့ဘယ်သူ့ကိုမှနာမည်ပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကဒါပဲ။ ယေရှုနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ဂျိမ်းစ်လို့သူပြောနိုင်တယ်။ ယေရှု၏မိတူဖကွဲညီယာကုပ်။ ကြီးပြင်းလာတဲ့ယေရှုရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းယာကုပ်။ အဲဒီလိုမျိုးအရာတွေ၊ ဒါပေမယ့်သူမလုပ်နိုင်ဘူး။ သူသည်ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်ဂျိမ်းစ်ကိုရိုးရှင်းစွာပြောလိုက်သည်။ သူကရာထူးကိုဆွဲမထားဘူး၊ သို့သော်အခန်းငယ် ၂ ၌သူစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည် သင်၏ပြinနာများအတွက်ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်တော်မူချက်၏ဤပထမဆုံးပြissueနာ။ မင်းကိုဖတ်ပြပါရစေ သူက, အခါစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုကပြောပါတယ် မင်းတို့ဘ ၀ ထဲကိုလူစုလူဝေးကို ၀ င်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းအဖြစ်သူတို့ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ သူတို့သည်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးရန်လာသည်ကိုသတိပြုပါ။ နှင့်သင်၌ခံနိုင်ရည်၏အရည်အသွေးထုတ်လုပ်ရန်။ သို့သော်ထိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်တိုင်အောင်ထိုဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လုပ်ပါ အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပြီးသင်ဟာလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ရင့်ကျက်ဇာတ်ကောင်များနှင့်သမာဓိရှိ၏ အဘယ်သူမျှမအားနည်းအစက်အပြောက်နှင့်အတူ။ ၎င်းသည် Phillips ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်သည် ယာကုပ်အခန်းကြီး ၁ မှအခန်းငယ်နှစ်ခုမှ ၆ အထိ။ ယခုသူသည်သင်၏ဘဝထဲသို့စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးလာသောအခါသူကပြောပါတယ် သူတို့ကမင်းတို့ဘ ၀ ထဲကို ၀ င်လာပြီးသူတို့ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်တယ် ကျူးကျော်သူများအဖြစ်သူတို့ကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်ကြိုဆိုပါ။ သူကမင်းမှာပြproblemsနာတွေရှိတယ်၊ မင်းမှာပြproblemsနာတွေရှိတယ်၊ ပြproblemsနာတက်တယ်။ မင်းစဉ်းစားနေတာကိုအခုငါသိပြီ သငျသညျသငျသညျငါ့ကိုနောက်နေပါသလား COVID-19 ကိုဘာကြောင့်နှစ်သက်သင့်တာလဲ။ ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်ဤစမ်းသပ်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်ကြိုဆိုသင့်သနည်း။ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ဤတစ်ခုလုံးကိုသဘောထားသော့ချက် အကျပ်အတည်း၏အလယ်၌အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထား နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၊ သူက, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဤစမ်းသပ်မှုမျိုးကပြောသည် မင်းတို့ဘ ၀ ထဲကိုလူစုလူဝေးကို ၀ င်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါ၊ သူတို့ကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်ကြိုဆိုပါ၊ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစုံစမ်းခြင်းငှါလာ၏။ ပြီးတော့သူဆက်ပြောတယ်၊ သူတို့ဘဝမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာပါပဲ။ သူပြောနေတာကမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုပဲ ဒီ COVID-19 ကပ်ရောဂါမှာကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်ရှိသောရက်သတ္တပတ်များ အခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိနေတုန်းပဲ လူအမျိုးမျိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည် စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ဆိုင်တွေပိတ်နေကြတယ်၊ သူတို့ကျောင်းတွေပိတ်နေကြတယ်၊ သူတို့သည်အသင်းတော်များကိုပိတ်ပစ်ကြသည်၊ သူတို့ကဘယ်နေရာကိုမဆိုပိတ်ထားတယ် လူတွေစုရုံးနေကြပြီး၊ Orange County မှာလိုမျိုးပေါ့။ ဒီလမှာဘယ်သူ့ကိုမှတွေ့ခွင့်မရဘူး။ သူကပြောပါတယ်, ဒီပြproblemsနာတွေကိုကိုင်တွယ်၌သင်တို့၏အောင်မြင်မှု သင်၏နားလည်မှုဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ သင်၏နားလည်မှုဖြင့် ထိုပြproblemsနာများအပေါ်သင်၏သဘောထားဖြင့်။ သင်သိသောအရာ၊ အခုဒီကျမ်းပိုဒ်ရဲ့ပထမဆုံးအချက်ကိုမင်းနားလည်စေချင်တယ် ဘုရားသခင်သည်ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးချက်လေးခုပေးသည်ဟုဖြစ်သည်။ ခင်ဗျားတို့ဒီစာအုပ်တွေကိုရေးချချင်တယ်။ သင်၏ဘဝပြproblemsနာများနှင့်ပတ်သက်သောသတိပေးချက်လေးခု၊ ငါတို့အခုငါတို့ဖြတ်သန်းနေတဲ့အကျပ်အတည်းတွေပါပါတယ်။ နံပါတ်တစ်သူပြfirstနာများမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ ပြနာများမလွှဲမရှောင်ဖြစ်ကြ၏။ အခုသူဘယ်လိုပြောနေတာလဲ။ သူကပြောပါတယ်, စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးလာသောအခါ။ စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးရှိမယ်လို့သူမပြောခဲ့ဘူး၊ သင်အဲဒါကိုရေတွက်နိုင်တယ်။ အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသောနေရာသည်ဤကောင်းကင်ဘုံမဟုတ်ပါ။ ဤသည်အရာအားလုံးကျိုးပဲ့ဘယ်မှာကမ္ဘာမြေဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူကမင်းမှာပြproblemsနာတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောနေတယ်၊ သင်အခက်အခဲတွေရှိလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကိုသင်အားကိုးနိုင်ပါတယ်၊ သင်အဲဒီမှာစတော့ရှယ်ယာဝယ်နိုင် အခုတော့ဂျိမ်းစ်တစ်ယောက်တည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အားလုံးသမ္မာကျမ်းစာကတဆင့်ကပြောပါတယ်။ သခင်ယေရှုကလောက၌သင်သည်စမ်းသပ်မှုများကြုံတွေ့ရမည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည် စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံကြလိမ့်မည်။ သူကမင်းဘဝမှာပြhaveနာတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ဒီတော့ပြhaveနာတက်ရင်ဘာကြောင့်အံ့သြကြတာလဲ။ ပေတရုကမအံ့သြပါနဲ့လို့ပြောတယ် သငျသညျမီးစမ်းသပ်မှုတွေရှောက်သွားသည့်အခါ။ အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အလားမလုပ်ပါနှင့်ဟုဆိုသည် လူတိုင်းသည်ခက်ခဲကျပ်တည်းသောကာလကိုဖြတ်သန်းရကြသည်။ ဘဝဟာခက်ခဲတယ်။ ဤသည်ကောင်းကင်မဟုတ်, ဒီကမ္ဘာမြေ။ ဘယ်သူမှကိုယ်ခံစွမ်းအားမထား၊ ဘယ်သူမှလျှပ်ကာမထားဘူး၊ ဘယ်သူမှကင်းလွတ်တယ်။ မင်းပြproblemsနာတက်တော့မယ်လို့သူကပြောပါတယ် သူတို့မလွှဲမရှောင်သောကြောင့်။ ငါကောလိပ်တက်တုန်းကငါမှတ်မိသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကငါဖြတ်သန်းခဲ့သည် တကယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေ။ ငါဆုတောင်းပဌနာပြုစပြုပြီး၊ စမ်းသပ်မှုတွေအစားပိုဆိုးလာတယ်။ ပြီးတော့ငါ "ဘုရားသခင်၊ ငါတကယ်စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်" လို့ပြောခဲ့တယ် နှင့်ပြproblemsနာများပိုမိုဆိုးရွားတယ်။ ပြီးတော့ငါ "ဘုရားသခင်၊ ငါတကယ်စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်" လို့ပြောခဲ့တယ် သူတို့သည်လည်း သာ၍ ဆိုးသဖြင့်၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲ ကောင်းပြီနောက်ဆုံးခြောက်လခန့်အကြာမှာ၊ ငါအစပြုတာထက်ပိုပြီးစိတ်ရှည်သည်းခံခဲ့တယ် ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်ကိုသည်းခံခြင်းသင်ပေးခဲ့တယ် သူတို့အားအခက်အခဲများမှတဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ပြproblemsနာတွေကရွေးချယ်စရာသင်တန်းမဟုတ်ပါ မင်းဘဝမှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာ ဟင့်အင်း၊ သူတို့လိုအပ်တယ်၊ မင်းတို့သူတို့ထဲကရွေးလို့မရဘူး။ ဘ ၀ ကျောင်းမှဘွဲ့ယူရန် သငျသညျခက်ခဲခေါက်ကျောင်းကိုရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျသူတို့မလွှဲမရှောင်များမှာပြproblemsနာများကိုဖြတ်သန်းသွားမယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကဤသို့ဆိုထားသည်။ ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာကပြောထားသည်မှာဒုတိယအချက်ဖြစ်သည်။ ပြနာတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဆိုလိုတာကသူတို့အားလုံးအတူတူမဟုတ်ဘူး။ သငျသညျတူညီတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအသီးအသီးမရကြဘူး။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောသူတို့ကိုအများကြီးရ။ သူတို့ကိုသင်ရရုံသာမကမတူညီသောအရာများရရှိသည်။ သူကသင်ရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့အခါ၊ မင်းမှာပြproblemsနာအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ သင်မှတ်စုများကိုရေးနေလျှင်၎င်းကိုသင်ဝိုင်းနိုင်သည်။ စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးသည်သင်၏ဘ ၀ သို့ရောက်သောအခါ။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါဥယျာဉ်မှူးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ငါဒီမှာအစိုးရကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ခွဲခြားခဲ့သည် ပေါင်း ၂၀၅ မျိုး။ သူတို့ထဲက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာငါ့ဥယျာဉ်မှာကြီးထွားလာတယ်။ (ရယ်သံများ) ငါဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကြီးထွားလာတဲ့အခါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Warren ၏ပေါင်းပင်လယ်ယာအတွက်ဝန်ခံချက်ကိုယူသင့်ပါသည်။ သို့သော်ပေါင်းပင်များစွာရှိသည်။ စမ်းသပ်မှုများစွာရှိသည်။ ပြproblemsနာများစွာရှိပါတယ်။ သူတို့ကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာကြတယ်။ အရသာ ၃၁ ခုကျော်ရှိသည်။ ဒီစကားလုံးကဒီမှာပြောထားတဲ့နေရာအနှံ့ မင်းဘဝမှာစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တကယ်တော့ဂရိဘာသာမှာ multicolored ကိုဆိုလိုတယ်။ တနည်းအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အရိပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ် မင်းရဲ့ဘဝမှာမင်းအဲဒီလိုသဘောတူမှာလား။ စိတ်ဖိစီးမှု၏အရိပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့အားလုံးအတူတူမကြည့်ကြဘူး ငွေရေးကြေးရေးဖိစီးမှု၊ ကျန်းမာရေးစိတ်ဖိစီးမှုရှိတယ်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုရှိတယ်၊ အချိန်စိတ်ဖိစီးမှုရှိတယ်။ သူကသူတို့အားလုံးကွဲပြားတဲ့အရောင်တွေလို့ပြောနေတာ။ သို့သော်သင် ထွက်၍ ကားဝယ်ပါကသင်လိုချင်လျှင် ထုံးစံအရောင်တစ်ခု, ထို့နောက်သင်ကစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ ပြီးတော့သူလုပ်တဲ့အခါမှာ၊ ခင်ဗျားစိတ်ကြိုက်အရောင်ရလာလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ဒီမှာသုံးတဲ့စကားလုံးပဲ။ ၎င်းသည်သင်၏ဘဝ၌အရောင်ရှိပြီးရောင်စုံစမ်းသပ်မှုများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်သူတို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ပြproblemsနာအချို့သည်အမှန်တကယ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ ငါတို့တွေအားလုံးအတူတူကြုံခဲ့ရတယ်၊ ဒီတစ်ခုလိုပဲ COVID-19 ။ ဒါပေမယ့်သူကပြproblemsနာတွေကမတူကွဲပြားလို့ပြောနေတာပဲ ထိုအခါငါကဆိုလိုသောသူတို့ပြင်းထန်မှုကွဲပြားသည်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲ။ သူတို့ကကြိမ်နှုန်းကွာခြားတယ်၊ ဒါကဘယ်လောက်ကြာသလဲ။ ဒီဟာကဘယ်လောက်ကြာမလဲမသိဘူး ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာငါတို့မသိဘူး။ ငါပြောသောနေ့တွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုငါမြင်၏။ သင်တို့အသက်တာသည်မိုsome်းရေကဲ့သို့ရွာစေမည်။ "ဒါပေမယ့်ဒီရယ်စရာပါပဲ။ " (ရယ်သံများ) ထိုအခါငါကကြောင်းလမ်းထင်ပါတယ် လူတွေအများကြီးအခုခံစားနေရတယ်။ ဒါကရီစရာလိုပဲ။ ပြနာများမလွှဲမရှောင်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ variable ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဂျိမ်းစ်ပြောတဲ့တတိယအချက်ကတော့ငါတို့မအံ့သြကြဘူး ပြproblemsနာများကိုခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကခန့်မှန်းရခက်ပါတယ် စမ်းသပ်မှုတွေကမင်းရဲ့ဘ ၀ ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါ သင်မှတ်စုများကိုရေးနေလျှင်ထိုစကားစုကိုဝိုင်းရံပါ။ သူတို့သည်သင်၏ဘ ၀ ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ ကြည့်ရှုပါ၊ သင်လိုအပ်တဲ့အခါဘာပြသနာမှမရှိပါဘူး ဒါမှမဟုတ်သင်မလိုအပ်တဲ့အခါ။ ဒါကြောင့်လာချင်သောအခါလာမယ့်လာပါတယ်။ ၎င်းသည်ပြaနာတစ်ခု၏အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ပြနာများသည်အရေးအပါဆုံးအချိန်တွင်ရောက်သည်။ ပြeverနာတစ်ခုလိုခံစားဖူးပါသလား မင်းဘဝတစ်ခုထဲဝင်လာပြီ၊ မင်းအခုမသွားဘူး။ တကယ်တော့အခုလိုလား။ ဒီမှာက Saddleback ဘုရားကျောင်းမှာငါတို့ဟာအဓိကကင်ပိန်းမှာရောက်နေတယ် အနာဂတ်အကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်။ ထိုအခါရုတ်တရက်အားလုံး coronavirus တာမျိုး။ ထိုအခါငါမသွားယခုသွား။ (chuckles) ယခုမဟုတ်ပါ။ သငျသညျနှောင်းပိုင်းတွင်အခါသင်ပြားချပ်ချပ်တာယာဖူးသလော အချိန်များများရသည့်အခါသင်ပြားချပ်ချပ်မယူပါ။ သင်တစ်နေရာရာကိုသွားဖို့အလျင်လိုနေသည် မင်းရဲ့အဝတ်အစားအသစ်ပေါ်ကကလေးစိုစွတ်နေသလိုပဲ မင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ညနေခင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုအတွက်ထွက်သွားနေသလိုပါပဲ ဒါမှမဟုတ်မင်းမပြောခင်မင်းဘောင်းဘီကိုခွဲလိုက်တယ်။ ဒါကတကယ်ကိုငါ့ထံသို့တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေပေါ်မှာ။ တချို့လူတွေကအရမ်းစိတ်မရှည်ဘူး၊ သူတို့သည်လည်နေသောတံခါးကိုမစောင့်နိုင်ပါ။ သူတို့ကလုပ်ရမယ်၊ သူတို့အခုလုပ်ရမယ်၊ အခုလုပ်ရမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်တော်ဂျပန်ကိုရောက်နေတာသတိရပါ၊ ငါမြေအောက်ရထားကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မြေအောက်ရထားမှာရပ်နေ၏ တံခါးကိုဖွင့်သောအခါတံခါးပွင့်လေ၏။ နှင့်ဂျပန်လူငယ်တစ် ဦး သည်ချက်ချင်းပင် ငါအဲဒီမှာရပ်နေအဖြစ် projectile ငါ့ကိုအပေါ်အော့အန်။ ထိုအခါငါ, အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ယခုစဉ်းစားမိတယ် သူတို့မခန့်မှန်းရခက်ဘူး၊ သူတို့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့လာတတ်တယ်။ မင်းဘဝမှာပြproblemsနာတွေကိုမင်းကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခဲတယ်။ အခုတော့သတိပြုပါကစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးအခါ, ကပြောပါတယ် သူတို့ဟာမလွှဲမရှောင်နိုင်ဘူး၊ မင်းဘ ၀ ထဲကိုလူစုလူဝေးပါ၊ သူကသူတို့ကိုကျူးကျော်သူတွေအဖြစ်မကျေမနပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူဒီမှာဘာပြောနေတာလဲ ကောင်းပြီ၊ ငါအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်။ ဒါပေမယ့်ပြproblemsနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မာကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့စတုတ္ထအချက်ကဒီမှာပါ။ ပြနာတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ ပြနာတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်သည်အရာရာတွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ ငါတို့ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေတောင်မှ၊ ဘုရားသခင်သည်သူတို့ထံမှကောင်းသောအရာများကိုထုတ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ပြproblemနာတိုင်းကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြcauseနာအများစု။ လူတွေကဘာလို့လူတွေဖျားနာရတာလဲလို့လူတွေကပြောကြတယ်။ ကောင်းပြီ၊ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်မိန့်မှာသည့်အတိုင်းမလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့စားမိလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည်အိပ်ပျော်လျှင်၊ အိပ်ပျော်လျှင်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဘုရားသခင်ပြောသလိုပဲ၊ ငါတို့ဘဝကိုအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုခွင့်မပြုလျှင် ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ငါတို့မှာပြproblemsနာအများစုမရှိဘူး။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဒီနိုင်ငံမှာ၊ အမေရိကမှာ၊ ခေါ်တဲ့အရာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ နာတာရှည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှု။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုငါတို့မလုပ်ဘူး။ ကျန်းကျန်းမာမာမလုပ်ပါဘူး ကျနော်တို့မကြာခဏ Self- အဖျက်အမှုကိုပြု။ သူပြောနေတာကပြhereနာကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ မင်းပြproblemsနာတက်ရင်သူပြောတယ်၊ သူတို့ထုတ်လုပ်ရန်လာနားလည်သဘောပေါက်။ ထိုစကားစုကိုဝိုင်း။ ထုတ်လုပ်ပါ။ ပြနာများသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။ အခုသူတို့ဟာအလိုအလျောက်အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ မှန်ကန်သောနေ့၌ကျွန်ုပ်မတုံ့ပြန်ပါကဤ COVID ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဒါကငါ့ဘဝမှာကြီးကျယ်တဲ့အရာတစ်ခုမှထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ငါမှန်တယ်၊ ငါ့ဘဝမှာအဆိုးဝါးဆုံးအရာတွေ ကြီးထွားမှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးနှင့်ကောင်းချီးများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ဘဝနှင့်ငါ့အသက်တာ၌။ သူတို့ကထုတ်လုပ်ရန်လာကြ၏။ သူကဒီမှာဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုနှင့်ဖျားနာမှုပင်လျှင်တစ်ခုခုကိုပြီးမြောက်စေသည် ကျနော်တို့ကပါစေလျှင်တန်ဖိုး။ ငါတို့ရွေးချယ်မှုအားလုံး၊ ငါတို့သဘောထားမှာအားလုံးပဲ။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များတွင်အခက်အခဲများကိုအသုံးပြုသည်။ မင်းပြောတာကောင်းပြီ၊ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်အခက်အခဲများနှင့်ပြproblemsနာများကိုမည်သို့အသုံးပြုသနည်း။ ကောင်းပြီ, တောင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, လာမယ့်ကျမ်းပိုဒ် သို့မဟုတ်အခန်းငယ်၏နောက်အပိုင်းကဆိုသည် ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနည်းလမ်းသုံးမျိုးသုံးတယ်။ ဘုရားသခင်သည်သင်၏ဘဝတွင်ပြproblemsနာသုံးခုကိုနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဦး ဆုံးပြproblemsနာများကကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးသည်။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြွက်သားနှင့်တူ၏။ စစ်ဆေးပြီးမှသာကြွက်သားကိုအားမပေးပါ။ ဒါကြောင့်ဆန့်မထားရင်, ဖိအားအောက်မှာထားရဲ့မဟုတ်လျှင်။ ဘာမှမလုပ်ဘဲအားကြီးသောကြွက်သားများကိုသင်မဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါ။ သငျသညျသူတို့ကိုဆန့်အားဖြင့်အားကြီးသောကြွက်သားဖွံ့ဖြိုး သူတို့ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်စမ်းသပ် နှင့်ကန့်သတ်သူတို့ကိုတွန်းအားပေး။ ဒါကြောင့်သူကပြသနာတွေကငါ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်ဖို့လာတယ်လို့ပြောနေတယ်။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်ရန်လာသည်ဟုသူကပြောခဲ့သည်။ အခုဒီစာလုံးကိုစမ်းသပ်ခြင်းဆိုတာအသုံးအနှုန်းတစ်ခုပါ သတ္တုသန့်စင်ရာတွင်အသုံးပြုသောကျမ်းစာခေတ်ကဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မင်းလုပ်မှာကမင်းဟာအဖိုးတန်သတ္တုတစ်လုံးကိုယူလိမ့်မယ် ရွှေ၊ ငွေအစရှိသောအခြားအရာများကဲ့သို့ပင်၊ ပြီးတော့အိုးကြီးထဲထည့်ပြီးအပူပေးမယ် အဘယ်ကြောင့်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ရန်? မြင့်မားသောအပူချိန်မှာ, အညစ်အကြေးများအားလုံးကိုမီးရှို့ပစ်သည်။ ကျန်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်ရွှေစင်ဖြစ်သည် သို့မဟုတ်စင်ကြယ်သောငွေ။ ဒီမှာစမ်းသပ်မှုအတွက်ဂရိစကားလုံးပါ။ ဘုရားသခင်သည်အပူကိုအပူပေးသောအခါ၎င်းသည်သန့်စင်သောမီးဖြစ်သည် ငါတို့ဘ ၀ မှာခွင့်ပြုတယ်၊ အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ် လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဘာဖြစ်ပျက်မလဲဆိုတာမင်းသိလား။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တကယ့်ကိုအရေးကြီးတယ်ထင်သောပစ္စည်း ငါတို့နားလည်မယ်၊ မပါဘဲရုံဒဏ်ငွေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး စားပေးအစီအစဉ်ကိုပြန်ပြောင်းမယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာတွေပြောင်းလဲသွားတော့မယ်။ အခုပြproblemsနာတွေကမင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်တယ်ဆိုတာကိုဂန္ထ ၀ င်နမူနာပြ ယောဘအကြောင်းသမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ယောဘနှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်တအုပ်လုံးရှိ၏။ ယောဘဟာသမ္မာကျမ်းစာထဲမှာအချမ်းသာဆုံးသူဖြစ်တယ်၊ တစ်ရက်တည်းမှာသူဟာအရာရာဆုံးရှုံးသွားတယ်။ သူသည်သူ့မိသားစုအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးသူ၏စည်းစိမ်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအကြမ်းဖက်သမားများကသူ့မိသားစုအားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သူသည်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်နာတာရှည်ရောဂါခံစားခဲ့ရသည် ဒါကပျောက်ကင်းအောင်ကုသမရနိုင်ပါ။ အိုကေတယ်၊ သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစုံစမ်းတော်မူ၏။ ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနှစ်ဆပြန်ပေးတယ် သူစမ်းသပ်မှုကြီးကိုမဖြတ်သန်းခင်သူ၌ရှိခဲ့သည့်အရာ တစ်ချိန်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့သောတစ်နေရာရာမှကိုးကားချက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည် လူတွေဟာလက်ဖက်ရည်အိတ်တွေလိုပါပဲ သငျသညျ '' em ၌အဘယ်သို့ဆိုင်အမှန်တကယ်မသိရပါဘူး သငျသညျ '' ရေပူထဲမှာ '' သူတို့ကို drop သည်အထိ။ ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုတကယ်မြင်နိုင်တယ်။ ထိုရေပူရေနေ့များရှိခဲ့ဖူးသလား။ သငျသညျအစဉျအမွဲသောဤရေပူရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်လများထဲမှရှိခဲ့? ကျွန်တော်တို့အခုရေပူအခြေအနေရောက်နေပြီ။ တဖန်သင်တို့ထွက်သွားရမည့်အရာသည်သင်၏အတွင်း၌ရှိသောအရာများဖြစ်သည်။ အဲဒါဟာသွားတိုက်ဆေးနဲ့တူတယ် ငါ့မှာသွားတိုက်ဆေးပိုက်တစ်ချောင်းရှိတယ်၊ ဘာထွက်လာမလဲ သွားတိုက်ဆေးကောင်းကောင်းသင်ပြောနိုင် မလိုအပ်ပါ။ အပြင်ဘက်မှာသွားတိုက်ဆေးလို့ပြောလို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် marinara ငံပြာရည်ရှိနိုင်ဘူး သို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းမြေပဲထောပတ်သို့မဟုတ် mayonnaise ။ ဖိအားပေးမှုခံရသောအခါဘာဖြစ်လာမည်နည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြီးတော့ COVID ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာ၊ မင်းထဲကထွက်လာမယ့်အရာကမင်းအတွင်းပိုင်းကဘာလဲ တဖန်သင်တို့ခါးသောစိတ်နှင့်ပြည့်စေလျှင်၊ တဖန်သင်တို့စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံလျှင်, ထိုအထွက်လာလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့မင်းကဒေါသ၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ သို့မဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်မလုံခြုံခြင်းထွက်ပေါ်လာတော့မည်။ သင်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေပါကသင်အတွင်း၌ရှိသောအရာအားလုံးဖြစ်သည် ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်သင်ထွက်လာမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ သူပြောတာကဒီမှာ ပြproblemsနာကငါ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတယ်။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကငါကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တကယ်ပဲတွေ့ခဲ့တယ် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအရှေ့၌ကွန်ဖရ၌တည်၏။ Tennessee လို့ထင်ပါတယ် ပြီးတော့သူကဒီလူဟောင်းကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲဆိုတာပြောပြတယ် သူ၏အသက်တာ၌အကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါ "အိုကေ, ဒီပုံပြင်ကိုကြားချင်တယ်။ "ငါ့ကိုအကြောင်းကိုအားလုံးပြောပြပါ။ " ပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပဲ တစ် ဦး သစ်စက်မှာသူ့ဘဝအားလုံး။ သူသည်တစ်သက်လုံးသစ်စက်သမားတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမှာတစ်နေ့၊ သူ့ရဲ့သူဌေးကဝင်လာပြီးရုတ်တရက်“ မင်းကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီ” ထိုအခါသူ၏ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးတံခါးကိုထွက်သွားလေ၏။ ထို့အပြင်သူသည်အသက် ၄၀ အရွယ်တွင်မိန်းမနှင့်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည် သူ့မိသားစုနှင့်သူနှင့်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အခြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။ နှင့်ထိုအချိန်ကသွားစီးပွားရေးကျဆင်းမှုရှိခဲ့သည်။ သူသည်အလွန်စိတ်ပျက်။ အလွန်ကြောက်ရွံ့လေ၏။ သငျသညျအခြို့ကအခုအချိန်မှာအဲဒီလိုခံစားရလိမ့်မယ်။ သငျသညျပြီးသားချွတ်ခဲ့ကြပေမည်။ သင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ် ဒီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းချွတ်တင်ကြ၏။ ပြီးတော့သူကတော်တော်လေးစိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ တော်တော်ကြောက်တယ်။ သူဒီလိုပြောတယ် -“ ငါရေးခဲ့တယ်၊ ငါခံစားခဲ့ရတယ်၊ "ငါပစ်ခတ်သောနေ့၌ငါ့ကမ္ဘာကြီးပြိုပျက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော့်ဇနီးကိုပြောခဲ့တယ် သူမက 'ဒါဆိုမင်းဘာလုပ်မလဲ' ငါပြောပြီ၊ "ငါအမြဲတမ်းလုပ်ချင်သောအရာကိုလုပ်တော့မယ်။ "တစ် ဦး ဆောက်ဖြစ်လာပါ။ "ကျွန်မတို့အိမ်ကိုပေါင်နှံသွားမှာပါ "ပြီးတော့ငါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသို့သွားမယ်။ " ပြီးတော့သူကကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်၊ Rick, ငါသိတယ်၊ "နှစ်ခုသေးငယ်တဲ့မိုတယ်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ " သူလုပ်ခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့်သူက "ငါးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာသန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ပါ" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသူ၏အမည်၊ ငါပြောသောသူကား၊ Wallace Johnson နှင့်သူစတင်ခဲ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည် အလုပ်ဖြုတ်ခံရပြီးနောက်အားလပ်ရက်အင်းဟုခေါ်ခဲ့သည်။ အားလပ်ရက်အင်း။ Wallace က "ငါဒီကိုရှာတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ Rick" လို့ပြောခဲ့တယ် "ငါ့ကိုပစ်ခတ်သောသူသည်ငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့လိမ့်မယ် "သူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအတွက်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ " အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူး ငါဘာကြောင့်အလုပ်ထုတ်ပစ်တာလဲ၊ ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင့်အမှားကင်းမဲ့တာကိုငါတွေ့နိုင်ခဲ့တယ် ငါ့ကိုသူရွေးချယ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသို့ရောက်ရန်အံ့သြဖွယ်အစီအစဉ်။ ပြနာတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ သူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ သူတို့ထုတ်လုပ်ရန်လာ, ပထမ ဦး ဆုံးအရာတစျခုသဘောပေါက် သူတို့သည်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြကြ၏။ နံပါတ်နှစ်ဒီမှာပြproblemsနာရဲ့ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ ပြနာတွေကကျွန်တော့်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်စေတယ်။ သူတို့သည်ငါ၏ခံနိုင်ရည်ကိုမွေးမြူကြသည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆက်တွဲစကားစု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် ဤပြproblemsနာများသည်ခံနိုင်ရည်ရှိလာစေရန်လာသည်။ သူတို့သည်သင်၏ဘဝတွင်ခံနိုင်ရည်ကိုမွေးမြူကြသည်။ သင်၏ဘဝပြproblemsနာများ၏ရလဒ်ကားအဘယ်နည်း။ ပါဝါတည်းခို။ စာသားကဖိအားကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းပါ။ ဒီကိစ္စကိုခံနိုင်ရည်လို့ခေါ်ကြတယ်။ ပြန် bounce နိုင်စွမ်း။ ပြီးတော့ကလေးတိုင်းသင်ယူဖို့လိုအပ်တဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးအရည်အသွေးတစ်ခုကတော့ အရွယ်ရောက်သူတိုင်းသင်ယူရန်လိုအပ်သည်မှာခံနိုင်ရည်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းလဲကျတယ်၊ လူတိုင်းကခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာဖြတ်သန်းနေကြတယ်၊ လူတိုင်းမတူညီသောအချိန်များတွင်ဖျားနာခြင်း လူတိုင်းတွင်သူတို့၏ဘ ၀ တွင်ရှုံးနိမ့်မှုများရှိသည်။ ဖိအားကိုသင်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သလဲ။ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဆက်၍ စွဲလမ်းနေခြင်း၊ ကောင်းပြီ, သင်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့သင်ယူသလဲ? ဖိအားကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ။ အတွေ့အကြုံမှတဆင့်, ထိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပါပဲ။ သင်ကဖတ်စာအုပ်ထဲကဖိအားကိုကိုင်တွယ်တတ်ဖို့မသင်ယူဘူး။ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ခုမှာဖိအားကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာသင်မလေ့လာဘူး။ ဖိအားအောက်မှာခံခြင်းအားဖြင့်ဖိအားကိုကိုင်တွယ်တတ်ဖို့သင်သင်ယူတယ်။ တဖန်သင်တို့အထဲ၌အဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး သင်အမှန်တကယ်ကြောင်းအခြေအနေ၌သွင်းထားခဲ့မှီတိုင်အောင်။ Saddleback ဘုရားကျောင်းဒုတိယနှစ်တွင်, 1981 ခုနှစ်, ငါစိတ်ကျရောဂါကာလရှောက်သွားလေ၏ အပတ်တိုင်းတိုင်းနှုတ်ထွက်ချင်တယ်။ ထိုအခါငါတနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းတိုင်းဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မဘဝရဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်တ ဦး တည်းခြေရင်း၌တ ဦး တည်းခြေလျင်ထားလိမ့်မယ် ဘုရားကဲ့သို့ဘုရားကျောင်းမဆောက်ပါစေနှင့်။ ယခုမူကား၊ အိုဘုရားသခင်၊ ထိုအခါငါပဲအရှုံးမပေးဘူး။ ငါအရှုံးမပေးခဲ့လို့အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်ကိုအရှုံးမပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပိုပြီးဝမ်းသာတယ်။ သောစမ်းသပ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုနှစ်အတွင်းမှာဝိညာဉ်ရေးကိုကျွန်တော်အတော်အတန်တိုးတက်စေခဲ့တယ် နှင့် relational နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကို အဲ့ဒါကနှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာဘောလုံးတွေအများကြီးကိုညှိနိုင်ခဲ့တယ် နှင့်အများပြည်သူမျက်စိထဲမှာကြီးမားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုပမာဏကိုကိုင်တွယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီနှစ်မှာကျွန်တော်သွားခဲ့တယ် အခက်အခဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခု။ သင်သိ, အမေရိကအဆင်ပြေမှုနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဆင်ပြေကိုချစ်။ ဒီအကျပ်အတည်းကာလရဲ့နောက်ရက်များနှင့်သီတင်းပတ်များတွင် \_ t အဆင်မပြေသောအရာတွေအများကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေ။ ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း အားလုံးအဆင်မပြေတဲ့အခါ, သင်ရုံအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအပေါ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ ဆက်လုပ်ဆောင်ရန်မလွယ်သောအခါ သင်သိသည်၊ အပြေးပြိုင်ပွဲ၏ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်မာရသွန်၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည် တကယ်တော့အမြန်နှုန်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ခံနိုင်ရည်အကြောင်းပါ။ သင်ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးပြီလား ထိုအရာမျိုးအတွက်သင်မည်သို့ပြင်ဆင်မည်နည်း။ သူတို့ကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်းဖြင့်သာ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်နောင်လာမည့်နေ့ရက်များကိုဆန့်ကျင်သောအခါ၊ အဲဒါကိုစိတ်မပူပါနဲ့အဲဒါကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ပြနာတွေကကျွန်တော့်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်စေတယ်။ ပြနာတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်၊ ဂျိမ်းစ်ကပြproblemsနာများအကြောင်းပြောသောတတိယအချက် ပြthroughနာတွေကကျွန်တော့်ရဲ့စရိုက်ကိုရင့်ကျက်လာတာပါ။ သူကဤအခန်းငယ်ကိုယာကုပ်အခန်းကြီး ၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ သူကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်ပါစေ သငျသညျရင့်ကျက်ဇာတ်ကောင်လူဖြစ်လာသည်အထိ အဘယ်သူမျှမအားနည်းတဲ့အစက်အပြောက်နှင့်အတူသမာဓိရှိ။ မင်းအဲဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူးလား လူတွေပြောတာကြားချင်လား၊ ထိုမိန်းမသည်သူမ၏အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်မှုမရှိပါ။ ထိုလူ၊ ထိုကောင်လေး၌သူ၏အကျင့်စရိုက်၌အားနည်းသောအစက်မရှိ။ သင်ဘယ်လိုရင့်ကျက်ဇာတ်ကောင်မျိုးကိုရသနည်း သငျသညျကလူဖြစ်လာသည်အထိလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်ပါစေ, ရင့်ကျက်သောဇာတ်ကောင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အဘယ်သူမျှမအားနည်းတဲ့အစက်အပြောက်နှင့်အတူသမာဓိရှိ။ လူသိများတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကရုရှားမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တာမှတ်မိနေတယ်၊ ထိုသို့ကွဲပြားခြားနားသောလူနေမှုအခြေအနေများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည် ကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်များ၏သက်တမ်းသို့မဟုတ်သက်တမ်းထိခိုက်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်တွေကိုလွယ်ကူစွာနေထိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့တခြားတိရိစ္ဆာန်တွေကိုပိုခက်ခဲအောင်လုပ်တယ် နှင့်ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်။ နှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များတိရိစ္ဆာန်များကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် သောအဆင်ပြေထဲမှာထားရှိခဲ့ကြသည် နှင့်လွယ်ကူသောပတ်ဝန်းကျင်, အခြေအနေများ, သူတို့အားလူနေမှုအခြေအနေများ, တကယ်အားနည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အခြေအနေကအရမ်းလွယ်လို့သူတို့ကအားနည်းလာတယ် နှင့်အနာရောဂါပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်။ ပြီးတော့သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာစောစောစီးစီးသေသွားကြတယ် တွေ့ကြုံခံစားခွင့်ပြုခဲ့သောသူတို့ထက် ဘဝ၏ပုံမှန်အခက်အခဲများ။ ဒါစိတ်ဝင်စားစရာမဟုတ်လား။ တိရိစ္ဆာန်တွေအကြောင်းသေချာပေါက်ငါသေချာတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်လည်း။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအထူးသဖြင့်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာ၊ ကျနော်တို့ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းများစွာအတွက်လွယ်ကူသောခဲ့ပြီးပြီ။ အဆင်ပြေဘဝတွေကိုအသကျရှငျ။ သင်၏အသက်တာ၌ဘုရားသခင်၏နံပါတ်တစ်ရည်မှန်းချက် မင်းကိုယေရှုခရစ်လိုသရုပ်ဆောင်ရမယ်။ ခရစ်တော်ကဲ့သို့စဉ်းစားရန်၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ပြုမူရန်၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ရန်၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ချစ်ခြင်း၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့အပြုသဘောဆောင်ရန်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မှန်လျှင်၎င်း၊ သမ္မာကျမ်းစာက၎င်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောပါသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်ဘုရားသည်သင့်အားထပ်တူအရာများကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည် သင်၏အကျင့်စရိုက်ကိုတိုးပွားစေရန်ယေရှုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ယေရှုကဘယ်လိုလဲ ယေရှုသည်ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ ၀ ိညာဉ်တော်၏အသီး၊ ဒါတွေကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုထုတ်လုပ်သလဲ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုချထားခြင်းအားဖြင့်။ စိတ်မရှည်ဖို့သွေးဆောင်ခံရတဲ့အခါသည်းခံတတ်လာတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသင်ယူခြင်းသည်လူတို့အားချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စေသည်။ ကျနော်တို့ဝမ်းနည်းခြင်းအလယ်၌ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သင်ယူကြသည်။ ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသည်းခံခြင်းမျိုးကိုသင်ယူရှိသည် ဘယ်အချိန်စောင့်ရမှာလဲ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖို့သွေးဆောင်ခံရတဲ့အခါကြင်နာမှုပြတယ်။ ရှေ့လာမယ့်နေ့တွေမှာတော့အရမ်းသွေးဆောင်ဖို့ကောင်းတယ် ဘန်ကာထဲကို ၀ င်လိုက်တာနဲ့ပြန်ဝင်ပါ။ ပြီးတော့ငါကငါတို့ကိုဂရုစိုက်မယ်၊ ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ငါ၊ ငါ့မိသားစု၊ ငါတို့လေးယောက်ပဲရှိတော့တယ် နှင့်အခြားလူတိုင်းအကြောင်းကိုမေ့လျော့။ သို့သော်ယင်းကသင်၏စိတ်ကိုကျုံ့စေလိမ့်မည်။ သင်သည်အခြားလူများအကြောင်းစတင်စဉ်းစားပါက ထိခိုက်လွယ်သူများကိုကူညီခြင်း နှင့်ရှိပြီးသားအခြေအနေများနှင့်အတူ, သင်တက်လျှင်သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ကြီးပွားလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့နှလုံးသားကြီးလာလိမ့်မယ်၊ မင်းကပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ် ဒီအကျပ်အတည်းရဲ့အဆုံးမှာမင်းစလုပ်နေတာထက်ကော၊ ဘုရားသခင်ကြည့်ရှုတော်မူပါ၊ သူကအရာနှစ်ခုသုံးနိုင်သည်။ သူသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသုံးနိုင်သည်၊ အမှန်တရားကငါတို့ကိုပြောင်းလဲစေသည်၊ ပြီးတော့သူကပိုပြီးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးနိုင်တယ်။ ယခုတွင်ဘုရားသခင်သည်ပထမဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲနားမထောင်၊ ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုရဖို့အခြေအနေတွေကိုသုံးတယ်။ ပိုပြီးခက်ခဲတယ်၊ ဒါပေမဲ့ပိုပြီးထိရောက်တယ်။ အခုတော့ကောင်းပြီ၊ ကောင်းပြီ၊ Rick၊ ငါရပြီ။ ပြtheနာတွေကပြောင်းလဲနိုင်တယ်၊ သူတို့သည်ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစုံစမ်းခြင်းငှါ၎င်း၊ ငါလိုချင်ရင်သူတို့မလာကြဘူး။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်၏စရိုက်ကိုကြီးထွားစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုရင့်ကျက်ရန် 'သူတို့ကို' သုံးနိုင်သည်။ ဒါဆိုငါဘာလုပ်ရမလဲ။ လာမည့်ရက်အနည်းငယ်နှင့်ရက်သတ္တပတ်များနှင့်နောက်လများ၌ဖြစ်သည် ငါတို့ဒီ coronavirus အကျပ်အတည်းကိုအတူတူရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ပြproblemsနာများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တုံ့ပြန်သင့်သနည်း။ ထိုအခါငါကပဲဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါရလဒ်အဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုပြproblemsနာများအကြောင်းပြောနေတာပါ အလုပ်မှာကလေးတွေဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာဖြစ်ခြင်း၏ သို့မဟုတ်ဘဝကိုစိတ်ပျက်စရာနေသောအရာခပ်သိမ်း ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သကဲ့သို့။ ငါ့ဘဝရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုငါဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်သလဲ။ ကောင်းပြီ, နောက်တဖန်ဂျိမ်းစ်အလွန်တိကျတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ပြီးတော့သူကသုံးယောက်ကိုလက်တွေ့ကျတယ်။ ၎င်းတို့သည်အစွန်းရောက်သောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ငါမင်းကိုအရင်ပြောတဲ့အချိန်မှာ \_ t သငျသညျအကြှနျုပျကိုနောက်နေရမယ်, သွားရတော့မယ်။ ဒါပေမယ့်တုန့်ပြန်ချက်သုံးခုရှိပါတယ်။ သူပြောလိုက်သည့်ပထမဆုံးတုံ့ပြန်မှုမှာသင်ဖြစ်စဉ်ပင်ဖြစ်သည် ခက်ခဲသောအချိန်များကိုဖြတ်သန်း။ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းပါ။ မင်းသွားတာနောက်နေတာလား ဒါက masochistic အသံ။ ငါပြtheနာအတွက်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်မိနစ်လောက်မှာပဲကျွန်တော့်ကိုလိုက်နာပါ။ သူကဒါဟာစင်ကြယ်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းစဉ်းစားကပြောပါတယ်။ ဤပြproblemsနာများကိုသူငယ်ချင်းများအဖြစ်ဆက်ဆံပါ။ အခုငါ့ကိုနားလည်မှုလွဲမနေပါနဲ့ သူကအတုကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး သူကပလတ်စတစ်အပြုံးဝတ်လိုက်တယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး အရာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်၊ ​​မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကမဟုတ်ဘူး။ Pollyanna, Little ကမိဘမဲ့ Annie, နေရောင် မနက်ဖြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်၊ မနက်ဖြန်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ သူကလုံးဝမဟုတ်ပါ၊ သူက masochist လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အိုးကောင်လေးငါနာကျင်မှုကိုဖြတ်သန်းရတယ် ဘုရားသခင်သည်သင်ပြုသကဲ့သို့နာကျင်မှုကိုမုန်းသည်။ အိုးငါဒုက္ခဆင်းရဲရတယ်။ ပြီးတော့မင်းမှာဒီအာဇာနည်တွေရှိတယ်၊ မင်းသိတယ်၊ ငါမကောင်းဘူးခံစားရတဲ့အခါငါဒီဝိညာဉ်ရေးခံစားချက်သာရှိသည်။ ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုအာဇာနည်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုမလိုချင်ဘူး နာကျင်မှုဆီသို့တစ် masochistic သဘောထားကို။ ငါသိတုန်းငါဖြတ်သန်းသွားတခါသတိရ တကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကြင်နာတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ သူတို့က၊ Rick၊ သိပါရစေ "အမှုအရာပိုဆိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြီးတော့သူတို့ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းကြပါ။ ဒါကမှာအားလုံးမအကူအညီဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအားပေးတယ်သူတို့ပိုဆိုးလာတယ်။ (chuckles) ဒါကြောင့် Pollyanna ရဲ့အပြုသဘောဆောင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတုမဟုတ်ပါဘူး။ ငါစိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုရင်ငါစိတ်အားထက်သန်လိမ့်မယ်။ မဟုတ်ပါ၊ မရှိ၊ မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်၎င်းထက်များစွာနက်ရှိုင်းပါသည်။ ငါတို့မဝမ်းမြောက်ဘူး၊ နားမထောင်ဘူး၊ ပြtheနာအတွက်ငါတို့မပျော်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြtheနာ၌ ၀ မ်းသာသည်၊ ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းများစွာရှိသေးသည်။ ပြtheနာကိုယ်နှိုက်မဟုတ်ဘဲအခြားအရာများဖြစ်သည် ကျနော်တို့ပြproblemsနာများအတွက်ဝမ်းမြောက်နိုင်ပါတယ်။ ပြtheနာ၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်နိုင်သနည်း။ “ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာငါတို့သိလို့ပဲ။ ငါတို့ကိုဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကမတူကွဲပြားတဲ့အရာတွေကိုအများကြီးသိလို့ပါ။ ဘုရားသခင်၌ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သူက၎င်းကိုသန့်ရှင်းသော ၀ မ်းမြောက်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဟုသတိပြုပါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောစကားလုံးဝိုင်းပါ။ သင်၏စိတ်ကိုတမင်တကာဖြစ်စေရန်နည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားပါ။ သင်တစ် ဦး သဘောထားညှိနှိုင်းမှုတယ် သင်ဒီမှာလုပ်ရန်ရှိသည်။ ရွှင်လန်းရန်သင်ရွေးချယ်မှုလား။ ဆာလံ ၃၄ တွင်အခန်းငယ် (၁) တွင်သူပြောခဲ့သည် ငါသည်ခပ်သိမ်းသောကာလတို့၌ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးမည်။ အချိန်တိုင်း။ ပြီးတော့သူကငါလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါဟာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။ ကတိက ၀ တ်တစ်ခုပါ။ ယခုသင်သည်ဤလများအနက်ရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည် အကောင်းတစ် ဦး သဘောထားသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့သဘောထားတစ်ခုခုကိုအတူ။ မင်းရဲ့သဘောထားမကောင်းဘူးဆိုရင်မင်းကမင်းကိုလုပ်တော့မယ် နှင့်သင်တို့ပတ်လည်အခြားလူတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲ။ ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့သဘောထားကကောင်းရင်မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုက ၀ မ်းမြောက်ဖို့ပဲ။ ခင်ဗျားပြောတာကတောက်ပတဲ့ဘက်ကြည့်ရအောင်။ ဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်နိုင်သောအရာများကိုရှာကြစို့။ ပြီးတော့အဲဒါကိုတောင်မှဆိုးတာတောင်မှသတိထားကြည့်ကြစို့၊ ဘုရားသခင်သည်မကောင်းမှုမှအကောင်းကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး သဘောထားကိုညှိနှိုင်းမှုလုပ်ပါ။ ငါဒီအကျပ်အတည်းအတွက်ခါးသီးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ငါဒီအကျပ်အတည်းအတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ ငါရွေးတော့မယ်၊ အဲဒါငါ့ရဲ့ရွှင်လန်းမှုပဲ။ အိုကေ၊ နံပါတ်နှစ်၊ ဒုတိယ R ကတောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းမှာဥာဏ်ပညာအတွက်ဘုရားသခင်ကိုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကသင်အကျပ်အတည်းကြုံနေရသည့်အချိန်တွင်သင်လုပ်ချင်သောအရာဖြစ်သည်။ သငျသညျဘုရားသခငျသညျဉာဏျပညာကိုတောင်းချင်တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အကယ်၍ သင်သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသတင်းစကားကိုနားထောင်ခဲ့လျှင်၊ အကယ်၍ သင်လွဲချော်ခဲ့လျှင်၊ အွန်လိုင်းသို့ပြန် သွား၍ ထိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ပါ ကြောက်စရာမလိုဘဲဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ချိုင့်ဝှမ်းတစ်လျှောက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။ ထိုအခါမူကား၊ တဖန်သင်တို့ကဥာဏ်ပညာကိုတောင်း။ ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလိမ့်မည် သင်၏ပြaboutနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုတောင်းပါ။ အခန်းငယ် ၇ တွင်ဤအချက်ကိုယာကုပ် ၁ ၌ဖော်ပြထားသည်။ အကယ်၍ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်သင်တို့တွင်မည်သူသည်တွေ့ဆုံရမည်ကိုမသိပါ မည်သည့်အထူးပြproblemနာမဆိုဤသည်မှာ Phillips ဘာသာပြန်ချက်မဟုတ်ပါ။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၌သင်တို့ကိုမတွေ့ဆုံရန်ဘယ်လိုမသိလျှင် သငျသညျသာဘုရားသခင်အားမေးမြန်းဖို့ရှိသည်မဆိုအထူးသဖြင့်ပြproblemနာ ခပ်သိမ်းသောသူတို့အားစေတနာစိတ်နှင့်ပေးသနားတော်မူသောဘုရားကို၊ သူတို့ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရစေဘဲ ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိမယ်ဆိုတာသင်သေချာသိနိုင်တယ် မင်းကိုပေးမယ် သူတို့ကဘာလို့အရာအားလုံးကိုဥာဏ်ပညာကိုတောင်းမှာလဲလို့ပြောတယ် ပြaနာအလယ်မှာလား? ဒါကြောင့်သင်ကနေသင်ယူပါ။ ဒီတော့မင်းပြtheနာကနေသင်ယူနိုင်တယ် ဒါကြောင့်မင်းကပညာကိုတောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဘာလို့မမေးတော့တာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ဒီဖြစ်ပျက်နေရတာလဲ၊ မင်းဘာငါ့ကိုသင်ယူစေချင်တာလဲ ငါ့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ ဒီကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုကြီးထွားနိုင်မလဲ။ ငါဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့မိန်းမဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ ဒီအကျပ်အတည်းကနေငါဘယ်လိုလူကောင်းဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခံရပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါစိုးရိမ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်တကယ်ပင်အရေးမပါဘူး။ အဘယ်အရာကအရေးပါသည်၊ ငါဖြစ်လာမည်၊ ငါဒီအခြေအနေကနေဘာတွေသင်ယူရမလဲ။ ပြီးတော့အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့၊ မင်းကဥာဏ်ပညာကိုတောင်းဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကမင်းလိုအပ်တာတွေကိုမင်းလိုချင်ရင်ဘုရားသခင်ဆီတောင်းပန်ပါ၊ မင်းကိုဘုရားသခင်ပေးမယ် အိုဘုရားသခင်၊ မင်းကိုအမေလိုလိုပြောတယ် ငါ့ကလေးတွေနောက်လအတွက်အိမ်ပြန်ရောက်နေပြီ ကျွန်ုပ်သည်ဥာဏ်ပညာကိုဖခင်တစ် ဦး အနေနှင့်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုအန္တရာယ်ပြုသည့်အခါကျွန်ုပ်မည်သို့ ဦး ဆောင်ရမည်နည်း ငါအခုအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလား ဘုရားသခင်အားဥာဏ်ပညာကိုတောင်းခံပါ။ ဘာကြောင့်လို့မမေးဘဲဘာကိုမေးသလဲ ဒါကြောင့် ဦး ဆုံးသင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ကောင်းမြတ်သောသဘောထားရရှိခြင်း ငါပြtheနာအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်မဟုတ်လား ဒါပေမယ့်ငါပြtheနာအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝကနို့စို့ရင်တောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်ငါကဒီစီးရီးကိုခေါ်တာပါ "ဘဝကမရှိရင်အလုပ်လုပ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်း။ " ဘဝအလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ ဒါကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်တောင်းပါ၏ ဂျိမ်းစ်ပြောတာတတိယအချက်ကအနားယူပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မထဲ့ပါနဲ့ အားလုံးအာရုံကြောတစ်ခုအမှိုက်ပုံ၌တည်၏။ ဒါကြောင့်သင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးစိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်ရပါနဲ့။ အနာဂတ်အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ ဘုရားသခင်ကမင်းကိုဂရုစိုက်မယ်၊ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောတယ်။ အကောင်းဆုံးအရာကိုသိရန်ဘုရားသခင်ကိုသင်ယုံကြည်သည်။ သင်ကသူနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည် သင်ဖြတ်သန်းနေသည့်အခြေအနေကိုမတိုစေပါနှင့် ဘုရားသခင်ပဲ၊ ငါဖြေတော့မယ်။ ငါသံသယမဟုတ်ဘူး။ ငါသံသယမဟုတ်ဘူး။ ငါသည်ဤအခြေအနေ၌သင်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါလိမ့်မယ်။ အငယ် ၈ ကငါတို့ကြည့်ရလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ, ငါတို့တစ်မိနစ်အတွင်းနောက်ထပ်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အခန်းငယ် ၈ ကဤသို့ဆိုထားသည် - သို့သော်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သင်မေးရမည် လျှို့ဝှက်သံသယမရှိဘဲ။ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘာလုပ်နေလဲ။ ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းပါ။ တဖန်တုံအိုဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်သည်ဥာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံပါ၏ မင်းငါ့ကိုဉာဏ်ပညာပေးမယ်။ မင်းငါ့ကိုပညာပေးနေတာမင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ် မထိတ်လန့်နဲ့၊ သို့ရာတွင်၊ ငါပြောတဲ့အတိုင်းငါကျမ်းစာပြောတယ် ပြproblemsနာများစွာကိုပြောခဲ့တယ်။ မင်းသိတယ်၊ ငါတို့ကသူတို့ရောင်စုံတွေပြောကြတယ်၊ ပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ ထိုစကားလုံးကိုဂရိလိုပြproblemနာများစွာ၊ ပထမပေတရုမှာစကားလုံးအတူတူပဲ အခန်းကြီးလေး၊ ဘုရားသခင်သည်သင့်အားပေးကမ်းရန်ကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏အမျိုးမျိုးသောကျေးဇူးတော်။ ဒါဟာစိန်လိုမျိုးအရောင်စုံစုံ၊ သူအဲဒီမှာဘာပြောနေတာလဲ သင်၌ရှိသောပြproblemနာတိုင်းအတွက်၊ ရရှိနိုင်သည့်ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်ရှိသည်။ ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကိုမျိုးသည် နှင့်အခက်အခဲ, ကျေးဇူးတော်နှင့်သနားခြင်းကရုဏာစိတ်တစ်မျိုးရှိပါတယ် ဘုရားသခင်ကသင့်အားပေးလိုသောခွန်အားဖြစ်သည် ကြောင်းအထူးသဖြင့်ပြproblemနာကိုက်ညီရန်။ ခင်ဗျားဟာဒါအတွက်ကျေးဇူးလိုတယ်၊ မင်းဒါကိုလုပ်ဖို့လိုတယ် ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်၏ကျေးဇူးတော်သည်များပြားလှသည်ဟုဆိုသည် သင်ရင်ဆိုင်နေရသောပြproblemsနာများအဖြစ်။ ဒါဆိုငါဘာပြောနေတာလဲ မင်းရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ပြallနာအားလုံးကိုငါပြောနေတယ်၊ ဒီ COVID အကျပ်အတည်းအပါအဝင် မာရ်နတ်သည်ဤပြproblemsနာများအားဖြင့်သင်တို့ကိုအနိုင်ယူရန်ကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ဤပြproblemsနာများအားဖြင့်သင့်ကိုတိုးတက်စေလိုသည်။ စာတန်သည်သင့်အားအနိုင်ယူလိုသော်လည်းဘုရားသခင်သည်သင့်အားတိုးတက်စေလိုသည်။ အခုဘဝပြintoနာတွေဖြစ်လာပြီ မင်းကိုပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်မဖြစ်စေရဘူး။ လူအများစုကသူတို့ကိုခါးသီးတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာသင့်ကိုလူကောင်းတစ်ယောက်အလိုအလျောက်မဖြစ်စေဘူး။ သင်၏ခြားနားမှုကသင်၏သဘောထားဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုသတိရစရာနောက်ထပ်တစ်ခုငါပေးချင်တယ်။ နံပါတ်လေး၊ မှတ်မိရမယ့်စတုတ် သငျသညျပြproblemsနာများကိုဖြတ်သန်းသွားသည့်အခါသတိရဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များ။ ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များကိုသတိရပါ။ ဒါကအခန်းငယ် ၁၂ မှာပါ။ ဒီကတိကိုဖတ်ပြပါရစေ ယာကုပ်အခန်းကြီး ၁၊ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုသည်းခံသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ သူစမ်းသပ်ခံရပ်သောအခါ, ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအသက်သရဖူကိုရလိမ့်မည်။ သူ့ကိုချစ်သောသူတို့၌စကားလုံးရှိ၏။ နောက်တစ်ခါထပ်ဖတ်ပြပါရစေ မင်းကိုအရမ်းနီးကပ်စွာနားထောင်စေချင်တယ် စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုသည်းခံသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ သူကအခက်အခဲတွေကိုကိုင်တွယ်တယ်၊ ငါတို့အခုအခြေအနေရောက်နေပြီ။ သည်းခံနိုင်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူ၊ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုခံစဉ်တွင်၊ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ နောက်ဘက်မှာတော့ဒီစမ်းသပ်မှုကမပြီးသေးဘူး။ အဲဒါပြီးပြီ။ ဥမင်၏အခြားအဆုံးတွင်သင်ထွက်လာလိမ့်မည်။ သင်သည်အသက်သရဖူကိုရလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ ငါဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာတောင်မသိဘူး၊ ဘုရားသခင်ကတိထားတော်မူသောအသက်သရဖူ ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့အားပေးလိုက်သတည်း။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာကိုယုံကြည်ရန်သင့်ရွေးချယ်မှုသည် သံသယ၏။ သင်၏အခြေအနေမှသင့်အားကူညီရန်ဘုရားသခင်ထံဉာဏ်ပညာတောင်းခံပါ။ ပြီးတော့ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ထံတောင်းပါ။ ဘုရားသခင်ပြောပါ၊ ငါအရှုံးမပေးဘူး။ ထိုအရာသည်လွန်သွားလိမ့်မည်။ မင်းအကြိုက်ဆုံးကမင်းကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကမေးခဲ့တယ် ကျမ်းချက်လား။ ပြောတာကပြည့်စုံလာတယ် ဒီတော့ဘာကြောင့်ဒီကျမ်းချက်ကိုမင်းကြိုက်ရတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြproblemsနာတွေပေါ်လာရင်သူတို့မနေချင်တော့ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ သူတို့ကလာတယ်။ (chuckles) ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်မှန်ကန်ပါသည်။ ဆက်နေရန်မလာ၊ ယခုငါဒီအတွေးအားဖြင့်အနီးကပ်ကဘာလဲဆိုတာ။ တစ် ဦး ကအကျပ်အတည်းပြproblemsနာများဖန်တီးမသာ။ ဒါဟာမကြာခဏသူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြမကြာခဏသူတို့ကိုဖော်ပြသည်။ ဤပြcrisisနာသည်သင်၏အိမ်ထောင်တွင်အက်ကြောင်းအချို့ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ ဤအကျပ်အတည်းသည်အက်ကြောင်းအချို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေး၌ ဒီအကျပ်အတည်းကမင်းရဲ့ဘဝပုံစံထဲမှာအက်ကြောင်းတချို့ကိုဖော်ပြပေးတယ်။ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အရမ်းခက်အောင်တွန်းပို့နေတယ်ဆိုတာ ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုစကားပြောခွင့်ပြုပါ မင်းဘဝမှာဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုသလဲ ငါသည်သင်တို့ကိုဤရက်သတ္တပတ်စဉ်းစားရန်လိုသည်, ငါ့ကိုလက်တွေ့ကျတဲ့အဆင့်တွေပေးခွင့်ပေးပါလား။ လက်တွေ့ခြေလှမ်းများ၊ နံပါတ်တစ်၊ ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကိုနားထောင်ရန်အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်အားပေးဖို့။ မင်းအဲဒီလိုလုပ်မှာလား သင်ဤ link ပေါ်တွင် pass နှင့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး မှပို့ပေးမလား? အကယ်၍ ဤအရာသည်သင့်ကိုအားပေးခဲ့လျှင်၎င်းကို ဆက်၍ နှင့်ယခုအပတ်အတွက်အားပေးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူတိုင်းအားပေးမှုလိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကို link တစ်ခုပို့ပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိခဲ့စဉ်က၊ Lake Forest နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြား Saddleback ကျောင်းဝင်းအားလုံးတွင် \_ t ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာလူပေါင်း ၃၀၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပယ်ဖျက်ခဲ့ရတယ် ပြီးတော့ငါတို့အားလုံးအွန်လိုင်းမှာကြည့်ခဲ့ရတယ်၊ လူတိုင်းသည်သင်၏အုပ်စုငယ်သို့ သွား၍ သင်၏အိမ်နီးချင်းများကိုဖိတ်ကြားသည် သင်၏မိတ်ဆွေများကိုသင်၏အုပ်စုငယ်သို့ဖိတ်ကြားပါ။ ငါတို့မှာ ၁၈၁၀၀၀ ရှိတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များ၏ ISP များသည် ၀ န်ဆောင်မှုသို့ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူ ဦး ရေသန်းတစ်ဝက်ခန့်ဖြစ်နိုင်သည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုစောင့်ကြည့်။ လူ ဦး ရေသန်းတစ်ဝက်ခွဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကတခြားတစ်ယောက်ယောက်ကိုကြည့်ဖို့ပြောလိုက်လို့ပါ။ ပြီးတော့ငါသတင်းကောင်းကိုသက်သေခံရန်သင့်အားအားပေးချင်ပါတယ် သတင်းကောင်းကိုအလွန်အမင်းလိုအပ်နေသောကမ္ဘာတွင်ယခုအပတ်တွင်။ လူတွေကဒါကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ် link တစ်ခုပို့ပါ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာလူတစ်သန်းကိုကျွန်တော်အားပေးနိုင်ပါတယ် ငါတို့ရှိသမျှသည်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်, အဆင်ပြေ? နံပါတ် (၂)၊ သင်အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုတွင်ပါဝင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့တော့မဟုတ်ပါ အနည်းဆုံးယခုလတွေ့ဆုံရန်နိုင်ဖြစ်မည်, သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါက virtual အစည်းအဝေးတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင့်အားအားပေးလိမ့်မည်။ သငျသညျအွန်လိုင်းအုပ်စုရှိနိုင်ပါသည်။ မင်းဘယ်လိုလုပ်လဲ ကောင်းပြီ, Zoom နဲ့တူထုတ်ကုန်ထွက်ရှိပါတယ်။ သင်ကြည့်ချင်တယ်၊ ချဲ့ကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဲဒီမှာသင်သွားပြီး Zoom ရဖို့လူတိုင်းကိုပြောနိုင်တယ် သူတို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာမှာ \_ t ပြီးတော့လူခြောက်ယောက်၊ ရှစ်ယောက်၊ ၁၀ ယောက်ကိုသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်သည်ဤအုပ်စုတွင် Zoom တွင်ယခုအပတ်သင်၏အုပ်စုရှိနိုင်သည်။ ပြီးတော့ Facebook Live လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုတွေ့နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒါကတခြားသူတွေနဲ့တူတယ်၊ FaceTime ကိုကြည့်လိုက်ရင် iPhone မှာဘာလဲ ကောင်းပြီ၊ အုပ်စုကြီးတစ်ခုနဲ့မင်းမလုပ်နိုင်ဘူး၊ သင်မူကားလူတစ် ဦး နှင့်ပြုလုပ်နိူင်သည်။ ဒါ့အပြင်နည်းပညာကတစ်ဆင့်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်တွန်းပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းပညာမရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်အုပ်စုငယ်တစ်ခု၏ virtual group အတွက် Zoom ကိုကြည့်ပါ။ တကယ်တော့ဒီမှာအွန်လိုင်း သငျသညျလညျးအခြို့သောသတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သည်။ နံပါတ် (၃)၊ မင်းကအုပ်စုငယ်တစ်ခုမှာမနေဘူးဆိုရင်၊ ငါဒီတစ်ပတ်မှာအွန်လိုင်းအုပ်စုထဲကို ၀ င်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါ့မယ်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ PastorRick@saddleback.com PastorRick @ saddleback စကားလုံးတစ်လုံး၊ SADDLEBACK saddleback.com, ငါမင်းကိုဆက်သွယ်ပေးမယ် အားလုံးအွန်လိုင်းအုပ်စုတစ်စုမှ? သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် Saddleback ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ပါဝင်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ ငါပေးပို့နေကြောင်းသင်၏နေ့စဉ်သတင်းလွှာကိုဖတ်ရှုဖို့ ဒီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းနေ့တိုင်း။ ၎င်းကို "Saddleback at Home" ဟုခေါ်သည်။ အကြံပေးချက်တွေရတယ်၊ အားပေးစကားတွေရတယ်။ သင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့သတင်းရှိတယ် အလွန်လက်တွေ့ကျသောအရာ နေ့တိုင်းမင်းနဲ့ဆက်သွယ်ချင်တယ် ရယူပါ "အိမ်မှာ Saddleback ။ " သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာမရှိရင် ထို့နောက်သင်ကမရတော့ပါ။ ပြီးတော့မင်းကိုမင်းရဲ့အီးမေးလ်ပို့လို့ရတယ် PastorRick@saddleback.com သို့သွားပါ၊ မင်းကနေ့စဉ်ဆက်သွယ်မှုကိုရလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ် "နေအိမ်ထဲမှာ Saddleback" သတင်းလွှာ။ ငါဆုတောင်းပဌနာမပြုမီနီးကပ်ကဘာလဲဆိုတာ မင်းကိုငါဘယ်လောက်အထိချစ်လဲ နေ့တိုင်းမင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးနေတယ်၊ ငါသည်လည်းသင်တို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာပြုမည်။ ကျနော်တို့အတူတူဒီမှတဆင့်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာရှိတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေရန်၊ အဘယ်သူဖြစ်ပျက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာအားလုံးမှဝိညာဉ်ရေးနိူးထမှုရရှိနိုင်သည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကဘုရားသခင်ကိုမကြာခဏလှည့်လာကြတယ် သူတို့ခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါ။ မင်းအတွက်ဆုတောင်းခွင့်ပေးပါ ဖခင်၊ လူအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုဘယ်သူနားထောင်နေလဲ ယာကုပ်အခန်းကြီး ၁ ပါသတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျှောက်ကြပါစို့။ ပထမခြောက်ခု၊ ခုနစ်ခု။ ငါတို့ပြproblemsနာတွေလာတာ၊ သူတို့ဖြစ်ပျက်လာမယ်ဆိုတာလေ့လာကြည့်ရအောင်၊ သူတို့ကပြောင်းလို့ရတယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်၊ မင်းတို့ကိုမင်းတို့ယုံကြည်စိတ်ချမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘ ၀ မှာကောင်းအောင်အသုံးချပါ။ သံသယမဖြစ်ဖို့ကူညီပါ။ ဝမ်းမြောက်ရန်၊ သခင်တောင်းခံရန်မစမူပါ။ နှင့်သင်၏ကတိတော်များကိုသတိရ။ လူတိုင်းအတွက်ကျန်းမာတဲ့ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဖို့ဆုတောင်းပေးတယ်။ ယေရှုနာမ၌အာမင်။ လူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ ဒီဟာကိုအခြားတစ်ယောက်ယောက်ဆီသို့ကူးပေးပါ။
သင်းအုပ်ဆရာ Rick Warren နှင့်အတူ &quot;အခက်အခဲများကိုကိုင်တွယ်သောယုံကြည်ခြင်း&quot;
< start="1.34" dur="1.42"> - ဟိုင်းလူတိုင်းငါ Rick Warren ပါ၊ >
< start="2.76" dur="1.6"> Saddleback ဘုရားကျောင်းနှင့်စာရေးဆရာမှာသင်းအုပ်ဆရာ >
< start="4.36" dur="2.58"> "The Purpose Driven Life" ၏ဟောပြောသူနှင့်ဟောပြောသူ >
< start="6.94" dur="2.71"> "Daily Hope" အစီအစဉ်တွင်။ >
< start="9.65" dur="2.53"> ဒီထုတ်လွှင့်မှုသို့ညှိခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ >
< start="12.18" dur="3.59"> ဒီအပတ်ကကယ်လီဖိုးနီးယား၊ Orange County မှာ၊ >
< start="15.77" dur="2.47"> အစိုးရကသူတို့တားမြစ်ထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် >
< start="18.24" dur="4.19"> မည်သည့်အရွယ်အစားမဆိုမျိုးအားလုံးအစည်းအဝေးများ >
< start="22.43" dur="1.46"> လ၏အဆုံးတိုင်အောင်။ >
< start="23.89" dur="2.81"> အိမ်၌ရှိသော Saddleback ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကြိုဆိုပါသည်။ >
< start="26.7" dur="1.41"> မင်းဒီမှာရောက်နေလို့ဝမ်းသာပါတယ် >
< start="28.11" dur="5"> ထိုအခါငါဗီဒီယိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆုံးမbeဝါဒပေးလိမ့်မယ် >
< start="33.31" dur="4.59"> ယခုနှင့်ဤ COVID-19 အကြပ်အတည်းအဆုံးသတ်သည့်အခါ။ >
< start="37.9" dur="2.12"> အိမ်၌ရှိသော Saddleback ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကြိုဆိုပါသည်။ >
< start="40.02" dur="3.34"> ထိုအခါငါအပတ်တိုင်းငါ့နောက်သို့လိုက်ရန်သင့်အားဖိတ်ကြားချင်တယ်, \_ t >
< start="43.36" dur="2.25"> အတူတူဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုန်ဆောင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါ။ >
< start="45.61" dur="2.91"> ငါတို့မှာတေးဂီတနဲ့ဝတ်ပြုမှုအတူတူရှိလိမ့်မယ်၊ >
< start="48.52" dur="2.44"> ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမှောက်လှန်သဖြင့်၊ >
< start="50.96" dur="3.01"> ငါထင်သည်အတိုင်းငါသိ၏ >
< start="53.97" dur="2.15"> စကားမစပ်, ပထမ ဦး ဆုံးငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြရန်လိုအပ်သည်။ >
< start="56.12" dur="3.84"> ငါသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုအစည်းအဝေးဖျက်သိမ်းရန်မယ်လို့နေသေးတယ်။ >
< start="59.96" dur="3.6"> ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာငါမှာ Saddleback စတူဒီယိုရှိတယ် >
< start="63.56" dur="1.32"> ငါ့ကားဂိုဒေါင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် >
< start="64.88" dur="2.34"> တကယ်တော့ဒါကိုကျွန်ုပ်၏ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာ taping လုပ်တယ်။ >
< start="67.22" dur="2.46"> ငါ့အရိုးနည်းပညာအမှုထမ်း။ >
< start="69.68" dur="1.979"> ယောက်ျားများလာပါ၊ လူတိုင်းကိုမင်္ဂလာပါ။ >
< start="71.659" dur="2.101"> (ရယ်သံများ) >
< start="73.76" dur="3.12"> သူတို့ကဒီမှာကကျော်ရွှေ့ကူညီရန်နှင့်ကအားလုံးကို set up >
< start="76.88" dur="4.74"> ဒါကြောင့်မင်းတို့အပတ်တိုင်းစကားပြောနိုင်အောင် >
< start="81.62" dur="3.32"> ယခုတွင်ငါသည်ငါတို့ဖုံးလွှမ်းသင့်တယ်အဘယ်အရာကိုစဉ်းစားအဖြစ် >
< start="84.94" dur="3.22"> ဒီ COVID-19 အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း၊ >
< start="88.16" dur="2.98"> ငါယာကုပ်၏စာအုပ်ချက်ချင်းစဉ်းစားမိတယ်။ >
< start="91.14" dur="2.67"> ယာကုပ်ကျမ်းသည်အလွန်သေးငယ်သောစာအုပ်ဖြစ်သည် >
< start="93.81" dur="2.15"> ဓမ္မသစ်ကျမ်းအဆုံး၌ဖြစ်သည်။ >
< start="95.96" dur="3.81"> ဒါပေမယ့်ဒါအရမ်းအသုံးဝင်ပြီးအရမ်းအသုံးဝင်တယ်၊ >
< start="99.77" dur="5"> ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုဘဝမတည်မြဲတဲ့အချိန်မှာသက်ရောက်စေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုလို့ငါခေါ်လိုက်တယ်။ >
< start="105.56" dur="3.67"> ထိုအခါငါတစ်ခုခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါထင်, >
< start="109.23" dur="4.75"> ဘဝမတည်မြဲသည့်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သောယုံကြည်ခြင်းရှိရန်လိုအပ်သည်။ >
< start="113.98" dur="2.86"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအခုသိပ်မကောင်းဘူး။ >
< start="116.84" dur="2.75"> ဒီတော့ဒီနေ့ဒီရက်သတ္တပတ်ငါတို့စတော့မယ် >
< start="119.59" dur="3.25"> အတူတူခရီးတစ်ခုကသင့်ကိုအားပေးပါတယ် >
< start="122.84" dur="1.03"> ဒီအကျပ်အတည်းကတဆင့်။ >
< start="123.87" dur="3.22"> ဒီမက်ဆေ့ခ်ျတွေထဲကတခုခုကိုမင်းမလွတ်စေချင်ဘူး။ >
< start="127.09" dur="4.1"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျိမ်းစ်စာအုပ်ကအဓိကစာအုပ် ၁၄ လုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားလို့ပဲ >
< start="131.19" dur="4.34"> ဘ ၀ ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များ၊ ဘဝ၏အဓိကပြissuesနာ ၁၄ ခု၊ >
< start="135.53" dur="3.76"> သင်တို့တွင်ရှိသမျှသောတစ်ခုတည်းသောဒေသများ 14 >
< start="139.29" dur="1.91"> မင်းဘ ၀ မှာမင်းနဲ့ဆက်ဆံရမယ် >
< start="141.2" dur="3.17"> ပြီးတော့မင်းကအနာဂတ်မှာမင်းနဲ့ဆက်ဆံရတော့မယ်။ >
< start="144.37" dur="3.52"> ဥပမာ၊ ယာကုပ်အခန်းကြီး ၁ တွင် >
< start="147.89" dur="1.6"> ငါ့ကိုဒီစာအုပ်ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ပါရစေ။ >
< start="149.49" dur="1.42"> ၎င်းသည်အခန်းလေးခန်းသာရှိသည်။ >
< start="150.91" dur="2.99"> အခန်းတစ်, ကပထမ ဦး ဆုံးအခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်။ ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ >
< start="153.9" dur="1.77"> ငါတို့သည်ယနေ့အကြောင်းပြောမယ်။ >
< start="155.67" dur="4.13"> သင်၏ပြforနာများအတွက်ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်ကားအဘယ်နည်း။ >
< start="159.8" dur="1.6"> ထို့နောက်ရွေးချယ်မှုအကြောင်းပြောသွားသည်။ >
< start="161.4" dur="1.62"> မင်းဘယ်လိုတွေးနေလဲ။ >
< start="163.02" dur="2.085"> ဘယ်အချိန်မှာဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာမင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ >
< start="165.105" dur="2.335"> သင်မည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်ကိုသင်မည်သို့သိသနည်း။ >
< start="167.44" dur="2.41"> ပြီးတော့သွေးဆောင်မှုအကြောင်းပြောထားတယ်။ >
< start="169.85" dur="3.29"> ငါတို့ဘုံသွေးဆောင်မှုကိုသင်ဘယ်လိုအောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင် >
< start="173.14" dur="3.24"> မင်းကိုရှုံးနိမ့်စေတဲ့ပုံပေါ်နေတဲ့ဘဝမှာ။ >
< start="176.38" dur="2.04"> ပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်အကြောင်းပြောတယ်။ >
< start="178.42" dur="2.68"> ထို့ပြင်သမ္မာကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သို့ကောင်းချီးပေးနိုင်သည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ >
< start="181.1" dur="2.24"> ၎င်းကိုဖတ်ရုံသာမကကောင်းချီးခံစားရပါလိမ့်မည်။ >
< start="183.34" dur="1.56"> ဒါကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပါ။ >
< start="184.9" dur="2.36"> ငါတို့သည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းသူတို့အားကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ >
< start="187.26" dur="2.7"> အခန်း (၂) တွင်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်။ >
< start="189.96" dur="3.06"> လူတွေကိုမင်းဘယ်လိုပြုမူဆက်ဆံတယ်ဆိုတာငါတို့ကြည့်ရှုမယ်။ >
< start="193.02" dur="2.628"> ပြီးတော့လူတွေအိမ်မှာပဲနေရမယ်၊ >
< start="195.648" dur="4.242"> မိသားစုအတူတကွ၊ ကလေးများ၊ အမေများနှင့်အဖေများ၊ >
< start="199.89" dur="2.32"> ပြီးတော့လူတွေဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အာရုံစူးစိုက်နေကြတယ်။ >
< start="202.21" dur="2.74"> ဒါကဆက်ဆံရေးအပေါ်အရေးကြီးသောသတင်းစကားဖြစ်လိမ့်မယ်။ >
< start="204.95" dur="1.39"> ထို့နောက်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပြောထားသည်။ >
< start="206.34" dur="4.76"> အဲဒီလိုမခံစားရဘူးဆိုရင်သင်ဘယ်လိုဘုရားသခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်ကိုးစားပါသလဲ >
< start="211.1" dur="2.18"> နှင့်အမှုအရာမှားလမ်းကိုသွားနေကြသည်? >
< start="213.28" dur="1.64"> ဒါကအခန်း ၂ မှာပါတယ်။ >
< start="214.92" dur="3.32"> အခန်းသုံး၊ >
< start="218.24" dur="1.66"> စကားပြောဆိုမှု၏စွမ်းအား။ >
< start="219.9" dur="2.12"> ဤရွေ့ကား, ဒီအရေးအပါဆုံးကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="222.02" dur="3.73"> သင်၏နှုတ်ကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲသည်ကိုသမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသည်။ >
< start="225.75" dur="2.25"> ကျွန်တော်တို့ဟာအကျပ်အတည်းကြုံနေရသည်ဖြစ်စေမအရေးကြီးသည်။ >
< start="228" dur="2.27"> ပြီးတော့ချစ်ကြည်ရေးအကြောင်းပြောသွားတယ်။ >
< start="230.27" dur="2.21"> ပြီးတော့အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းလက်တွေ့ကျတဲ့အချက်အလက်တွေပေးတယ် >
< start="232.48" dur="2.71"> ဘယ်လိုပညာရှိခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်သလဲ >
< start="235.19" dur="2.7"> နှင့်ပညာမဲ့သောမိတ်ဆွေများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ >
< start="237.89" dur="2.24"> ဒါကအခန်း ၃ ပါ။ >
< start="240.13" dur="3.5"> အခန်းလေးသည်ပconflictိပက္ခဖြစ်သည်။ >
< start="243.63" dur="2.39"> အခန်းလေးမှာပြောရမယ် >
< start="246.02" dur="1.88"> ဘယ်လိုငြင်းခုံမှုကိုသင်ရှောင်နိုင်သလဲ >
< start="247.9" dur="1.56"> ဒါကတကယ့်ကိုအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်။ >
< start="249.46" dur="2.78"> တင်းမာမှုများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ >
< start="252.24" dur="2.94"> လူတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှအငြင်းပွားမှုတွေကိုသင်ဘယ်လိုရှောင်နိုင်မလဲ။ >
< start="255.18" dur="2.03"> ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုစီရင်ခြင်းအကြောင်းပြောတယ်။ >
< start="257.21" dur="2.74"> ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုကစားမလဲ။ >
< start="259.95" dur="1.84"> ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်ငြိမ်းချမ်းမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည် >
< start="261.79" dur="1.08"> ငါတို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်။ >
< start="262.87" dur="1.67"> ပြီးတော့အနာဂတ်အကြောင်းပြောတယ်။ >
< start="264.54" dur="1.82"> အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲ။ >
< start="266.36" dur="1.56"> ဒါကအခန်းလေးမှာအားလုံးပါပဲ။ >
< start="267.92" dur="2.75"> ယခုငါနောက်ဆုံးအခန်း၊ အခန်း ၅ တွင်ငါပြောခဲ့သည် >
< start="270.67" dur="0.98"> အမှန်တကယ်တွင်အခန်းလေးခန်းရှိသည် >
< start="271.65" dur="1.683"> ဂျိမ်းငါးအခန်းကြီး။ >
< start="274.327" dur="2.243"> ငါတို့ငွေအကြောင်းပြောမယ် >
< start="276.57" dur="3.65"> ပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ဘယ်လိုပညာရှိနိုင်မလဲဆိုတာပါ။ >
< start="280.22" dur="1.73"> ပြီးတော့ငါတို့သည်းခံခြင်းကိုကြည့်မယ်။ >
< start="281.95" dur="3.26"> သင်ဘုရားသခင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ဘာလုပ်သနည်း။ >
< start="285.21" dur="1.92"> ထိုင်ရန်အခက်ခဲဆုံးအခန်း >
< start="287.13" dur="3.87"> သင်မြန်မြန်ရောက်နေချိန်တွင်ဘုရားသည်ဘုရားမဟုတ်ပါ။ >
< start="291" dur="1.29"> ပြီးတော့ငါတို့ဆုတောင်းခြင်းကိုကြည့်မယ်၊ >
< start="292.29" dur="2.07"> ဒါကနောက်ဆုံးကြည့်ရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ >
< start="294.36" dur="1.94"> သင်၏ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ဆုတောင်းသနည်း။ >
< start="296.3" dur="2.58"> ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အဖြေရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်ဟုသမ္မာကျမ်းစာကဆိုသည်။ >
< start="298.88" dur="2.29"> ဆုတောင်းခြင်းမပြုသောနည်းရှိသည်။ >
< start="301.17" dur="1.27"> ငါတို့သည်ကြည့်ရှုမယ်။ >
< start="302.44" dur="3.763"> အခုဒီနေ့ပထမအခန်းငယ် ၆ ကိုကြည့်ရအောင် >
< start="306.203" dur="2.072"> ယာကုပ်၏စာအုပ်။ >
< start="308.275" dur="5"> သင့်မှာသမ္မာကျမ်းစာမရှိဘူးဆိုရင်မင်းကို download လုပ်ပါ >
< start="313.46" dur="3.73"> ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အပြင်အဆင်၊ သင်ကြားရေးမှတ်စုများ၊ >
< start="317.19" dur="2.02"> ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကြည့်ရမယ့်ကျမ်းချက်တွေအားလုံးပေါ့ >
< start="319.21" dur="2.04"> သင့်ရဲ့အကြမ်းဖျင်းအပေါ်ရှိပါတယ်။ >
< start="321.25" dur="3.22"> ယာကုပ်အခန်းကြီး ၁၊ >
< start="324.47" dur="4.07"> ပြီးတော့သမ္မာကျမ်းစာကဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါပြောထားတယ် >
< start="328.54" dur="2.33"> သင့်ရဲ့ပြproblemsနာများကိုကိုင်တွယ်ရန်ရှိခြင်း။ >
< start="330.87" dur="2.35"> ပထမ၊ ယာ ၁ ​​း ၁ မှာဒီလိုပြောထားတယ်။ >
< start="333.22" dur="5"> ဘုရားသခင်နှင့်အရှင်ယေရှုခရစ်၏ကျွန်ငါယာကုပ်သည်၊ >
< start="338.86" dur="4.18"> လူမျိုးတို့တွင်အရပ်ရပ်ကွဲပြားသော ၁၂ မျိုးစေ့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့။ >
< start="343.04" dur="2.23"> အခုငါ့ကိုဒီမှာတစ်မိနစ်ခေတ္တနားပြီးပြောခွင့်ပြုပါ >
< start="345.27" dur="2.95"> ဒီအရှိဆုံးနားလည်နိဒါန်းဖြစ်ပါတယ် >
< start="348.22" dur="1.71"> သမ္မာကျမ်းစာထဲကမည်သည့်စာအုပ်၏။ >
< start="349.93" dur="2.01"> ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဂျိမ်းစ်ဆိုတာမင်းသိလို့လား။ >
< start="351.94" dur="3.073"> သူသည်ယေရှု၏မိတူဖကွဲညီဖြစ်သည်။ >
< start="355.013" dur="1.507"> မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ >
< start="356.52" dur="2.19"> ဆိုလိုသည်မှာသူသည်မာရိနှင့်ယောသပ်၏သားဖြစ်သည်။ >
< start="358.71" dur="2.899"> ယေရှုသည်မာရိ၏သားဖြစ်သည်။ >
< start="361.609" dur="4.591"> သူသည်ယောသပ်၏သားမဟုတ်ခဲ့ပါ။ အကြောင်းမှာဘုရားသခင်သည်ယေရှု၏ဖခင်ဖြစ်သည်။ >
< start="366.2" dur="2.47"> ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကမာရိနဲ့ယောသပ်တို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ် >
< start="368.67" dur="3.52"> နောက်ပိုင်းတွင်ကလေးများစွာမွေးဖွားခဲ့ပြီးသူတို့၏အမည်များကိုပင်ပေးခဲ့သည်။ >
< start="372.19" dur="2.87"> ဂျိမ်းစ်သည်ခရစ်ယာန်မဟုတ်ပါ။ >
< start="375.06" dur="2.27"> သူသည်ခရစ်တော်နောက်လိုက်မဟုတ်ပါ။ >
< start="377.33" dur="3.54"> သူကသူ့မိတူဖကွဲကိုမေရှိယလို့မယုံဘူး >
< start="380.87" dur="1.78"> ယေရှု၏ဓမ္မအမှုတစ်ခုလုံးအတွင်း။ >
< start="382.65" dur="1.29"> သူကသံသယရှိတယ်။ >
< start="383.94" dur="3.14"> ညီအစ်ကိုကမယုံဘူး >
< start="387.08" dur="3.22"> အစ်ကိုကြီးအတွက်တော့ဒါကရှင်းရှင်းလေးပါ။ >
< start="390.3" dur="3.81"> အဘယ်အရာကယာကုပ်အားယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်စေသနည်း။ >
< start="394.11" dur="1.56"> ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း။ >
< start="395.67" dur="4.42"> ယေရှုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာသောအခါ >
< start="400.09" dur="1.96"> ရက်ပေါင်း ၄၀ ကြာအောင်ယာကုပ်သည်သူ့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ >
< start="402.05" dur="3.79"> သူသည်ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည် >
< start="405.84" dur="2.09"> ယေရုရှလင်ဘုရားကျောင်းမှာ။ >
< start="407.93" dur="3.82"> ဒီတော့ဘယ်သူ့ကိုမှနာမည်ပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကဒါပဲ။ >
< start="411.75" dur="4.06"> ယေရှုနဲ့အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ဂျိမ်းစ်လို့သူပြောနိုင်တယ်။ >
< start="415.81" dur="2.95"> ယေရှု၏မိတူဖကွဲညီယာကုပ်။ >
< start="418.76" dur="3.87"> ကြီးပြင်းလာတဲ့ယေရှုရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းယာကုပ်။ >
< start="422.63" dur="1.47"> အဲဒီလိုမျိုးအရာတွေ၊ ဒါပေမယ့်သူမလုပ်နိုင်ဘူး။ >
< start="424.1" dur="2.68"> သူသည်ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်ဂျိမ်းစ်ကိုရိုးရှင်းစွာပြောလိုက်သည်။ >
< start="426.78" dur="4.97"> သူကရာထူးကိုဆွဲမထားဘူး၊ >
< start="431.75" dur="2.24"> သို့သော်အခန်းငယ် ၂ ၌သူစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည် >
< start="433.99" dur="5"> သင်၏ပြinနာများအတွက်ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်တော်မူချက်၏ဤပထမဆုံးပြissueနာ။ >
< start="439.07" dur="1.86"> မင်းကိုဖတ်ပြပါရစေ >
< start="440.93" dur="2.41"> သူက, အခါစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုကပြောပါတယ် >
< start="444.2" dur="5"> မင်းတို့ဘ ၀ ထဲကိုလူစုလူဝေးကို ၀ င်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါ၊ >
< start="449.52" dur="3.15"> ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းအဖြစ်သူတို့ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ >
< start="452.67" dur="2.82"> သူတို့သည်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးရန်လာသည်ကိုသတိပြုပါ။ >
< start="455.49" dur="4.8"> နှင့်သင်၌ခံနိုင်ရည်၏အရည်အသွေးထုတ်လုပ်ရန်။ >
< start="460.29" dur="4.32"> သို့သော်ထိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်တိုင်အောင်ထိုဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လုပ်ပါ >
< start="464.61" dur="5"> အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပြီးသင်ဟာလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် >
< start="470.01" dur="5"> ရင့်ကျက်ဇာတ်ကောင်များနှင့်သမာဓိရှိ၏ >
< start="475.11" dur="2.71"> အဘယ်သူမျှမအားနည်းအစက်အပြောက်နှင့်အတူ။ >
< start="477.82" dur="2.24"> ၎င်းသည် Phillips ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်သည် >
< start="480.06" dur="2.73"> ယာကုပ်အခန်းကြီး ၁ မှအခန်းငယ်နှစ်ခုမှ ၆ အထိ။ >
< start="482.79" dur="3.377"> ယခုသူသည်သင်၏ဘဝထဲသို့စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးလာသောအခါသူကပြောပါတယ် >
< start="486.167" dur="2.963"> သူတို့ကမင်းတို့ဘ ၀ ထဲကို ၀ င်လာပြီးသူတို့ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်တယ် >
< start="489.13" dur="1.69"> ကျူးကျော်သူများအဖြစ်သူတို့ကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်ကြိုဆိုပါ။ >
< start="490.82" dur="2.57"> သူကမင်းမှာပြproblemsနာတွေရှိတယ်၊ >
< start="493.39" dur="2.09"> မင်းမှာပြproblemsနာတွေရှိတယ်၊ >
< start="495.48" dur="1.807"> ပြproblemsနာတက်တယ်။ >
< start="499.51" dur="0.87"> မင်းစဉ်းစားနေတာကိုအခုငါသိပြီ >
< start="500.38" dur="1.94"> သငျသညျသငျသညျငါ့ကိုနောက်နေပါသလား >
< start="502.32" dur="3.15"> COVID-19 ကိုဘာကြောင့်နှစ်သက်သင့်တာလဲ။ >
< start="505.47" dur="5"> ကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်ဤစမ်းသပ်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်ကြိုဆိုသင့်သနည်း။ >
< start="510.6" dur="2.31"> ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ >
< start="512.91" dur="3.74"> ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ဤတစ်ခုလုံးကိုသဘောထားသော့ချက် >
< start="516.65" dur="2.85"> အကျပ်အတည်း၏အလယ်၌အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထား >
< start="519.5" dur="3.65"> နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၊ >
< start="523.15" dur="2.19"> သူက, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဤစမ်းသပ်မှုမျိုးကပြောသည် >
< start="525.34" dur="2.99"> မင်းတို့ဘ ၀ ထဲကိုလူစုလူဝေးကို ၀ င်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါ၊ >
< start="528.33" dur="4.89"> သူတို့ကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်ကြိုဆိုပါ၊ >
< start="533.22" dur="3.75"> သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစုံစမ်းခြင်းငှါလာ၏။ >
< start="536.97" dur="3.839"> ပြီးတော့သူဆက်ပြောတယ်၊ သူတို့ဘဝမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာပါပဲ။ >
< start="540.809" dur="5"> သူပြောနေတာကမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုပဲ >
< start="545.99" dur="4.44"> ဒီ COVID-19 ကပ်ရောဂါမှာကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်ရှိသောရက်သတ္တပတ်များ >
< start="550.43" dur="2.87"> အခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိနေတုန်းပဲ >
< start="553.3" dur="3.11"> လူအမျိုးမျိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည် >
< start="556.41" dur="2.31"> စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ဆိုင်တွေပိတ်နေကြတယ်၊ >
< start="558.72" dur="1.89"> သူတို့ကျောင်းတွေပိတ်နေကြတယ်၊ >
< start="560.61" dur="1.57"> သူတို့သည်အသင်းတော်များကိုပိတ်ပစ်ကြသည်၊ >
< start="562.18" dur="1.69"> သူတို့ကဘယ်နေရာကိုမဆိုပိတ်ထားတယ် >
< start="563.87" dur="3.86"> လူတွေစုရုံးနေကြပြီး၊ Orange County မှာလိုမျိုးပေါ့။ >
< start="567.73" dur="4.29"> ဒီလမှာဘယ်သူ့ကိုမှတွေ့ခွင့်မရဘူး။ >
< start="572.02" dur="3.75"> သူကပြောပါတယ်, ဒီပြproblemsနာတွေကိုကိုင်တွယ်၌သင်တို့၏အောင်မြင်မှု >
< start="575.77" dur="3.49"> သင်၏နားလည်မှုဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ >
< start="579.26" dur="1.3"> သင်၏နားလည်မှုဖြင့် >
< start="580.56" dur="3.24"> ထိုပြproblemsနာများအပေါ်သင်၏သဘောထားဖြင့်။ >
< start="583.8" dur="3.69"> သင်သိသောအရာ၊ >
< start="587.49" dur="3.79"> အခုဒီကျမ်းပိုဒ်ရဲ့ပထမဆုံးအချက်ကိုမင်းနားလည်စေချင်တယ် >
< start="591.28" dur="3.957"> ဘုရားသခင်သည်ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးချက်လေးခုပေးသည်ဟုဖြစ်သည်။ >
< start="595.237" dur="2.253"> ခင်ဗျားတို့ဒီစာအုပ်တွေကိုရေးချချင်တယ်။ >
< start="597.49" dur="2.07"> သင်၏ဘဝပြproblemsနာများနှင့်ပတ်သက်သောသတိပေးချက်လေးခု၊ >
< start="599.56" dur="2.35"> ငါတို့အခုငါတို့ဖြတ်သန်းနေတဲ့အကျပ်အတည်းတွေပါပါတယ်။ >
< start="601.91" dur="5"> နံပါတ်တစ်သူပြfirstနာများမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ >
< start="607.42" dur="2.34"> ပြနာများမလွှဲမရှောင်ဖြစ်ကြ၏။ >
< start="609.76" dur="1.04"> အခုသူဘယ်လိုပြောနေတာလဲ။ >
< start="610.8" dur="4.33"> သူကပြောပါတယ်, စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးလာသောအခါ။ >
< start="615.13" dur="4.41"> စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးရှိမယ်လို့သူမပြောခဲ့ဘူး၊ >
< start="619.54" dur="1.72"> သင်အဲဒါကိုရေတွက်နိုင်တယ်။ >
< start="621.26" dur="3.27"> အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသောနေရာသည်ဤကောင်းကင်ဘုံမဟုတ်ပါ။ >
< start="624.53" dur="2.66"> ဤသည်အရာအားလုံးကျိုးပဲ့ဘယ်မှာကမ္ဘာမြေဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="627.19" dur="2.05"> ပြီးတော့သူကမင်းမှာပြproblemsနာတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောနေတယ်၊ >
< start="629.24" dur="3.44"> သင်အခက်အခဲတွေရှိလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကိုသင်အားကိုးနိုင်ပါတယ်၊ >
< start="632.68" dur="2.37"> သင်အဲဒီမှာစတော့ရှယ်ယာဝယ်နိုင် >
< start="635.05" dur="2.99"> အခုတော့ဂျိမ်းစ်တစ်ယောက်တည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="638.04" dur="1.62"> အားလုံးသမ္မာကျမ်းစာကတဆင့်ကပြောပါတယ်။ >
< start="639.66" dur="2.77"> သခင်ယေရှုကလောက၌သင်သည်စမ်းသပ်မှုများကြုံတွေ့ရမည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည် >
< start="642.43" dur="3.68"> စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံကြလိမ့်မည်။ >
< start="646.11" dur="2.29"> သူကမင်းဘဝမှာပြhaveနာတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် >
< start="648.4" dur="3.07"> ဒီတော့ပြhaveနာတက်ရင်ဘာကြောင့်အံ့သြကြတာလဲ။ >
< start="651.47" dur="1.632"> ပေတရုကမအံ့သြပါနဲ့လို့ပြောတယ် >
< start="653.102" dur="2.558"> သငျသညျမီးစမ်းသပ်မှုတွေရှောက်သွားသည့်အခါ။ >
< start="655.66" dur="1.786"> အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အလားမလုပ်ပါနှင့်ဟုဆိုသည် >
< start="657.446" dur="2.744"> လူတိုင်းသည်ခက်ခဲကျပ်တည်းသောကာလကိုဖြတ်သန်းရကြသည်။ >
< start="660.19" dur="2.04"> ဘဝဟာခက်ခဲတယ်။ >
< start="662.23" dur="2.53"> ဤသည်ကောင်းကင်မဟုတ်, ဒီကမ္ဘာမြေ။ >
< start="664.76" dur="3.18"> ဘယ်သူမှကိုယ်ခံစွမ်းအားမထား၊ >
< start="667.94" dur="2.94"> ဘယ်သူမှလျှပ်ကာမထားဘူး၊ ဘယ်သူမှကင်းလွတ်တယ်။ >
< start="670.88" dur="1.73"> မင်းပြproblemsနာတက်တော့မယ်လို့သူကပြောပါတယ် >
< start="672.61" dur="2.78"> သူတို့မလွှဲမရှောင်သောကြောင့်။ >
< start="675.39" dur="3.84"> ငါကောလိပ်တက်တုန်းကငါမှတ်မိသေးတယ်။ >
< start="679.23" dur="2.27"> လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကငါဖြတ်သန်းခဲ့သည် >
< start="681.5" dur="1.71"> တကယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေ။ >
< start="683.21" dur="3.09"> ငါဆုတောင်းပဌနာပြုစပြုပြီး၊ >
< start="686.3" dur="2.91"> စမ်းသပ်မှုတွေအစားပိုဆိုးလာတယ်။ >
< start="689.21" dur="2.22"> ပြီးတော့ငါ "ဘုရားသခင်၊ ငါတကယ်စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်" လို့ပြောခဲ့တယ် >
< start="691.43" dur="1.72"> နှင့်ပြproblemsနာများပိုမိုဆိုးရွားတယ်။ >
< start="693.15" dur="2.43"> ပြီးတော့ငါ "ဘုရားသခင်၊ ငါတကယ်စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်" လို့ပြောခဲ့တယ် >
< start="695.58" dur="2.93"> သူတို့သည်လည်း သာ၍ ဆိုးသဖြင့်၊ >
< start="698.51" dur="1.77"> ဘာဖြစ်နေတာလဲ >
< start="700.28" dur="1.82"> ကောင်းပြီနောက်ဆုံးခြောက်လခန့်အကြာမှာ၊ >
< start="702.1" dur="2.64"> ငါအစပြုတာထက်ပိုပြီးစိတ်ရှည်သည်းခံခဲ့တယ် >
< start="704.74" dur="2.07"> ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်ကိုသည်းခံခြင်းသင်ပေးခဲ့တယ် >
< start="706.81" dur="3.2"> သူတို့အားအခက်အခဲများမှတဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="710.01" dur="2.85"> အခုတော့ပြproblemsနာတွေကရွေးချယ်စရာသင်တန်းမဟုတ်ပါ >
< start="712.86" dur="2.44"> မင်းဘဝမှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာ >
< start="715.3" dur="2.863"> ဟင့်အင်း၊ သူတို့လိုအပ်တယ်၊ မင်းတို့သူတို့ထဲကရွေးလို့မရဘူး။ >
< start="719.01" dur="3.71"> ဘ ၀ ကျောင်းမှဘွဲ့ယူရန် >
< start="722.72" dur="1.96"> သငျသညျခက်ခဲခေါက်ကျောင်းကိုရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ >
< start="724.68" dur="2.87"> သငျသညျသူတို့မလွှဲမရှောင်များမှာပြproblemsနာများကိုဖြတ်သန်းသွားမယ်။ >
< start="727.55" dur="1.35"> သမ္မာကျမ်းစာကဤသို့ဆိုထားသည်။ >
< start="728.9" dur="2.43"> ပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာကပြောထားသည်မှာဒုတိယအချက်ဖြစ်သည်။ >
< start="731.33" dur="3.923"> ပြနာတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဆိုလိုတာကသူတို့အားလုံးအတူတူမဟုတ်ဘူး။ >
< start="735.253" dur="2.817"> သငျသညျတူညီတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအသီးအသီးမရကြဘူး။ >
< start="738.07" dur="1.89"> သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောသူတို့ကိုအများကြီးရ။ >
< start="739.96" dur="2.11"> သူတို့ကိုသင်ရရုံသာမကမတူညီသောအရာများရရှိသည်။ >
< start="742.07" dur="5"> သူကသင်ရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့အခါ၊ မင်းမှာပြproblemsနာအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ >
< start="748.25" dur="2.09"> သင်မှတ်စုများကိုရေးနေလျှင်၎င်းကိုသင်ဝိုင်းနိုင်သည်။ >
< start="750.34" dur="3.54"> စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးသည်သင်၏ဘ ၀ သို့ရောက်သောအခါ။ >
< start="753.88" dur="3.25"> မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါဥယျာဉ်မှူးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ >
< start="757.13" dur="2.32"> ပြီးတော့ငါဒီမှာအစိုးရကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် >
< start="759.45" dur="2.18"> အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ခွဲခြားခဲ့သည် >
< start="761.63" dur="3.493"> ပေါင်း ၂၀၅ မျိုး။ >
< start="765.123" dur="4.767"> သူတို့ထဲက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာငါ့ဥယျာဉ်မှာကြီးထွားလာတယ်။ (ရယ်သံများ) >
< start="769.89" dur="2.52"> ငါဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကြီးထွားလာတဲ့အခါ၊ >
< start="772.41" dur="2.85"> ကျွန်ုပ်သည် Warren ၏ပေါင်းပင်လယ်ယာအတွက်ဝန်ခံချက်ကိုယူသင့်ပါသည်။ >
< start="775.26" dur="3.62"> သို့သော်ပေါင်းပင်များစွာရှိသည်။ >
< start="778.88" dur="1.82"> စမ်းသပ်မှုများစွာရှိသည်။ >
< start="780.7" dur="1.76"> ပြproblemsနာများစွာရှိပါတယ်။ >
< start="782.46" dur="2.282"> သူတို့ကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာကြတယ်။ >
< start="784.742" dur="2.898"> အရသာ ၃၁ ခုကျော်ရှိသည်။ >
< start="787.64" dur="2.75"> ဒီစကားလုံးကဒီမှာပြောထားတဲ့နေရာအနှံ့ >
< start="790.39" dur="1.55"> မင်းဘဝမှာစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ >
< start="791.94" dur="4.26"> တကယ်တော့ဂရိဘာသာမှာ multicolored ကိုဆိုလိုတယ်။ >
< start="796.2" dur="2.795"> တနည်းအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အရိပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ် >
< start="798.995" dur="2.205"> မင်းရဲ့ဘဝမှာမင်းအဲဒီလိုသဘောတူမှာလား။ >
< start="801.2" dur="1.9"> စိတ်ဖိစီးမှု၏အရိပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ >
< start="803.1" dur="1.62"> သူတို့အားလုံးအတူတူမကြည့်ကြဘူး >
< start="804.72" dur="2.67"> ငွေရေးကြေးရေးဖိစီးမှု၊ >
< start="807.39" dur="2.37"> ကျန်းမာရေးစိတ်ဖိစီးမှုရှိတယ်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုရှိတယ်၊ >
< start="809.76" dur="1.62"> အချိန်စိတ်ဖိစီးမှုရှိတယ်။ >
< start="811.38" dur="5"> သူကသူတို့အားလုံးကွဲပြားတဲ့အရောင်တွေလို့ပြောနေတာ။ >
< start="816.41" dur="2.82"> သို့သော်သင် ထွက်၍ ကားဝယ်ပါကသင်လိုချင်လျှင် >
< start="819.23" dur="3.44"> ထုံးစံအရောင်တစ်ခု, ထို့နောက်သင်ကစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ >
< start="822.67" dur="2.98"> ပြီးတော့သူလုပ်တဲ့အခါမှာ၊ ခင်ဗျားစိတ်ကြိုက်အရောင်ရလာလိမ့်မယ်။ >
< start="825.65" dur="2.01"> တကယ်တော့ဒီမှာသုံးတဲ့စကားလုံးပဲ။ >
< start="827.66" dur="4.99"> ၎င်းသည်သင်၏ဘဝ၌အရောင်ရှိပြီးရောင်စုံစမ်းသပ်မှုများဖြစ်သည်။ >
< start="832.65" dur="2.14"> ဘုရားသခင်သည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်သူတို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ >
< start="834.79" dur="3.07"> သင်၏ပြproblemsနာအချို့သည်အမှန်တကယ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ >
< start="837.86" dur="1.842"> ငါတို့တွေအားလုံးအတူတူကြုံခဲ့ရတယ်၊ >
< start="839.702" dur="2.908"> ဒီတစ်ခုလိုပဲ COVID-19 ။ >
< start="842.61" dur="1.95"> ဒါပေမယ့်သူကပြproblemsနာတွေကမတူကွဲပြားလို့ပြောနေတာပဲ >
< start="844.56" dur="2.845"> ထိုအခါငါကဆိုလိုသောသူတို့ပြင်းထန်မှုကွဲပြားသည်။ >
< start="847.405" dur="3.143"> တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲ။ >
< start="850.548" dur="3.792"> သူတို့ကကြိမ်နှုန်းကွာခြားတယ်၊ ဒါကဘယ်လောက်ကြာသလဲ။ >
< start="854.34" dur="1.421"> ဒီဟာကဘယ်လောက်ကြာမလဲမသိဘူး >
< start="855.761" dur="2.699"> ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာငါတို့မသိဘူး။ >
< start="858.46" dur="2.197"> ငါပြောသောနေ့တွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုငါမြင်၏။ >
< start="860.657" dur="3.98"> သင်တို့အသက်တာသည်မိုsome်းရေကဲ့သို့ရွာစေမည်။ >
< start="864.637" dur="2.743"> "ဒါပေမယ့်ဒီရယ်စရာပါပဲ။ " (ရယ်သံများ) >
< start="867.38" dur="1.9"> ထိုအခါငါကကြောင်းလမ်းထင်ပါတယ် >
< start="869.28" dur="1.77"> လူတွေအများကြီးအခုခံစားနေရတယ်။ >
< start="871.05" dur="1.92"> ဒါကရီစရာလိုပဲ။ >
< start="872.97" dur="3.07"> ပြနာများမလွှဲမရှောင်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ variable ကိုဖြစ်ကြသည်။ >
< start="876.04" dur="2.86"> ဂျိမ်းစ်ပြောတဲ့တတိယအချက်ကတော့ငါတို့မအံ့သြကြဘူး >
< start="878.9" dur="2.87"> ပြproblemsနာများကိုခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်ကြသည်။ >
< start="881.77" dur="1.6"> သူတို့ကခန့်မှန်းရခက်ပါတယ် >
< start="883.37" dur="4.01"> စမ်းသပ်မှုတွေကမင်းရဲ့ဘ ၀ ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါ >
< start="887.38" dur="2.05"> သင်မှတ်စုများကိုရေးနေလျှင်ထိုစကားစုကိုဝိုင်းရံပါ။ >
< start="889.43" dur="3.13"> သူတို့သည်သင်၏ဘ ၀ ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ >
< start="892.56" dur="3.28"> ကြည့်ရှုပါ၊ သင်လိုအပ်တဲ့အခါဘာပြသနာမှမရှိပါဘူး >
< start="895.84" dur="1.6"> ဒါမှမဟုတ်သင်မလိုအပ်တဲ့အခါ။ >
< start="897.44" dur="1.97"> ဒါကြောင့်လာချင်သောအခါလာမယ့်လာပါတယ်။ >
< start="899.41" dur="1.97"> ၎င်းသည်ပြaနာတစ်ခု၏အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ >
< start="901.38" dur="3.05"> ပြနာများသည်အရေးအပါဆုံးအချိန်တွင်ရောက်သည်။ >
< start="904.43" dur="1.582"> ပြeverနာတစ်ခုလိုခံစားဖူးပါသလား >
< start="906.012" dur="2.778"> မင်းဘဝတစ်ခုထဲဝင်လာပြီ၊ မင်းအခုမသွားဘူး။ >
< start="908.79" dur="2.51"> တကယ်တော့အခုလိုလား။ >
< start="911.3" dur="3.82"> ဒီမှာက Saddleback ဘုရားကျောင်းမှာငါတို့ဟာအဓိကကင်ပိန်းမှာရောက်နေတယ် >
< start="915.12" dur="2.45"> အနာဂတ်အကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်။ >
< start="917.57" dur="3.27"> ထိုအခါရုတ်တရက်အားလုံး coronavirus တာမျိုး။ >
< start="920.84" dur="2.06"> ထိုအခါငါမသွားယခုသွား။ >
< start="922.9" dur="1.673"> (chuckles) ယခုမဟုတ်ပါ။ >
< start="926.75" dur="3.073"> သငျသညျနှောင်းပိုင်းတွင်အခါသင်ပြားချပ်ချပ်တာယာဖူးသလော >
< start="931.729" dur="2.361"> အချိန်များများရသည့်အခါသင်ပြားချပ်ချပ်မယူပါ။ >
< start="934.09" dur="1.823"> သင်တစ်နေရာရာကိုသွားဖို့အလျင်လိုနေသည် >
< start="937.12" dur="4.08"> မင်းရဲ့အဝတ်အစားအသစ်ပေါ်ကကလေးစိုစွတ်နေသလိုပဲ >
< start="941.2" dur="4.952"> မင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ညနေခင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုအတွက်ထွက်သွားနေသလိုပါပဲ >
< start="946.152" dur="2.918"> ဒါမှမဟုတ်မင်းမပြောခင်မင်းဘောင်းဘီကိုခွဲလိုက်တယ်။ >
< start="949.07" dur="2.55"> ဒါကတကယ်ကိုငါ့ထံသို့တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် >
< start="951.62" dur="1.713"> အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေပေါ်မှာ။ >
< start="956" dur="4.64"> တချို့လူတွေကအရမ်းစိတ်မရှည်ဘူး၊ >
< start="960.64" dur="1.77"> သူတို့သည်လည်နေသောတံခါးကိုမစောင့်နိုင်ပါ။ >
< start="962.41" dur="1.72"> သူတို့ကလုပ်ရမယ်၊ >
< start="964.13" dur="2.38"> သူတို့အခုလုပ်ရမယ်၊ အခုလုပ်ရမယ်။ >
< start="966.51" dur="3.99"> လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်တော်ဂျပန်ကိုရောက်နေတာသတိရပါ၊ >
< start="970.5" dur="3.34"> ငါမြေအောက်ရထားကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မြေအောက်ရထားမှာရပ်နေ၏ >
< start="973.84" dur="2.55"> တံခါးကိုဖွင့်သောအခါတံခါးပွင့်လေ၏။ >
< start="976.39" dur="3.33"> နှင့်ဂျပန်လူငယ်တစ် ဦး သည်ချက်ချင်းပင် >
< start="979.72" dur="4.49"> ငါအဲဒီမှာရပ်နေအဖြစ် projectile ငါ့ကိုအပေါ်အော့အန်။ >
< start="984.21" dur="5"> ထိုအခါငါ, အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ယခုစဉ်းစားမိတယ် >
< start="989.9" dur="3.583"> သူတို့မခန့်မှန်းရခက်ဘူး၊ သူတို့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့လာတတ်တယ်။ >
< start="994.47" dur="2.94"> မင်းဘဝမှာပြproblemsနာတွေကိုမင်းကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခဲတယ်။ >
< start="997.41" dur="3.69"> အခုတော့သတိပြုပါကစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးအခါ, ကပြောပါတယ် >
< start="1001.1" dur="3"> သူတို့ဟာမလွှဲမရှောင်နိုင်ဘူး၊ >
< start="1004.1" dur="3.98"> မင်းဘ ၀ ထဲကိုလူစုလူဝေးပါ၊ >
< start="1008.08" dur="3.213"> သူကသူတို့ကိုကျူးကျော်သူတွေအဖြစ်မကျေမနပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ >
< start="1012.19" dur="1.01"> သူဒီမှာဘာပြောနေတာလဲ >
< start="1013.2" dur="2.16"> ကောင်းပြီ၊ ငါအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်။ >
< start="1015.36" dur="2.6"> ဒါပေမယ့်ပြproblemsနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မာကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့စတုတ္ထအချက်ကဒီမှာပါ။ >
< start="1017.96" dur="2.553"> ပြနာတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ >
< start="1021.4" dur="2.69"> ပြနာတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ >
< start="1024.09" dur="3.07"> ဘုရားသခင်သည်အရာရာတွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ >
< start="1027.16" dur="2.72"> ငါတို့ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေတောင်မှ၊ >
< start="1029.88" dur="2.16"> ဘုရားသခင်သည်သူတို့ထံမှကောင်းသောအရာများကိုထုတ်ဆောင်နိုင်သည်။ >
< start="1032.04" dur="1.64"> ဘုရားသခင်သည်ပြproblemနာတိုင်းကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ >
< start="1033.68" dur="2.62"> ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြcauseနာအများစု။ >
< start="1036.3" dur="2.1"> လူတွေကဘာလို့လူတွေဖျားနာရတာလဲလို့လူတွေကပြောကြတယ်။ >
< start="1038.4" dur="3.69"> ကောင်းပြီ၊ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်မိန့်မှာသည့်အတိုင်းမလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ >
< start="1042.09" dur="3.02"> ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့စားမိလျှင်၊ >
< start="1045.11" dur="2.71"> ဘုရားသခင်သည်အိပ်ပျော်လျှင်၊ အိပ်ပျော်လျှင်၊ >
< start="1047.82" dur="3.28"> လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဘုရားသခင်ပြောသလိုပဲ၊ >
< start="1051.1" dur="3.16"> ငါတို့ဘဝကိုအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုခွင့်မပြုလျှင် >
< start="1054.26" dur="2.06"> ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ >
< start="1056.32" dur="2.65"> ငါတို့မှာပြproblemsနာအများစုမရှိဘူး။ >
< start="1058.97" dur="3.07"> လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် >
< start="1062.04" dur="3.57"> ဒီနိုင်ငံမှာ၊ အမေရိကမှာ၊ ခေါ်တဲ့အရာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ >
< start="1065.61" dur="3"> နာတာရှည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှု။ >
< start="1068.61" dur="3.05"> တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုငါတို့မလုပ်ဘူး။ >
< start="1071.66" dur="1.14"> ကျန်းကျန်းမာမာမလုပ်ပါဘူး >
< start="1072.8" dur="2.66"> ကျနော်တို့မကြာခဏ Self- အဖျက်အမှုကိုပြု။ >
< start="1075.46" dur="2.58"> သူပြောနေတာကပြhereနာကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ >
< start="1078.04" dur="3.53"> မင်းပြproblemsနာတက်ရင်သူပြောတယ်၊ >
< start="1081.57" dur="3.46"> သူတို့ထုတ်လုပ်ရန်လာနားလည်သဘောပေါက်။ >
< start="1085.03" dur="3.56"> ထိုစကားစုကိုဝိုင်း။ ထုတ်လုပ်ပါ။ >
< start="1088.59" dur="3.22"> ပြနာများသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။ >
< start="1091.81" dur="2.23"> အခုသူတို့ဟာအလိုအလျောက်အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="1094.04" dur="3.06"> မှန်ကန်သောနေ့၌ကျွန်ုပ်မတုံ့ပြန်ပါကဤ COVID ဗိုင်းရပ်စ်၊ >
< start="1097.1" dur="3.35"> ဒါကငါ့ဘဝမှာကြီးကျယ်တဲ့အရာတစ်ခုမှထွက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="1100.45" dur="2.17"> ဒါပေမဲ့ငါမှန်တယ်၊ >
< start="1102.62" dur="2.25"> ငါ့ဘဝမှာအဆိုးဝါးဆုံးအရာတွေ >
< start="1104.87" dur="3.89"> ကြီးထွားမှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးနှင့်ကောင်းချီးများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ >
< start="1108.76" dur="2.23"> သင်၏ဘဝနှင့်ငါ့အသက်တာ၌။ >
< start="1110.99" dur="2.26"> သူတို့ကထုတ်လုပ်ရန်လာကြ၏။ >
< start="1113.25" dur="4.59"> သူကဒီမှာဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် >
< start="1117.84" dur="5"> ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုနှင့်ဖျားနာမှုပင်လျှင်တစ်ခုခုကိုပြီးမြောက်စေသည် >
< start="1123.42" dur="2.913"> ကျနော်တို့ကပါစေလျှင်တန်ဖိုး။ >
< start="1127.363" dur="3.887"> ငါတို့ရွေးချယ်မှုအားလုံး၊ ငါတို့သဘောထားမှာအားလုံးပဲ။ >
< start="1131.25" dur="4.043"> ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များတွင်အခက်အခဲများကိုအသုံးပြုသည်။ >
< start="1136.9" dur="2.33"> မင်းပြောတာကောင်းပြီ၊ >
< start="1139.23" dur="4.04"> ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်အခက်အခဲများနှင့်ပြproblemsနာများကိုမည်သို့အသုံးပြုသနည်း။ >
< start="1143.27" dur="3.29"> ကောင်းပြီ, တောင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, လာမယ့်ကျမ်းပိုဒ် >
< start="1146.56" dur="1.75"> သို့မဟုတ်အခန်းငယ်၏နောက်အပိုင်းကဆိုသည် >
< start="1148.31" dur="2.61"> ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနည်းလမ်းသုံးမျိုးသုံးတယ်။ >
< start="1150.92" dur="3.09"> ဘုရားသခင်သည်သင်၏ဘဝတွင်ပြproblemsနာသုံးခုကိုနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုသည်။ >
< start="1154.01" dur="4.18"> ဦး ဆုံးပြproblemsနာများကကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးသည်။ >
< start="1158.19" dur="2.03"> သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြွက်သားနှင့်တူ၏။ >
< start="1160.22" dur="3.8"> စစ်ဆေးပြီးမှသာကြွက်သားကိုအားမပေးပါ။ >
< start="1164.02" dur="3.3"> ဒါကြောင့်ဆန့်မထားရင်, ဖိအားအောက်မှာထားရဲ့မဟုတ်လျှင်။ >
< start="1167.32" dur="4.99"> ဘာမှမလုပ်ဘဲအားကြီးသောကြွက်သားများကိုသင်မဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါ။ >
< start="1172.31" dur="3.09"> သငျသညျသူတို့ကိုဆန့်အားဖြင့်အားကြီးသောကြွက်သားဖွံ့ဖြိုး >
< start="1175.4" dur="2.53"> သူတို့ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်စမ်းသပ် >
< start="1177.93" dur="2.7"> နှင့်ကန့်သတ်သူတို့ကိုတွန်းအားပေး။ >
< start="1180.63" dur="5"> ဒါကြောင့်သူကပြသနာတွေကငါ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်ဖို့လာတယ်လို့ပြောနေတယ်။ >
< start="1185.88" dur="4.38"> သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်ရန်လာသည်ဟုသူကပြောခဲ့သည်။ >
< start="1190.26" dur="3.28"> အခုဒီစာလုံးကိုစမ်းသပ်ခြင်းဆိုတာအသုံးအနှုန်းတစ်ခုပါ >
< start="1193.54" dur="5"> သတ္တုသန့်စင်ရာတွင်အသုံးပြုသောကျမ်းစာခေတ်ကဖြစ်သည်။ >
< start="1198.61" dur="3.05"> ပြီးတော့မင်းလုပ်မှာကမင်းဟာအဖိုးတန်သတ္တုတစ်လုံးကိုယူလိမ့်မယ် >
< start="1201.66" dur="1.768"> ရွှေ၊ ငွေအစရှိသောအခြားအရာများကဲ့သို့ပင်၊ >
< start="1203.428" dur="2.932"> ပြီးတော့အိုးကြီးထဲထည့်ပြီးအပူပေးမယ် >
< start="1206.36" dur="2.54"> အဘယ်ကြောင့်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ရန်? >
< start="1208.9" dur="1.17"> မြင့်မားသောအပူချိန်မှာ, >
< start="1210.07" dur="3.34"> အညစ်အကြေးများအားလုံးကိုမီးရှို့ပစ်သည်။ >
< start="1213.41" dur="4.05"> ကျန်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်ရွှေစင်ဖြစ်သည် >
< start="1217.46" dur="1.946"> သို့မဟုတ်စင်ကြယ်သောငွေ။ >
< start="1219.406" dur="3.164"> ဒီမှာစမ်းသပ်မှုအတွက်ဂရိစကားလုံးပါ။ >
< start="1222.57" dur="4.54"> ဘုရားသခင်သည်အပူကိုအပူပေးသောအခါ၎င်းသည်သန့်စင်သောမီးဖြစ်သည် >
< start="1227.11" dur="1.705"> ငါတို့ဘ ၀ မှာခွင့်ပြုတယ်၊ >
< start="1228.815" dur="3.345"> အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ် >
< start="1232.16" dur="2.94"> လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဘာဖြစ်ပျက်မလဲဆိုတာမင်းသိလား။ >
< start="1235.1" dur="2.134"> ငါတို့ရှိသမျှသည်တကယ့်ကိုအရေးကြီးတယ်ထင်သောပစ္စည်း >
< start="1237.234" dur="1.726"> ငါတို့နားလည်မယ်၊ >
< start="1238.96" dur="1.273"> မပါဘဲရုံဒဏ်ငွေ။ >
< start="1241.1" dur="2.51"> ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး စားပေးအစီအစဉ်ကိုပြန်ပြောင်းမယ် >
< start="1243.61" dur="2.41"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာတွေပြောင်းလဲသွားတော့မယ်။ >
< start="1246.02" dur="4.22"> အခုပြproblemsနာတွေကမင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်တယ်ဆိုတာကိုဂန္ထ ၀ င်နမူနာပြ >
< start="1251.17" dur="4.02"> ယောဘအကြောင်းသမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသည်။ >
< start="1255.19" dur="1.75"> ယောဘနှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်တအုပ်လုံးရှိ၏။ >
< start="1256.94" dur="3.49"> ယောဘဟာသမ္မာကျမ်းစာထဲမှာအချမ်းသာဆုံးသူဖြစ်တယ်၊ >
< start="1260.43" dur="2.74"> တစ်ရက်တည်းမှာသူဟာအရာရာဆုံးရှုံးသွားတယ်။ >
< start="1263.17" dur="2.82"> သူသည်သူ့မိသားစုအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးသူ၏စည်းစိမ်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ >
< start="1265.99" dur="3.97"> သူသည်သူ၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအကြမ်းဖက်သမားများကသူ့မိသားစုအားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ >
< start="1269.96" dur="4.567"> သူသည်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်နာတာရှည်ရောဂါခံစားခဲ့ရသည် >
< start="1276.283" dur="3.437"> ဒါကပျောက်ကင်းအောင်ကုသမရနိုင်ပါ။ >
< start="1279.72" dur="1.323"> အိုကေတယ်၊ >
< start="1282.109" dur="3.721"> သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစုံစမ်းတော်မူ၏။ >
< start="1285.83" dur="3.27"> ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနှစ်ဆပြန်ပေးတယ် >
< start="1289.1" dur="3.423"> သူစမ်းသပ်မှုကြီးကိုမဖြတ်သန်းခင်သူ၌ရှိခဲ့သည့်အရာ >
< start="1293.59" dur="2.82"> တစ်ချိန်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့သောတစ်နေရာရာမှကိုးကားချက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည် >
< start="1296.41" dur="2.92"> လူတွေဟာလက်ဖက်ရည်အိတ်တွေလိုပါပဲ >
< start="1299.33" dur="1.34"> သငျသညျ '' em ၌အဘယ်သို့ဆိုင်အမှန်တကယ်မသိရပါဘူး >
< start="1300.67" dur="2.67"> သငျသညျ '' ရေပူထဲမှာ '' သူတို့ကို drop သည်အထိ။ >
< start="1303.34" dur="3.09"> ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုတကယ်မြင်နိုင်တယ်။ >
< start="1306.43" dur="2.77"> ထိုရေပူရေနေ့များရှိခဲ့ဖူးသလား။ >
< start="1309.2" dur="3.763"> သငျသညျအစဉျအမွဲသောဤရေပူရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်လများထဲမှရှိခဲ့? >
< start="1313.82" dur="3.78"> ကျွန်တော်တို့အခုရေပူအခြေအနေရောက်နေပြီ။ >
< start="1317.6" dur="2.41"> တဖန်သင်တို့ထွက်သွားရမည့်အရာသည်သင်၏အတွင်း၌ရှိသောအရာများဖြစ်သည်။ >
< start="1320.01" dur="1.33"> အဲဒါဟာသွားတိုက်ဆေးနဲ့တူတယ် >
< start="1321.34" dur="4.15"> ငါ့မှာသွားတိုက်ဆေးပိုက်တစ်ချောင်းရှိတယ်၊ >
< start="1325.49" dur="1.18"> ဘာထွက်လာမလဲ >
< start="1326.67" dur="0.9"> သွားတိုက်ဆေးကောင်းကောင်းသင်ပြောနိုင် >
< start="1327.57" dur="1.65"> မလိုအပ်ပါ။ >
< start="1329.22" dur="1.95"> အပြင်ဘက်မှာသွားတိုက်ဆေးလို့ပြောလို့ရပါတယ် >
< start="1331.17" dur="1.67"> ဒါပေမယ့် marinara ငံပြာရည်ရှိနိုင်ဘူး >
< start="1332.84" dur="2.6"> သို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းမြေပဲထောပတ်သို့မဟုတ် mayonnaise ။ >
< start="1335.44" dur="2.92"> ဖိအားပေးမှုခံရသောအခါဘာဖြစ်လာမည်နည်း >
< start="1338.36" dur="1.403"> ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် >
< start="1341.13" dur="3.603"> ပြီးတော့ COVID ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာ၊ >
< start="1346.266" dur="2.224"> မင်းထဲကထွက်လာမယ့်အရာကမင်းအတွင်းပိုင်းကဘာလဲ >
< start="1348.49" dur="2.24"> တဖန်သင်တို့ခါးသောစိတ်နှင့်ပြည့်စေလျှင်၊ >
< start="1350.73" dur="2.23"> တဖန်သင်တို့စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံလျှင်, ထိုအထွက်လာလိမ့်မယ်။ >
< start="1352.96" dur="3.79"> ပြီးတော့မင်းကဒေါသ၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ >
< start="1356.75" dur="3.46"> သို့မဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်မလုံခြုံခြင်းထွက်ပေါ်လာတော့မည်။ >
< start="1360.21" dur="4"> သင်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေပါကသင်အတွင်း၌ရှိသောအရာအားလုံးဖြစ်သည် >
< start="1364.21" dur="3.52"> ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်သင်ထွက်လာမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ >
< start="1367.73" dur="1.44"> သူပြောတာကဒီမှာ >
< start="1369.17" dur="2.23"> ပြproblemsနာကငါ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတယ်။ >
< start="1371.4" dur="5"> မင်းသိတဲ့အတိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကငါကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တကယ်ပဲတွေ့ခဲ့တယ် >
< start="1376.98" dur="3.23"> လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအရှေ့၌ကွန်ဖရ၌တည်၏။ >
< start="1380.21" dur="1.74"> Tennessee လို့ထင်ပါတယ် >
< start="1381.95" dur="3.91"> ပြီးတော့သူကဒီလူဟောင်းကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲဆိုတာပြောပြတယ် >
< start="1387.13" dur="4.8"> သူ၏အသက်တာ၌အကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="1391.93" dur="2.017"> ထိုအခါငါ "အိုကေ, ဒီပုံပြင်ကိုကြားချင်တယ်။ >
< start="1393.947" dur="1.523"> "ငါ့ကိုအကြောင်းကိုအားလုံးပြောပြပါ။ " >
< start="1395.47" dur="1.67"> ပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပဲ >
< start="1397.14" dur="2.823"> တစ် ဦး သစ်စက်မှာသူ့ဘဝအားလုံး။ >
< start="1400.83" dur="2.41"> သူသည်တစ်သက်လုံးသစ်စက်သမားတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="1403.24" dur="3.34"> ဒါပေမယ့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမှာတစ်နေ့၊ >
< start="1406.58" dur="3.607"> သူ့ရဲ့သူဌေးကဝင်လာပြီးရုတ်တရက်“ မင်းကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီ” >
< start="1411.19" dur="3.54"> ထိုအခါသူ၏ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးတံခါးကိုထွက်သွားလေ၏။ >
< start="1414.73" dur="4.62"> ထို့အပြင်သူသည်အသက် ၄၀ အရွယ်တွင်မိန်းမနှင့်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည် >
< start="1419.35" dur="3.85"> သူ့မိသားစုနှင့်သူနှင့်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အခြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။ >
< start="1423.2" dur="2.923"> နှင့်ထိုအချိန်ကသွားစီးပွားရေးကျဆင်းမှုရှိခဲ့သည်။ >
< start="1427.03" dur="3.5"> သူသည်အလွန်စိတ်ပျက်။ အလွန်ကြောက်ရွံ့လေ၏။ >
< start="1430.53" dur="1.77"> သငျသညျအခြို့ကအခုအချိန်မှာအဲဒီလိုခံစားရလိမ့်မယ်။ >
< start="1432.3" dur="1.58"> သငျသညျပြီးသားချွတ်ခဲ့ကြပေမည်။ >
< start="1433.88" dur="1.76"> သင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ် >
< start="1435.64" dur="2.63"> ဒီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းချွတ်တင်ကြ၏။ >
< start="1438.27" dur="2.45"> ပြီးတော့သူကတော်တော်လေးစိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ တော်တော်ကြောက်တယ်။ >
< start="1440.72" dur="1.827"> သူဒီလိုပြောတယ် -“ ငါရေးခဲ့တယ်၊ ငါခံစားခဲ့ရတယ်၊ >
< start="1442.547" dur="3.97"> "ငါပစ်ခတ်သောနေ့၌ငါ့ကမ္ဘာကြီးပြိုပျက်ခဲ့သည်။ >
< start="1446.517" dur="2.2"> ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော့်ဇနီးကိုပြောခဲ့တယ် >
< start="1448.717" dur="3.57"> သူမက 'ဒါဆိုမင်းဘာလုပ်မလဲ' >
< start="1452.287" dur="2.98"> ငါပြောပြီ၊ >
< start="1455.267" dur="3.9"> "ငါအမြဲတမ်းလုပ်ချင်သောအရာကိုလုပ်တော့မယ်။ >
< start="1459.167" dur="1.84"> "တစ် ဦး ဆောက်ဖြစ်လာပါ။ >
< start="1461.007" dur="1.61"> "ကျွန်မတို့အိမ်ကိုပေါင်နှံသွားမှာပါ >
< start="1462.617" dur="2.413"> "ပြီးတော့ငါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသို့သွားမယ်။ " >
< start="1465.03" dur="2.887"> ပြီးတော့သူကကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်၊ Rick, ငါသိတယ်၊ >
< start="1467.917" dur="4.13"> "နှစ်ခုသေးငယ်တဲ့မိုတယ်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ " >
< start="1472.965" dur="2.115"> သူလုပ်ခဲ့တာပဲ။ >
< start="1475.08" dur="4.267"> ဒါပေမယ့်သူက "ငါးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာသန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ပါ" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ >
< start="1480.21" dur="2.99"> ထိုသူ၏အမည်၊ ငါပြောသောသူကား၊ >
< start="1483.2" dur="3.5"> Wallace Johnson နှင့်သူစတင်ခဲ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည် >
< start="1486.7" dur="4.39"> အလုပ်ဖြုတ်ခံရပြီးနောက်အားလပ်ရက်အင်းဟုခေါ်ခဲ့သည်။ >
< start="1491.09" dur="1.44"> အားလပ်ရက်အင်း။ >
< start="1492.53" dur="2.877"> Wallace က "ငါဒီကိုရှာတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ Rick" လို့ပြောခဲ့တယ် >
< start="1495.407" dur="3.13"> "ငါ့ကိုပစ်ခတ်သောသူသည်ငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့လိမ့်မယ် >
< start="1498.537" dur="2.143"> "သူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအတွက်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ " >
< start="1500.68" dur="2.56"> အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူး >
< start="1503.24" dur="2.83"> ငါဘာကြောင့်အလုပ်ထုတ်ပစ်တာလဲ၊ >
< start="1506.07" dur="3.94"> ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင့်အမှားကင်းမဲ့တာကိုငါတွေ့နိုင်ခဲ့တယ် >
< start="1510.01" dur="4.483"> ငါ့ကိုသူရွေးချယ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသို့ရောက်ရန်အံ့သြဖွယ်အစီအစဉ်။ >
< start="1515.76" dur="3.05"> ပြနာတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ >
< start="1518.81" dur="1.17"> သူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ >
< start="1519.98" dur="4.18"> သူတို့ထုတ်လုပ်ရန်လာ, ပထမ ဦး ဆုံးအရာတစျခုသဘောပေါက် >
< start="1524.16" dur="3.984"> သူတို့သည်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြကြ၏။ >
< start="1528.144" dur="3.226"> နံပါတ်နှစ်ဒီမှာပြproblemsနာရဲ့ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ >
< start="1531.37" dur="3.27"> ပြနာတွေကကျွန်တော့်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်စေတယ်။ >
< start="1534.64" dur="1.52"> သူတို့သည်ငါ၏ခံနိုင်ရည်ကိုမွေးမြူကြသည်။ >
< start="1536.16" dur="2.23"> ၎င်းသည်နောက်ဆက်တွဲစကားစု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် >
< start="1538.39" dur="5"> ဤပြproblemsနာများသည်ခံနိုင်ရည်ရှိလာစေရန်လာသည်။ >
< start="1543.45" dur="2.33"> သူတို့သည်သင်၏ဘဝတွင်ခံနိုင်ရည်ကိုမွေးမြူကြသည်။ >
< start="1545.78" dur="1.91"> သင်၏ဘဝပြproblemsနာများ၏ရလဒ်ကားအဘယ်နည်း။ >
< start="1547.69" dur="1.52"> ပါဝါတည်းခို။ >
< start="1549.21" dur="2.82"> စာသားကဖိအားကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းပါ။ >
< start="1552.03" dur="2.253"> ဒီကိစ္စကိုခံနိုင်ရည်လို့ခေါ်ကြတယ်။ >
< start="1555.12" dur="1.79"> ပြန် bounce နိုင်စွမ်း။ >
< start="1556.91" dur="3.197"> ပြီးတော့ကလေးတိုင်းသင်ယူဖို့လိုအပ်တဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးအရည်အသွေးတစ်ခုကတော့ >
< start="1560.107" dur="3.473"> အရွယ်ရောက်သူတိုင်းသင်ယူရန်လိုအပ်သည်မှာခံနိုင်ရည်ဖြစ်သည်။ >
< start="1563.58" dur="2.92"> ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းလဲကျတယ်၊ >
< start="1566.5" dur="2.05"> လူတိုင်းကခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာဖြတ်သန်းနေကြတယ်၊ >
< start="1568.55" dur="3.31"> လူတိုင်းမတူညီသောအချိန်များတွင်ဖျားနာခြင်း >
< start="1571.86" dur="2.39"> လူတိုင်းတွင်သူတို့၏ဘ ၀ တွင်ရှုံးနိမ့်မှုများရှိသည်။ >
< start="1574.25" dur="2.7"> ဖိအားကိုသင်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သလဲ။ >
< start="1576.95" dur="3.613"> ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဆက်၍ စွဲလမ်းနေခြင်း၊ >
< start="1581.52" dur="1.99"> ကောင်းပြီ, သင်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့သင်ယူသလဲ? >
< start="1583.51" dur="3.53"> ဖိအားကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ။ >
< start="1587.04" dur="2.28"> အတွေ့အကြုံမှတဆင့်, ထိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပါပဲ။ >
< start="1589.32" dur="4.93"> သင်ကဖတ်စာအုပ်ထဲကဖိအားကိုကိုင်တွယ်တတ်ဖို့မသင်ယူဘူး။ >
< start="1594.25" dur="4.02"> နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ခုမှာဖိအားကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာသင်မလေ့လာဘူး။ >
< start="1598.27" dur="3.76"> ဖိအားအောက်မှာခံခြင်းအားဖြင့်ဖိအားကိုကိုင်တွယ်တတ်ဖို့သင်သင်ယူတယ်။ >
< start="1602.03" dur="2.53"> တဖန်သင်တို့အထဲ၌အဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး >
< start="1604.56" dur="3.063"> သင်အမှန်တကယ်ကြောင်းအခြေအနေ၌သွင်းထားခဲ့မှီတိုင်အောင်။ >
< start="1609.77" dur="2.7"> Saddleback ဘုရားကျောင်းဒုတိယနှစ်တွင်, 1981 ခုနှစ်, >
< start="1612.47" dur="1.36"> ငါစိတ်ကျရောဂါကာလရှောက်သွားလေ၏ >
< start="1613.83" dur="2.823"> အပတ်တိုင်းတိုင်းနှုတ်ထွက်ချင်တယ်။ >
< start="1617.64" dur="3.88"> ထိုအခါငါတနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းတိုင်းဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တယ်။ >
< start="1621.52" dur="3.14"> ဒါပေမဲ့ကျွန်မဘဝရဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ >
< start="1624.66" dur="2.3"> သို့သော်လည်းငါသည်တ ဦး တည်းခြေရင်း၌တ ဦး တည်းခြေလျင်ထားလိမ့်မယ် >
< start="1626.96" dur="3.19"> ဘုရားကဲ့သို့ဘုရားကျောင်းမဆောက်ပါစေနှင့်။ >
< start="1630.15" dur="1.973"> ယခုမူကား၊ အိုဘုရားသခင်၊ >
< start="1633.01" dur="2.1"> ထိုအခါငါပဲအရှုံးမပေးဘူး။ >
< start="1635.11" dur="2.22"> ငါအရှုံးမပေးခဲ့လို့အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ >
< start="1637.33" dur="3.09"> ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်ကိုအရှုံးမပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပိုပြီးဝမ်းသာတယ်။ >
< start="1640.42" dur="1.46"> သောစမ်းသပ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ >
< start="1641.88" dur="5"> အဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုနှစ်အတွင်းမှာဝိညာဉ်ရေးကိုကျွန်တော်အတော်အတန်တိုးတက်စေခဲ့တယ် >
< start="1647.51" dur="3.56"> နှင့် relational နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကို >
< start="1651.07" dur="4.28"> အဲ့ဒါကနှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာဘောလုံးတွေအများကြီးကိုညှိနိုင်ခဲ့တယ် >
< start="1655.35" dur="4.64"> နှင့်အများပြည်သူမျက်စိထဲမှာကြီးမားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုပမာဏကိုကိုင်တွယ် >
< start="1659.99" dur="2.01"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီနှစ်မှာကျွန်တော်သွားခဲ့တယ် >
< start="1662" dur="3.363"> အခက်အခဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခု။ >
< start="1666.51" dur="5"> သင်သိ, အမေရိကအဆင်ပြေမှုနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စရှိခဲ့ပါတယ်။ >
< start="1672.57" dur="2.113"> ကျနော်တို့အဆင်ပြေကိုချစ်။ >
< start="1675.593" dur="3.187"> ဒီအကျပ်အတည်းကာလရဲ့နောက်ရက်များနှင့်သီတင်းပတ်များတွင် \_ t >
< start="1678.78" dur="2.58"> အဆင်မပြေသောအရာတွေအများကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ >
< start="1681.36" dur="1.13"> အဆင်မပြေ။ >
< start="1682.49" dur="2.95"> ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း >
< start="1685.44" dur="2.503"> အားလုံးအဆင်မပြေတဲ့အခါ, >
< start="1688.96" dur="2.52"> သင်ရုံအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအပေါ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ >
< start="1691.48" dur="2.1"> ဆက်လုပ်ဆောင်ရန်မလွယ်သောအခါ >
< start="1693.58" dur="5"> သင်သိသည်၊ အပြေးပြိုင်ပွဲ၏ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်မာရသွန်၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည် >
< start="1698.71" dur="3.1"> တကယ်တော့အမြန်နှုန်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ >
< start="1701.81" dur="1.86"> ခံနိုင်ရည်အကြောင်းပါ။ >
< start="1703.67" dur="2.34"> သင်ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးပြီလား >
< start="1706.01" dur="2.43"> ထိုအရာမျိုးအတွက်သင်မည်သို့ပြင်ဆင်မည်နည်း။ >
< start="1708.44" dur="2.13"> သူတို့ကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်းဖြင့်သာ။ >
< start="1710.57" dur="3.487"> ထို့ကြောင့်သင်သည်နောင်လာမည့်နေ့ရက်များကိုဆန့်ကျင်သောအခါ၊ >
< start="1714.057" dur="2.213"> အဲဒါကိုစိတ်မပူပါနဲ့အဲဒါကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ >
< start="1716.27" dur="3.02"> ပြနာတွေကကျွန်တော့်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်စေတယ်။ >
< start="1719.29" dur="3.21"> ပြနာတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်၊ >
< start="1722.5" dur="2.6"> ဂျိမ်းစ်ကပြproblemsနာများအကြောင်းပြောသောတတိယအချက် >
< start="1725.1" dur="3.68"> ပြthroughနာတွေကကျွန်တော့်ရဲ့စရိုက်ကိုရင့်ကျက်လာတာပါ။ >
< start="1728.78" dur="3.68"> သူကဤအခန်းငယ်ကိုယာကုပ်အခန်းကြီး ၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ >
< start="1732.46" dur="4.18"> သူကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်ပါစေ >
< start="1736.64" dur="4.49"> သငျသညျရင့်ကျက်ဇာတ်ကောင်လူဖြစ်လာသည်အထိ >
< start="1741.13" dur="3.663"> အဘယ်သူမျှမအားနည်းတဲ့အစက်အပြောက်နှင့်အတူသမာဓိရှိ။ >
< start="1746.3" dur="1.32"> မင်းအဲဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူးလား >
< start="1747.62" dur="2.42"> လူတွေပြောတာကြားချင်လား၊ >
< start="1750.04" dur="3.32"> ထိုမိန်းမသည်သူမ၏အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်မှုမရှိပါ။ >
< start="1753.36" dur="4.53"> ထိုလူ၊ ထိုကောင်လေး၌သူ၏အကျင့်စရိုက်၌အားနည်းသောအစက်မရှိ။ >
< start="1757.89" dur="3.04"> သင်ဘယ်လိုရင့်ကျက်ဇာတ်ကောင်မျိုးကိုရသနည်း >
< start="1760.93" dur="4.58"> သငျသညျကလူဖြစ်လာသည်အထိလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်ပါစေ, >
< start="1765.51" dur="3.38"> ရင့်ကျက်သောဇာတ်ကောင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ >
< start="1768.89" dur="3.33"> အဘယ်သူမျှမအားနည်းတဲ့အစက်အပြောက်နှင့်အတူသမာဓိရှိ။ >
< start="1772.22" dur="2.6"> လူသိများတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ >
< start="1774.82" dur="4"> လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကရုရှားမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တာမှတ်မိနေတယ်၊ >
< start="1778.82" dur="4.08"> ထိုသို့ကွဲပြားခြားနားသောလူနေမှုအခြေအနေများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="1782.9" dur="5"> ကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်များ၏သက်တမ်းသို့မဟုတ်သက်တမ်းထိခိုက်ခဲ့သည်။ >
< start="1789.11" dur="3.6"> ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်တွေကိုလွယ်ကူစွာနေထိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်၊ >
< start="1792.71" dur="2.91"> ပြီးတော့တခြားတိရိစ္ဆာန်တွေကိုပိုခက်ခဲအောင်လုပ်တယ် >
< start="1795.62" dur="1.89"> နှင့်ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်။ >
< start="1797.51" dur="2.87"> နှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များတိရိစ္ဆာန်များကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် >
< start="1800.38" dur="2.22"> သောအဆင်ပြေထဲမှာထားရှိခဲ့ကြသည် >
< start="1802.6" dur="2.88"> နှင့်လွယ်ကူသောပတ်ဝန်းကျင်, အခြေအနေများ, >
< start="1805.48" dur="4.73"> သူတို့အားလူနေမှုအခြေအနေများ, တကယ်အားနည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ >
< start="1810.21" dur="4.41"> အခြေအနေကအရမ်းလွယ်လို့သူတို့ကအားနည်းလာတယ် >
< start="1814.62" dur="2.22"> နှင့်အနာရောဂါပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်။ >
< start="1816.84" dur="5"> ပြီးတော့သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာစောစောစီးစီးသေသွားကြတယ် >
< start="1821.9" dur="2.418"> တွေ့ကြုံခံစားခွင့်ပြုခဲ့သောသူတို့ထက် >
< start="1824.318" dur="3.105"> ဘဝ၏ပုံမှန်အခက်အခဲများ။ >
< start="1828.72" dur="1.163"> ဒါစိတ်ဝင်စားစရာမဟုတ်လား။ >
< start="1830.81" dur="2.2"> တိရိစ္ဆာန်တွေအကြောင်းသေချာပေါက်ငါသေချာတယ် >
< start="1833.01" dur="1.94"> ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်လည်း။ >
< start="1834.95" dur="4.92"> အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအထူးသဖြင့်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာ၊ >
< start="1839.87" dur="3.38"> ကျနော်တို့ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းများစွာအတွက်လွယ်ကူသောခဲ့ပြီးပြီ။ >
< start="1843.25" dur="1.973"> အဆင်ပြေဘဝတွေကိုအသကျရှငျ။ >
< start="1846.94" dur="1.71"> သင်၏အသက်တာ၌ဘုရားသခင်၏နံပါတ်တစ်ရည်မှန်းချက် >
< start="1848.65" dur="2.67"> မင်းကိုယေရှုခရစ်လိုသရုပ်ဆောင်ရမယ်။ >
< start="1851.32" dur="1.87"> ခရစ်တော်ကဲ့သို့စဉ်းစားရန်၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ပြုမူရန်၊ >
< start="1853.19" dur="3.94"> ခရစ်တော်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ရန်၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ချစ်ခြင်း၊ >
< start="1857.13" dur="2.2"> ခရစ်တော်ကဲ့သို့အပြုသဘောဆောင်ရန်။ >
< start="1859.33" dur="3.62"> အကယ်၍ ၎င်းသည်မှန်လျှင်၎င်း၊ သမ္မာကျမ်းစာက၎င်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောပါသည်။ >
< start="1862.95" dur="2.13"> သို့ဖြစ်လျှင်ဘုရားသည်သင့်အားထပ်တူအရာများကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည် >
< start="1865.08" dur="4.304"> သင်၏အကျင့်စရိုက်ကိုတိုးပွားစေရန်ယေရှုဖြတ်သန်းသွားသည်။ >
< start="1869.384" dur="2.786"> ဟုတ်တယ်၊ ယေရှုကဘယ်လိုလဲ >
< start="1872.17" dur="3.8"> ယေရှုသည်ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ >
< start="1875.97" dur="2.34"> ၀ ိညာဉ်တော်၏အသီး၊ >
< start="1878.31" dur="1.4"> ဒါတွေကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုထုတ်လုပ်သလဲ။ >
< start="1879.71" dur="2.9"> ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုချထားခြင်းအားဖြင့်။ >
< start="1882.61" dur="3.76"> စိတ်မရှည်ဖို့သွေးဆောင်ခံရတဲ့အခါသည်းခံတတ်လာတယ်။ >
< start="1886.37" dur="3.37"> ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသင်ယူခြင်းသည်လူတို့အားချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စေသည်။ >
< start="1889.74" dur="2.49"> ကျနော်တို့ဝမ်းနည်းခြင်းအလယ်၌ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သင်ယူကြသည်။ >
< start="1892.23" dur="4.67"> ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသည်းခံခြင်းမျိုးကိုသင်ယူရှိသည် >
< start="1896.9" dur="1.56"> ဘယ်အချိန်စောင့်ရမှာလဲ >
< start="1898.46" dur="3.423"> တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖို့သွေးဆောင်ခံရတဲ့အခါကြင်နာမှုပြတယ်။ >
< start="1902.77" dur="3.66"> ရှေ့လာမယ့်နေ့တွေမှာတော့အရမ်းသွေးဆောင်ဖို့ကောင်းတယ် >
< start="1906.43" dur="2.83"> ဘန်ကာထဲကို ၀ င်လိုက်တာနဲ့ပြန်ဝင်ပါ။ >
< start="1909.26" dur="2.54"> ပြီးတော့ငါကငါတို့ကိုဂရုစိုက်မယ်၊ >
< start="1911.8" dur="4.22"> ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ငါ၊ ငါ့မိသားစု၊ ငါတို့လေးယောက်ပဲရှိတော့တယ် >
< start="1916.02" dur="2.14"> နှင့်အခြားလူတိုင်းအကြောင်းကိုမေ့လျော့။ >
< start="1918.16" dur="2.62"> သို့သော်ယင်းကသင်၏စိတ်ကိုကျုံ့စေလိမ့်မည်။ >
< start="1920.78" dur="2.51"> သင်သည်အခြားလူများအကြောင်းစတင်စဉ်းစားပါက >
< start="1923.29" dur="3.254"> ထိခိုက်လွယ်သူများကိုကူညီခြင်း >
< start="1926.544" dur="4.026"> နှင့်ရှိပြီးသားအခြေအနေများနှင့်အတူ, >
< start="1930.57" dur="3.47"> သင်တက်လျှင်သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ကြီးပွားလိမ့်မည်။ >
< start="1934.04" dur="3.34"> မင်းရဲ့နှလုံးသားကြီးလာလိမ့်မယ်၊ မင်းကပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ် >
< start="1937.38" dur="5"> ဒီအကျပ်အတည်းရဲ့အဆုံးမှာမင်းစလုပ်နေတာထက်ကော၊ >
< start="1943.52" dur="2.98"> ဘုရားသခင်ကြည့်ရှုတော်မူပါ၊ >
< start="1946.5" dur="1.37"> သူကအရာနှစ်ခုသုံးနိုင်သည်။ >
< start="1947.87" dur="2.92"> သူသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသုံးနိုင်သည်၊ အမှန်တရားကငါတို့ကိုပြောင်းလဲစေသည်၊ >
< start="1950.79" dur="3.56"> ပြီးတော့သူကပိုပြီးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးနိုင်တယ်။ >
< start="1954.35" dur="4"> ယခုတွင်ဘုရားသခင်သည်ပထမဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ >
< start="1958.35" dur="1.63"> သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲနားမထောင်၊ >
< start="1959.98" dur="3.77"> ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုရဖို့အခြေအနေတွေကိုသုံးတယ်။ >
< start="1963.75" dur="4.6"> ပိုပြီးခက်ခဲတယ်၊ ဒါပေမဲ့ပိုပြီးထိရောက်တယ်။ >
< start="1968.35" dur="3.23"> အခုတော့ကောင်းပြီ၊ ကောင်းပြီ၊ Rick၊ ငါရပြီ။ >
< start="1971.58" dur="4.22"> ပြtheနာတွေကပြောင်းလဲနိုင်တယ်၊ >
< start="1975.8" dur="3.18"> သူတို့သည်ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစုံစမ်းခြင်းငှါ၎င်း၊ >
< start="1978.98" dur="2.47"> ငါလိုချင်ရင်သူတို့မလာကြဘူး။ >
< start="1981.45" dur="4.393"> ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်၏စရိုက်ကိုကြီးထွားစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုရင့်ကျက်ရန် 'သူတို့ကို' သုံးနိုင်သည်။ >
< start="1986.95" dur="1.72"> ဒါဆိုငါဘာလုပ်ရမလဲ။ >
< start="1988.67" dur="4.94"> လာမည့်ရက်အနည်းငယ်နှင့်ရက်သတ္တပတ်များနှင့်နောက်လများ၌ဖြစ်သည် >
< start="1993.61" dur="3.75"> ငါတို့ဒီ coronavirus အကျပ်အတည်းကိုအတူတူရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ >
< start="1997.36" dur="4.09"> ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ပြproblemsနာများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တုံ့ပြန်သင့်သနည်း။ >
< start="2001.45" dur="1.98"> ထိုအခါငါကပဲဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="2003.43" dur="2.747"> ငါရလဒ်အဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုပြproblemsနာများအကြောင်းပြောနေတာပါ >
< start="2006.177" dur="5"> အလုပ်မှာကလေးတွေဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာဖြစ်ခြင်း၏ >
< start="2011.26" dur="3.12"> သို့မဟုတ်ဘဝကိုစိတ်ပျက်စရာနေသောအရာခပ်သိမ်း >
< start="2014.38" dur="1.553"> ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သကဲ့သို့။ >
< start="2017.04" dur="2.24"> ငါ့ဘဝရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုငါဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်သလဲ။ >
< start="2019.28" dur="2.9"> ကောင်းပြီ, နောက်တဖန်ဂျိမ်းစ်အလွန်တိကျတဲ့ဖြစ်ပါသည်, >
< start="2022.18" dur="3.39"> ပြီးတော့သူကသုံးယောက်ကိုလက်တွေ့ကျတယ်။ >
< start="2025.57" dur="4.45"> ၎င်းတို့သည်အစွန်းရောက်သောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။ >
< start="2030.02" dur="1.32"> တကယ်တော့ငါမင်းကိုအရင်ပြောတဲ့အချိန်မှာ \_ t >
< start="2031.34" dur="2.21"> သငျသညျအကြှနျုပျကိုနောက်နေရမယ်, သွားရတော့မယ်။ >
< start="2033.55" dur="3.07"> ဒါပေမယ့်တုန့်ပြန်ချက်သုံးခုရှိပါတယ်။ >
< start="2036.62" dur="2.76"> သူပြောလိုက်သည့်ပထမဆုံးတုံ့ပြန်မှုမှာသင်ဖြစ်စဉ်ပင်ဖြစ်သည် >
< start="2039.38" dur="4.46"> ခက်ခဲသောအချိန်များကိုဖြတ်သန်း။ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းပါ။ >
< start="2043.84" dur="2.41"> မင်းသွားတာနောက်နေတာလား >
< start="2046.25" dur="1.73"> ဒါက masochistic အသံ။ >
< start="2047.98" dur="2.29"> ငါပြtheနာအတွက်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="2050.27" dur="1.69"> ဒီတစ်မိနစ်လောက်မှာပဲကျွန်တော့်ကိုလိုက်နာပါ။ >
< start="2051.96" dur="3.54"> သူကဒါဟာစင်ကြယ်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းစဉ်းစားကပြောပါတယ်။ >
< start="2055.5" dur="2.69"> ဤပြproblemsနာများကိုသူငယ်ချင်းများအဖြစ်ဆက်ဆံပါ။ >
< start="2058.19" dur="1.78"> အခုငါ့ကိုနားလည်မှုလွဲမနေပါနဲ့ >
< start="2059.97" dur="3.14"> သူကအတုကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး >
< start="2063.11" dur="3.57"> သူကပလတ်စတစ်အပြုံးဝတ်လိုက်တယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး >
< start="2066.68" dur="2.33"> အရာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်၊ ​​မဟုတ်ဘူး၊ >
< start="2069.01" dur="1.36"> ဒါကမဟုတ်ဘူး။ >
< start="2070.37" dur="3.12"> Pollyanna, Little ကမိဘမဲ့ Annie, နေရောင် >
< start="2073.49" dur="3.512"> မနက်ဖြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်၊ မနက်ဖြန်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="2077.002" dur="3.568"> သူကလုံးဝမဟုတ်ပါ၊ >
< start="2080.57" dur="2.76"> သူက masochist လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="2083.33" dur="2.87"> အိုးကောင်လေးငါနာကျင်မှုကိုဖြတ်သန်းရတယ် >
< start="2086.2" dur="1.72"> ဘုရားသခင်သည်သင်ပြုသကဲ့သို့နာကျင်မှုကိုမုန်းသည်။ >
< start="2087.92" dur="2.1"> အိုးငါဒုက္ခဆင်းရဲရတယ်။ >
< start="2090.02" dur="3.49"> ပြီးတော့မင်းမှာဒီအာဇာနည်တွေရှိတယ်၊ မင်းသိတယ်၊ >
< start="2093.51" dur="1.937"> ငါမကောင်းဘူးခံစားရတဲ့အခါငါဒီဝိညာဉ်ရေးခံစားချက်သာရှိသည်။ >
< start="2095.447" dur="2.983"> ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုအာဇာနည်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="2098.43" dur="1.54"> ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုမလိုချင်ဘူး >
< start="2099.97" dur="3.453"> နာကျင်မှုဆီသို့တစ် masochistic သဘောထားကို။ >
< start="2104.74" dur="2.5"> ငါသိတုန်းငါဖြတ်သန်းသွားတခါသတိရ >
< start="2107.24" dur="3.21"> တကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကြင်နာတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ >
< start="2110.45" dur="2.307"> သူတို့က၊ Rick၊ သိပါရစေ >
< start="2112.757" dur="1.86"> "အမှုအရာပိုဆိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ >
< start="2115.61" dur="2.14"> ပြီးတော့သူတို့ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းကြပါ။ >
< start="2117.75" dur="2.23"> ဒါကမှာအားလုံးမအကူအညီဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="2119.98" dur="2.225"> ငါအားပေးတယ်သူတို့ပိုဆိုးလာတယ်။ >
< start="2123.31" dur="4.588"> ဒါကြောင့် Pollyanna ရဲ့အပြုသဘောဆောင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတုမဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="2127.898" dur="3.352"> ငါစိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုရင်ငါစိတ်အားထက်သန်လိမ့်မယ်။ >
< start="2131.25" dur="2.88"> မဟုတ်ပါ၊ မရှိ၊ မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်၎င်းထက်များစွာနက်ရှိုင်းပါသည်။ >
< start="2134.13" dur="5"> ငါတို့မဝမ်းမြောက်ဘူး၊ နားမထောင်ဘူး၊ ပြtheနာအတွက်ငါတို့မပျော်ဘူး။ >
< start="2140.17" dur="5"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြtheနာ၌ ၀ မ်းသာသည်၊ >
< start="2145.71" dur="2.13"> ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းများစွာရှိသေးသည်။ >
< start="2147.84" dur="2.92"> ပြtheနာကိုယ်နှိုက်မဟုတ်ဘဲအခြားအရာများဖြစ်သည် >
< start="2150.76" dur="2.514"> ကျနော်တို့ပြproblemsနာများအတွက်ဝမ်းမြောက်နိုင်ပါတယ်။ >
< start="2153.274" dur="2.836"> ပြtheနာ၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်နိုင်သနည်း။ >
< start="2156.11" dur="2.54"> “ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာငါတို့သိလို့ပဲ။ >
< start="2158.65" dur="1.74"> ငါတို့ကိုဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါတို့သိတယ်။ >
< start="2160.39" dur="2.97"> ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကမတူကွဲပြားတဲ့အရာတွေကိုအများကြီးသိလို့ပါ။ >
< start="2163.36" dur="1.81"> ဘုရားသခင်၌ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ >
< start="2165.17" dur="4.58"> သူက၎င်းကိုသန့်ရှင်းသော ၀ မ်းမြောက်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဟုသတိပြုပါ။ >
< start="2169.75" dur="1.98"> ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောစကားလုံးဝိုင်းပါ။ >
< start="2171.73" dur="4.8"> သင်၏စိတ်ကိုတမင်တကာဖြစ်စေရန်နည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားပါ။ >
< start="2176.53" dur="2.22"> သင်တစ် ဦး သဘောထားညှိနှိုင်းမှုတယ် >
< start="2178.75" dur="1.71"> သင်ဒီမှာလုပ်ရန်ရှိသည်။ >
< start="2180.46" dur="3.869"> ရွှင်လန်းရန်သင်ရွေးချယ်မှုလား။ >
< start="2184.329" dur="3.201"> ဆာလံ ၃၄ တွင်အခန်းငယ် (၁) တွင်သူပြောခဲ့သည် >
< start="2187.53" dur="3.69"> ငါသည်ခပ်သိမ်းသောကာလတို့၌ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးမည်။ >
< start="2191.22" dur="1.39"> အချိန်တိုင်း။ >
< start="2192.61" dur="0.92"> ပြီးတော့သူကငါလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ >
< start="2193.53" dur="2.48"> အဲဒါဟာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။ >
< start="2196.01" dur="1.66"> ကတိက ၀ တ်တစ်ခုပါ။ >
< start="2197.67" dur="4.08"> ယခုသင်သည်ဤလများအနက်ရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည် >
< start="2201.75" dur="2.4"> အကောင်းတစ် ဦး သဘောထားသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့သဘောထားတစ်ခုခုကိုအတူ။ >
< start="2204.15" dur="2.7"> မင်းရဲ့သဘောထားမကောင်းဘူးဆိုရင်မင်းကမင်းကိုလုပ်တော့မယ် >
< start="2206.85" dur="2.35"> နှင့်သင်တို့ပတ်လည်အခြားလူတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲ။ >
< start="2209.2" dur="3.15"> ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့သဘောထားကကောင်းရင်မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုက ၀ မ်းမြောက်ဖို့ပဲ။ >
< start="2212.35" dur="1.76"> ခင်ဗျားပြောတာကတောက်ပတဲ့ဘက်ကြည့်ရအောင်။ >
< start="2214.11" dur="3.09"> ဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်နိုင်သောအရာများကိုရှာကြစို့။ >
< start="2217.2" dur="2.15"> ပြီးတော့အဲဒါကိုတောင်မှဆိုးတာတောင်မှသတိထားကြည့်ကြစို့၊ >
< start="2219.35" dur="2.88"> ဘုရားသခင်သည်မကောင်းမှုမှအကောင်းကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ >
< start="2222.23" dur="2.29"> ဒါကြောင့်တစ် ဦး သဘောထားကိုညှိနှိုင်းမှုလုပ်ပါ။ >
< start="2224.52" dur="3.25"> ငါဒီအကျပ်အတည်းအတွက်ခါးသီးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ >
< start="2227.77" dur="3.23"> ငါဒီအကျပ်အတည်းအတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ >
< start="2231" dur="4.39"> ငါရွေးတော့မယ်၊ အဲဒါငါ့ရဲ့ရွှင်လန်းမှုပဲ။ >
< start="2235.39" dur="3.41"> အိုကေ၊ နံပါတ်နှစ်၊ ဒုတိယ R ကတောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်။ >
< start="2238.8" dur="4.08"> ထို့အပြင်၎င်းမှာဥာဏ်ပညာအတွက်ဘုရားသခင်ကိုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ >
< start="2242.88" dur="3.29"> ဒါကသင်အကျပ်အတည်းကြုံနေရသည့်အချိန်တွင်သင်လုပ်ချင်သောအရာဖြစ်သည်။ >
< start="2246.17" dur="2.39"> သငျသညျဘုရားသခငျသညျဉာဏျပညာကိုတောင်းချင်တယ်။ >
< start="2248.56" dur="2.1"> ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အကယ်၍ သင်သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသတင်းစကားကိုနားထောင်ခဲ့လျှင်၊ >
< start="2250.66" dur="2.72"> အကယ်၍ သင်လွဲချော်ခဲ့လျှင်၊ အွန်လိုင်းသို့ပြန် သွား၍ ထိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ပါ >
< start="2253.38" dur="5"> ကြောက်စရာမလိုဘဲဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ချိုင့်ဝှမ်းတစ်လျှောက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ >
< start="2260.09" dur="2.15"> ဒါဟာသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။ >
< start="2262.24" dur="2.733"> ထိုအခါမူကား၊ >
< start="2265.89" dur="2.13"> တဖန်သင်တို့ကဥာဏ်ပညာကိုတောင်း။ ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလိမ့်မည် >
< start="2268.02" dur="1.51"> သင်၏ပြaboutနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုတောင်းပါ။ >
< start="2269.53" dur="2.99"> အခန်းငယ် ၇ တွင်ဤအချက်ကိုယာကုပ် ၁ ၌ဖော်ပြထားသည်။ >
< start="2272.52" dur="4.83"> အကယ်၍ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်သင်တို့တွင်မည်သူသည်တွေ့ဆုံရမည်ကိုမသိပါ >
< start="2277.35" dur="4.05"> မည်သည့်အထူးပြproblemနာမဆိုဤသည်မှာ Phillips ဘာသာပြန်ချက်မဟုတ်ပါ။ >
< start="2281.4" dur="2.24"> ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၌သင်တို့ကိုမတွေ့ဆုံရန်ဘယ်လိုမသိလျှင် >
< start="2283.64" dur="3.44"> သငျသညျသာဘုရားသခင်အားမေးမြန်းဖို့ရှိသည်မဆိုအထူးသဖြင့်ပြproblemနာ >
< start="2287.08" dur="2.65"> ခပ်သိမ်းသောသူတို့အားစေတနာစိတ်နှင့်ပေးသနားတော်မူသောဘုရားကို၊ >
< start="2289.73" dur="2.6"> သူတို့ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရစေဘဲ >
< start="2292.33" dur="3.45"> ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိမယ်ဆိုတာသင်သေချာသိနိုင်တယ် >
< start="2295.78" dur="1.963"> မင်းကိုပေးမယ် >
< start="2298.65" dur="2.18"> သူတို့ကဘာလို့အရာအားလုံးကိုဥာဏ်ပညာကိုတောင်းမှာလဲလို့ပြောတယ် >
< start="2300.83" dur="1.35"> ပြaနာအလယ်မှာလား? >
< start="2303.29" dur="2.07"> ဒါကြောင့်သင်ကနေသင်ယူပါ။ >
< start="2305.36" dur="1.57"> ဒီတော့မင်းပြtheနာကနေသင်ယူနိုင်တယ် >
< start="2306.93" dur="1.48"> ဒါကြောင့်မင်းကပညာကိုတောင်းတယ်။ >
< start="2308.41" dur="4.26"> ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဘာလို့မမေးတော့တာလဲ။ >
< start="2312.67" dur="3.04"> ဘာဖြစ်လို့ဒီဖြစ်ပျက်နေရတာလဲ၊ >
< start="2315.71" dur="1.45"> မင်းဘာငါ့ကိုသင်ယူစေချင်တာလဲ >
< start="2318.09" dur="1.92"> ငါ့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ >
< start="2320.01" dur="2.27"> ဒီကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုကြီးထွားနိုင်မလဲ။ >
< start="2322.28" dur="2.17"> ငါဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့မိန်းမဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ >
< start="2324.45" dur="4.51"> ဒီအကျပ်အတည်းကနေငါဘယ်လိုလူကောင်းဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ >
< start="2328.96" dur="1.32"> ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခံရပါတယ် >
< start="2330.28" dur="1.53"> ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါစိုးရိမ်မှာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="2331.81" dur="1.71"> အဘယ်ကြောင့်တကယ်ပင်အရေးမပါဘူး။ >
< start="2333.52" dur="3.77"> အဘယ်အရာကအရေးပါသည်၊ ငါဖြစ်လာမည်၊ >
< start="2337.29" dur="3.7"> ငါဒီအခြေအနေကနေဘာတွေသင်ယူရမလဲ။ >
< start="2340.99" dur="2.71"> ပြီးတော့အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့၊ မင်းကဥာဏ်ပညာကိုတောင်းဖို့လိုတယ်။ >
< start="2343.7" dur="2.56"> ဒါကြောင့်မင်းကမင်းလိုအပ်တာတွေကိုမင်းလိုချင်ရင်ဘုရားသခင်ဆီတောင်းပန်ပါ၊ >
< start="2346.26" dur="1.61"> မင်းကိုဘုရားသခင်ပေးမယ် >
< start="2347.87" dur="2.2"> အိုဘုရားသခင်၊ မင်းကိုအမေလိုလိုပြောတယ် >
< start="2350.07" dur="3.23"> ငါ့ကလေးတွေနောက်လအတွက်အိမ်ပြန်ရောက်နေပြီ >
< start="2353.3" dur="2.22"> ကျွန်ုပ်သည်ဥာဏ်ပညာကိုဖခင်တစ် ဦး အနေနှင့်လိုအပ်သည်။ >
< start="2355.52" dur="3.48"> ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုအန္တရာယ်ပြုသည့်အခါကျွန်ုပ်မည်သို့ ဦး ဆောင်ရမည်နည်း >
< start="2359" dur="1.553"> ငါအခုအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလား >
< start="2362.05" dur="1.45"> ဘုရားသခင်အားဥာဏ်ပညာကိုတောင်းခံပါ။ >
< start="2363.5" dur="1.84"> ဘာကြောင့်လို့မမေးဘဲဘာကိုမေးသလဲ >
< start="2365.34" dur="2.99"> ဒါကြောင့် ဦး ဆုံးသင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ကောင်းမြတ်သောသဘောထားရရှိခြင်း >
< start="2368.33" dur="3.14"> ငါပြtheနာအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်မဟုတ်လား >
< start="2371.47" dur="3.14"> ဒါပေမယ့်ငါပြtheနာအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ >
< start="2374.61" dur="2.92"> ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝကနို့စို့ရင်တောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းပါပဲ။ >
< start="2377.53" dur="2.137"> ဒါကြောင့်ငါကဒီစီးရီးကိုခေါ်တာပါ >
< start="2379.667" dur="5"> "ဘဝကမရှိရင်အလုပ်လုပ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်း။ " >
< start="2385.41" dur="1.473"> ဘဝအလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ >
< start="2387.96" dur="1.69"> ဒါကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်တောင်းပါ၏ >
< start="2389.65" dur="4.32"> ဂျိမ်းစ်ပြောတာတတိယအချက်ကအနားယူပါ။ >
< start="2393.97" dur="4.83"> ဟုတ်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မထဲ့ပါနဲ့ >
< start="2398.8" dur="3.86"> အားလုံးအာရုံကြောတစ်ခုအမှိုက်ပုံ၌တည်၏။ >
< start="2402.66" dur="2.64"> ဒါကြောင့်သင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးစိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်ရပါနဲ့။ >
< start="2405.3" dur="1.33"> အနာဂတ်အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ >
< start="2406.63" dur="2.83"> ဘုရားသခင်ကမင်းကိုဂရုစိုက်မယ်၊ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောတယ်။ >
< start="2409.46" dur="2.42"> အကောင်းဆုံးအရာကိုသိရန်ဘုရားသခင်ကိုသင်ယုံကြည်သည်။ >
< start="2411.88" dur="2.17"> သင်ကသူနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည် >
< start="2414.05" dur="4.84"> သင်ဖြတ်သန်းနေသည့်အခြေအနေကိုမတိုစေပါနှင့် >
< start="2418.89" dur="3.07"> ဘုရားသခင်ပဲ၊ ငါဖြေတော့မယ်။ >
< start="2421.96" dur="2.28"> ငါသံသယမဟုတ်ဘူး။ >
< start="2424.24" dur="1.87"> ငါသံသယမဟုတ်ဘူး။ >
< start="2426.11" dur="2.76"> ငါသည်ဤအခြေအနေ၌သင်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါလိမ့်မယ်။ >
< start="2428.87" dur="3.15"> အငယ် ၈ ကငါတို့ကြည့်ရလိမ့်မယ်။ >
< start="2432.02" dur="1.26"> ကောင်းပြီ, ငါတို့တစ်မိနစ်အတွင်းနောက်ထပ်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ >
< start="2433.28" dur="5"> သို့သော်အခန်းငယ် ၈ ကဤသို့ဆိုထားသည် - သို့သော်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သင်မေးရမည် >
< start="2438.9" dur="2.49"> လျှို့ဝှက်သံသယမရှိဘဲ။ >
< start="2441.39" dur="1.86"> စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘာလုပ်နေလဲ။ >
< start="2443.25" dur="1.57"> ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းပါ။ >
< start="2444.82" dur="2.07"> တဖန်တုံအိုဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်သည်ဥာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံပါ၏ >
< start="2446.89" dur="1.26"> မင်းငါ့ကိုဉာဏ်ပညာပေးမယ်။ >
< start="2448.15" dur="2.89"> မင်းငါ့ကိုပညာပေးနေတာမင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ် >
< start="2451.04" dur="3.06"> မထိတ်လန့်နဲ့၊ >
< start="2454.1" dur="2.57"> သို့ရာတွင်၊ >
< start="2456.67" dur="5"> ငါပြောတဲ့အတိုင်းငါကျမ်းစာပြောတယ် >
< start="2461.67" dur="3.24"> ပြproblemsနာများစွာကိုပြောခဲ့တယ်။ >
< start="2464.91" dur="1.8"> မင်းသိတယ်၊ ငါတို့ကသူတို့ရောင်စုံတွေပြောကြတယ်၊ >
< start="2466.71" dur="2.23"> ပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ >
< start="2468.94" dur="2.81"> ထိုစကားလုံးကိုဂရိလိုပြproblemနာများစွာ၊ >
< start="2471.75" dur="3.11"> ပထမပေတရုမှာစကားလုံးအတူတူပဲ >
< start="2474.86" dur="1.97"> အခန်းကြီးလေး၊ >
< start="2476.83" dur="4.11"> ဘုရားသခင်သည်သင့်အားပေးကမ်းရန်ကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ >
< start="2480.94" dur="3.35"> ဘုရားသခင်၏အမျိုးမျိုးသောကျေးဇူးတော်။ >
< start="2484.29" dur="5"> ဒါဟာစိန်လိုမျိုးအရောင်စုံစုံ၊ >
< start="2489.339" dur="1.694"> သူအဲဒီမှာဘာပြောနေတာလဲ >
< start="2492.28" dur="2.08"> သင်၌ရှိသောပြproblemနာတိုင်းအတွက်၊ >
< start="2494.36" dur="2.87"> ရရှိနိုင်သည့်ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်ရှိသည်။ >
< start="2497.23" dur="5"> ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကိုမျိုးသည် >
< start="2502.74" dur="4.5"> နှင့်အခက်အခဲ, ကျေးဇူးတော်နှင့်သနားခြင်းကရုဏာစိတ်တစ်မျိုးရှိပါတယ် >
< start="2507.24" dur="2.25"> ဘုရားသခင်ကသင့်အားပေးလိုသောခွန်အားဖြစ်သည် >
< start="2509.49" dur="2.05"> ကြောင်းအထူးသဖြင့်ပြproblemနာကိုက်ညီရန်။ >
< start="2511.54" dur="2.04"> ခင်ဗျားဟာဒါအတွက်ကျေးဇူးလိုတယ်၊ >
< start="2513.58" dur="1"> မင်းဒါကိုလုပ်ဖို့လိုတယ် >
< start="2514.58" dur="3.76"> ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်၏ကျေးဇူးတော်သည်များပြားလှသည်ဟုဆိုသည် >
< start="2518.34" dur="1.99"> သင်ရင်ဆိုင်နေရသောပြproblemsနာများအဖြစ်။ >
< start="2520.33" dur="1.27"> ဒါဆိုငါဘာပြောနေတာလဲ >
< start="2521.6" dur="1.74"> မင်းရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ပြallနာအားလုံးကိုငါပြောနေတယ်၊ >
< start="2523.34" dur="2.44"> ဒီ COVID အကျပ်အတည်းအပါအဝင် >
< start="2525.78" dur="4.03"> မာရ်နတ်သည်ဤပြproblemsနာများအားဖြင့်သင်တို့ကိုအနိုင်ယူရန်ကိုဆိုလိုသည်။ >
< start="2529.81" dur="4.41"> သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ဤပြproblemsနာများအားဖြင့်သင့်ကိုတိုးတက်စေလိုသည်။ >
< start="2534.22" dur="3.543"> စာတန်သည်သင့်အားအနိုင်ယူလိုသော်လည်းဘုရားသခင်သည်သင့်အားတိုးတက်စေလိုသည်။ >
< start="2539.44" dur="2.12"> အခုဘဝပြintoနာတွေဖြစ်လာပြီ >
< start="2541.56" dur="3.34"> မင်းကိုပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်မဖြစ်စေရဘူး။ >
< start="2544.9" dur="2.51"> လူအများစုကသူတို့ကိုခါးသီးတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်။ >
< start="2547.41" dur="3.28"> ဒါဟာသင့်ကိုလူကောင်းတစ်ယောက်အလိုအလျောက်မဖြစ်စေဘူး။ >
< start="2550.69" dur="2.96"> သင်၏ခြားနားမှုကသင်၏သဘောထားဖြစ်သည်။ >
< start="2553.65" dur="2.86"> နောက်တစ်ခုသတိရစရာနောက်ထပ်တစ်ခုငါပေးချင်တယ်။ >
< start="2556.51" dur="3.07"> နံပါတ်လေး၊ မှတ်မိရမယ့်စတုတ် >
< start="2559.58" dur="3.75"> သငျသညျပြproblemsနာများကိုဖြတ်သန်းသွားသည့်အခါသတိရဖို့ဖြစ်ပါတယ် >
< start="2563.33" dur="1.99"> ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များ။ >
< start="2565.32" dur="1.84"> ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များကိုသတိရပါ။ >
< start="2567.16" dur="1.28"> ဒါကအခန်းငယ် ၁၂ မှာပါ။ >
< start="2568.44" dur="1.52"> ဒီကတိကိုဖတ်ပြပါရစေ >
< start="2569.96" dur="2.363"> ယာကုပ်အခန်းကြီး ၁၊ >
< start="2573.55" dur="5"> စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုသည်းခံသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ >
< start="2579.84" dur="2.67"> သူစမ်းသပ်ခံရပ်သောအခါ, >
< start="2582.51" dur="5"> ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအသက်သရဖူကိုရလိမ့်မည်။ >
< start="2587.82" dur="2.75"> သူ့ကိုချစ်သောသူတို့၌စကားလုံးရှိ၏။ >
< start="2590.57" dur="0.833"> နောက်တစ်ခါထပ်ဖတ်ပြပါရစေ >
< start="2591.403" dur="2.057"> မင်းကိုအရမ်းနီးကပ်စွာနားထောင်စေချင်တယ် >
< start="2593.46" dur="5"> စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုသည်းခံသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ >
< start="2598.84" dur="3.36"> သူကအခက်အခဲတွေကိုကိုင်တွယ်တယ်၊ >
< start="2602.2" dur="2.12"> ငါတို့အခုအခြေအနေရောက်နေပြီ။ >
< start="2604.32" dur="3.67"> သည်းခံနိုင်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ >
< start="2607.99" dur="3.87"> ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူ၊ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုခံစဉ်တွင်၊ >
< start="2611.86" dur="3.12"> အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ >
< start="2614.98" dur="2.72"> နောက်ဘက်မှာတော့ဒီစမ်းသပ်မှုကမပြီးသေးဘူး။ >
< start="2617.7" dur="1.4"> အဲဒါပြီးပြီ။ >
< start="2619.1" dur="2.07"> ဥမင်၏အခြားအဆုံးတွင်သင်ထွက်လာလိမ့်မည်။ >
< start="2621.17" dur="4.41"> သင်သည်အသက်သရဖူကိုရလိမ့်မည်။ >
< start="2625.58" dur="3.38"> ကောင်းပြီ၊ ငါဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာတောင်မသိဘူး၊ >
< start="2628.96" dur="2.7"> ဘုရားသခင်ကတိထားတော်မူသောအသက်သရဖူ >
< start="2631.66" dur="2.373"> ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့အားပေးလိုက်သတည်း။ >
< start="2635.73" dur="2.32"> ဒါဟာသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ >
< start="2638.05" dur="2.92"> ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာကိုယုံကြည်ရန်သင့်ရွေးချယ်မှုသည် >
< start="2640.97" dur="1.72"> သံသယ၏။ >
< start="2642.69" dur="4.21"> သင်၏အခြေအနေမှသင့်အားကူညီရန်ဘုရားသခင်ထံဉာဏ်ပညာတောင်းခံပါ။ >
< start="2646.9" dur="3.23"> ပြီးတော့ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ထံတောင်းပါ။ >
< start="2650.13" dur="2.27"> ဘုရားသခင်ပြောပါ၊ ငါအရှုံးမပေးဘူး။ >
< start="2652.4" dur="1.793"> ထိုအရာသည်လွန်သွားလိမ့်မည်။ >
< start="2655.329" dur="2.111"> မင်းအကြိုက်ဆုံးကမင်းကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကမေးခဲ့တယ် >
< start="2657.44" dur="0.833"> ကျမ်းချက်လား။ >
< start="2658.273" dur="1.297"> ပြောတာကပြည့်စုံလာတယ် >
< start="2659.57" dur="1.273"> ဒီတော့ဘာကြောင့်ဒီကျမ်းချက်ကိုမင်းကြိုက်ရတာလဲ။ >
< start="2660.843" dur="2.687"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြproblemsနာတွေပေါ်လာရင်သူတို့မနေချင်တော့ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ >
< start="2663.53" dur="1.194"> သူတို့ကလာတယ်။ >
< start="2665.84" dur="2.88"> ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်မှန်ကန်ပါသည်။ >
< start="2668.72" dur="3.983"> ဆက်နေရန်မလာ၊ >
< start="2673.56" dur="2.24"> ယခုငါဒီအတွေးအားဖြင့်အနီးကပ်ကဘာလဲဆိုတာ။ >
< start="2675.8" dur="3.77"> တစ် ဦး ကအကျပ်အတည်းပြproblemsနာများဖန်တီးမသာ။ >
< start="2679.57" dur="3.23"> ဒါဟာမကြာခဏသူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြမကြာခဏသူတို့ကိုဖော်ပြသည်။ >
< start="2682.8" dur="4.563"> ဤပြcrisisနာသည်သင်၏အိမ်ထောင်တွင်အက်ကြောင်းအချို့ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ >
< start="2688.77" dur="2.76"> ဤအကျပ်အတည်းသည်အက်ကြောင်းအချို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည် >
< start="2691.53" dur="1.823"> ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေး၌ >
< start="2694.26" dur="5"> ဒီအကျပ်အတည်းကမင်းရဲ့ဘဝပုံစံထဲမှာအက်ကြောင်းတချို့ကိုဖော်ပြပေးတယ်။ >
< start="2699.29" dur="2.593"> မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အရမ်းခက်အောင်တွန်းပို့နေတယ်ဆိုတာ >
< start="2702.949" dur="3.181"> ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုစကားပြောခွင့်ပြုပါ >
< start="2706.13" dur="5"> မင်းဘဝမှာဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုသလဲ >
< start="2711.45" dur="1.7"> ငါသည်သင်တို့ကိုဤရက်သတ္တပတ်စဉ်းစားရန်လိုသည်, >
< start="2713.15" dur="3.44"> ငါ့ကိုလက်တွေ့ကျတဲ့အဆင့်တွေပေးခွင့်ပေးပါလား။ >
< start="2716.59" dur="2.47"> လက်တွေ့ခြေလှမ်းများ၊ နံပါတ်တစ်၊ >
< start="2719.06" dur="5"> ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကိုနားထောင်ရန်အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်အားပေးဖို့။ >
< start="2724.55" dur="1.25"> မင်းအဲဒီလိုလုပ်မှာလား >
< start="2725.8" dur="3.603"> သင်ဤ link ပေါ်တွင် pass နှင့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး မှပို့ပေးမလား? >
< start="2729.403" dur="3.337"> အကယ်၍ ဤအရာသည်သင့်ကိုအားပေးခဲ့လျှင်၎င်းကို ဆက်၍ >
< start="2732.74" dur="2.3"> နှင့်ယခုအပတ်အတွက်အားပေးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ >
< start="2735.04" dur="4.84"> ဤအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူတိုင်းအားပေးမှုလိုအပ်သည်။ >
< start="2739.88" dur="1.779"> ဒါကြောင့်သူတို့ကို link တစ်ခုပို့ပါ။ >
< start="2741.659" dur="5"> လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိခဲ့စဉ်က၊ >
< start="2747.52" dur="3.11"> Lake Forest နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြား Saddleback ကျောင်းဝင်းအားလုံးတွင် \_ t >
< start="2750.63" dur="3.53"> ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာလူပေါင်း ၃၀၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။ >
< start="2754.16" dur="4.14"> ဒါပေမယ့်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပယ်ဖျက်ခဲ့ရတယ် >
< start="2758.3" dur="1.87"> ပြီးတော့ငါတို့အားလုံးအွန်လိုင်းမှာကြည့်ခဲ့ရတယ်၊ >
< start="2760.17" dur="3.38"> လူတိုင်းသည်သင်၏အုပ်စုငယ်သို့ သွား၍ သင်၏အိမ်နီးချင်းများကိုဖိတ်ကြားသည် >
< start="2763.55" dur="2.94"> သင်၏မိတ်ဆွေများကိုသင်၏အုပ်စုငယ်သို့ဖိတ်ကြားပါ။ >
< start="2766.49" dur="0.95"> ငါတို့မှာ ၁၈၁၀၀၀ ရှိတယ် >
< start="2767.44" dur="5"> ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များ၏ ISP များသည် ၀ န်ဆောင်မှုသို့ချိတ်ဆက်ထားသည်။ >
< start="2776.3" dur="3.41"> ဆိုလိုသည်မှာလူ ဦး ရေသန်းတစ်ဝက်ခန့်ဖြစ်နိုင်သည် >
< start="2779.71" dur="1.96"> ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုစောင့်ကြည့်။ >
< start="2781.67" dur="3.04"> လူ ဦး ရေသန်းတစ်ဝက်ခွဲ။ >
< start="2784.71" dur="3.63"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကတခြားတစ်ယောက်ယောက်ကိုကြည့်ဖို့ပြောလိုက်လို့ပါ။ >
< start="2788.34" dur="4.56"> ပြီးတော့ငါသတင်းကောင်းကိုသက်သေခံရန်သင့်အားအားပေးချင်ပါတယ် >
< start="2792.9" dur="2.79"> သတင်းကောင်းကိုအလွန်အမင်းလိုအပ်နေသောကမ္ဘာတွင်ယခုအပတ်တွင်။ >
< start="2795.69" dur="1.4"> လူတွေကဒါကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ် >
< start="2797.09" dur="1.18"> link တစ်ခုပို့ပါ >
< start="2798.27" dur="5"> ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာလူတစ်သန်းကိုကျွန်တော်အားပေးနိုင်ပါတယ် >
< start="2803.29" dur="3.8"> ငါတို့ရှိသမျှသည်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်, အဆင်ပြေ? >
< start="2807.09" dur="3.16"> နံပါတ် (၂)၊ သင်အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုတွင်ပါဝင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့တော့မဟုတ်ပါ >
< start="2810.25" dur="3.45"> အနည်းဆုံးယခုလတွေ့ဆုံရန်နိုင်ဖြစ်မည်, သေချာပါတယ်။ >
< start="2813.7" dur="3.95"> ဒါကြောင့်ငါက virtual အစည်းအဝေးတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင့်အားအားပေးလိမ့်မည်။ >
< start="2817.65" dur="1.79"> သငျသညျအွန်လိုင်းအုပ်စုရှိနိုင်ပါသည်။ >
< start="2819.44" dur="0.97"> မင်းဘယ်လိုလုပ်လဲ >
< start="2820.41" dur="2.63"> ကောင်းပြီ, Zoom နဲ့တူထုတ်ကုန်ထွက်ရှိပါတယ်။ >
< start="2823.04" dur="2.52"> သင်ကြည့်ချင်တယ်၊ ချဲ့ကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ >
< start="2825.56" dur="2.56"> ပြီးတော့အဲဒီမှာသင်သွားပြီး Zoom ရဖို့လူတိုင်းကိုပြောနိုင်တယ် >
< start="2828.12" dur="1.74"> သူတို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာမှာ \_ t >
< start="2829.86" dur="3.58"> ပြီးတော့လူခြောက်ယောက်၊ ရှစ်ယောက်၊ ၁၀ ယောက်ကိုသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ >
< start="2833.44" dur="3.15"> သင်သည်ဤအုပ်စုတွင် Zoom တွင်ယခုအပတ်သင်၏အုပ်စုရှိနိုင်သည်။ >
< start="2836.59" dur="3.19"> ပြီးတော့ Facebook Live လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုတွေ့နိုင်တယ်၊ >
< start="2839.78" dur="2.933"> ဒါမှမဟုတ်ဒါကတခြားသူတွေနဲ့တူတယ်၊ >
< start="2844.84" dur="5"> FaceTime ကိုကြည့်လိုက်ရင် iPhone မှာဘာလဲ >
< start="2850.12" dur="1.82"> ကောင်းပြီ၊ အုပ်စုကြီးတစ်ခုနဲ့မင်းမလုပ်နိုင်ဘူး၊ >
< start="2851.94" dur="2.39"> သင်မူကားလူတစ် ဦး နှင့်ပြုလုပ်နိူင်သည်။ >
< start="2854.33" dur="3.52"> ဒါ့အပြင်နည်းပညာကတစ်ဆင့်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်တွန်းပါ။ >
< start="2857.85" dur="2.66"> ယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းပညာမရရှိနိုင်ပါ။ >
< start="2860.51" dur="3.59"> ထို့ကြောင့်အုပ်စုငယ်တစ်ခု၏ virtual group အတွက် Zoom ကိုကြည့်ပါ။ >
< start="2864.1" dur="1.17"> တကယ်တော့ဒီမှာအွန်လိုင်း >
< start="2865.27" dur="1.85"> သငျသညျလညျးအခြို့သောသတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သည်။ >
< start="2867.12" dur="3.244"> နံပါတ် (၃)၊ မင်းကအုပ်စုငယ်တစ်ခုမှာမနေဘူးဆိုရင်၊ >
< start="2870.364" dur="4.096"> ငါဒီတစ်ပတ်မှာအွန်လိုင်းအုပ်စုထဲကို ၀ င်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါ့မယ်။ >
< start="2874.46" dur="2.33"> သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ >
< start="2880.015" dur="4.815"> PastorRick @ saddleback စကားလုံးတစ်လုံး၊ SADDLEBACK >
< start="2884.83" dur="2.81"> saddleback.com, ငါမင်းကိုဆက်သွယ်ပေးမယ် >
< start="2887.64" dur="2.57"> အားလုံးအွန်လိုင်းအုပ်စုတစ်စုမှ? >
< start="2890.21" dur="2.79"> သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် Saddleback ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ပါဝင်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ >
< start="2893" dur="2.84"> ငါပေးပို့နေကြောင်းသင်၏နေ့စဉ်သတင်းလွှာကိုဖတ်ရှုဖို့ >
< start="2895.84" dur="2.03"> ဒီအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းနေ့တိုင်း။ >
< start="2897.87" dur="2.1"> ၎င်းကို "Saddleback at Home" ဟုခေါ်သည်။ >
< start="2899.97" dur="3.5"> အကြံပေးချက်တွေရတယ်၊ အားပေးစကားတွေရတယ်။ >
< start="2903.47" dur="2.14"> သင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့သတင်းရှိတယ် >
< start="2905.61" dur="1.56"> အလွန်လက်တွေ့ကျသောအရာ >
< start="2907.17" dur="2.17"> နေ့တိုင်းမင်းနဲ့ဆက်သွယ်ချင်တယ် >
< start="2909.34" dur="1.32"> ရယူပါ "အိမ်မှာ Saddleback ။ " >
< start="2910.66" dur="2.69"> သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာမရှိရင် >
< start="2913.35" dur="1.42"> ထို့နောက်သင်ကမရတော့ပါ။ >
< start="2914.77" dur="2.46"> ပြီးတော့မင်းကိုမင်းရဲ့အီးမေးလ်ပို့လို့ရတယ် >
< start="2917.23" dur="4.41"> PastorRick@saddleback.com သို့သွားပါ၊ >
< start="2921.64" dur="2.37"> မင်းကနေ့စဉ်ဆက်သွယ်မှုကိုရလိမ့်မယ်။ >
< start="2924.01" dur="3.76"> နေ့စဉ် "နေအိမ်ထဲမှာ Saddleback" သတင်းလွှာ။ >
< start="2927.77" dur="2.09"> ငါဆုတောင်းပဌနာမပြုမီနီးကပ်ကဘာလဲဆိုတာ >
< start="2929.86" dur="2.15"> မင်းကိုငါဘယ်လောက်အထိချစ်လဲ >
< start="2932.01" dur="1.72"> နေ့တိုင်းမင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးနေတယ်၊ >
< start="2933.73" dur="1.9"> ငါသည်လည်းသင်တို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာပြုမည်။ >
< start="2935.63" dur="2.68"> ကျနော်တို့အတူတူဒီမှတဆင့်ရလိမ့်မယ်။ >
< start="2938.31" dur="2.33"> ဒါကဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးမဟုတ်ပါ။ >
< start="2940.64" dur="3.4"> ဘုရားသခင်သည်ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာရှိတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ >
< start="2944.04" dur="4.16"> သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေရန်၊ >
< start="2948.2" dur="1.8"> အဘယ်သူဖြစ်ပျက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ >
< start="2950" dur="3.07"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာအားလုံးမှဝိညာဉ်ရေးနိူးထမှုရရှိနိုင်သည် >
< start="2953.07" dur="2.66"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကဘုရားသခင်ကိုမကြာခဏလှည့်လာကြတယ် >
< start="2955.73" dur="1.87"> သူတို့ခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါ။ >
< start="2957.6" dur="1.09"> မင်းအတွက်ဆုတောင်းခွင့်ပေးပါ >
< start="2958.69" dur="1.66"> ဖခင်၊ လူအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="2960.35" dur="1.48"> အခုဘယ်သူနားထောင်နေလဲ >
< start="2961.83" dur="5"> ယာကုပ်အခန်းကြီး ၁ ပါသတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျှောက်ကြပါစို့။ >
< start="2967.39" dur="2.78"> ပထမခြောက်ခု၊ ခုနစ်ခု။ >
< start="2970.17" dur="4.25"> ငါတို့ပြproblemsနာတွေလာတာ၊ သူတို့ဖြစ်ပျက်လာမယ်ဆိုတာလေ့လာကြည့်ရအောင်၊ >
< start="2974.42" dur="5"> သူတို့ကပြောင်းလို့ရတယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်၊ >
< start="2979.81" dur="2.41"> မင်းတို့ကိုမင်းတို့ယုံကြည်စိတ်ချမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘ ၀ မှာကောင်းအောင်အသုံးချပါ။ >
< start="2982.22" dur="1.49"> သံသယမဖြစ်ဖို့ကူညီပါ။ >
< start="2983.71" dur="4"> ဝမ်းမြောက်ရန်၊ သခင်တောင်းခံရန်မစမူပါ။ >
< start="2987.71" dur="3.53"> နှင့်သင်၏ကတိတော်များကိုသတိရ။ >
< start="2991.24" dur="3.45"> လူတိုင်းအတွက်ကျန်းမာတဲ့ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဖို့ဆုတောင်းပေးတယ်။ >
< start="2994.69" dur="2.87"> ယေရှုနာမ၌အာမင်။ >
< start="2997.56" dur="1.07"> လူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ >
< start="2998.63" dur="1.823"> ဒီဟာကိုအခြားတစ်ယောက်ယောက်ဆီသို့ကူးပေးပါ။ >